မျှော်လင့် နေဆဲဘဲ: ခင်ရွှေလှိုင် မပ ၀၀၃၆ မှတ်တမ်းများ(1,2,3,4,5,6,7,8)
Posted by admin on March 27, 2012 28 Comments
ကျောင်းသားတပ်မတော်ဟာ နဖူးပေါ် စာတမ်းထိုးမလာကြတဲ့ ‘မ’ တထောင်သားတွေကြောင့် မိအေးနှစ်ခါမက နာခဲ့ရတဲ့ အဖွဲ့အစည်းပါ။ အင်အားစုတစု ဖြိုခွဲခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာ ကျောင်းသားတပ်မတော်အနေနဲ့ရော တော်လှန်ရေးအတွက်ပါ ကြီး မားတဲ့ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုတခု၊ စနစ်ဆိုးတခုအောက်က မိခင်တွေအတွက်တော့ သားသမီးရတနာများအား တူညီသော ဆုံးရှုံး မှု၊ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေမှာ အတွင်းကျကျအနေအထားမျိုးနဲ့ သိရှိပါဝင်ခဲ့သူတဦး မဟုတ်သလို ဘယ်လိုတွေ စစ်ဆေးမေး မြန်းခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရသူတဦး မဟုတ်ခဲ့ပေမဲ့ အရိုးရှင်းဆုံးအနေအထားကနေ အစအဆုံး ကြုံတွေ့ ခဲ့ရတဲ့ သာမန် ရဲမေတယောက်အနေနဲ့ ကျမရဲ့အမြင်ကို ပြောပြခွင့်ရှိမယ်ထင်ပါတယ်၊ မပြောခင်မှာ ကျမရဲ့ နောက်ခံ သ မိုင်းကြောင်းကို သိချင်တဲ့သူတွေ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။
အမေပေးထားတဲ့ ကျမရဲ့နာမည်က ခင်ရွှေလှိုင်၊ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့တလျှောက် အခုချိန်ထိ ဒီနာမည်နဲ့ပဲနေပါတယ်။ မမွေးခင် ကတည်းက “လူထု” ဆိုတဲ့ စကားလုံးက ကျမနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသားပါ။ အဲဒီ စကားလုံးလေးကို ကျမအဖေ မြတ်နိုးလွန်းလို့ လူထု ဦးလှနဲ့ဒေါ်အမာတို့ဆီက ခွင့်ပြုချက်တောင်းပြီး မိသားစုနာမည်အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့တာမို့ မန္တလေး၊ နန်းရှေ့၊ လူထုမိ သားစုကလို့ သိလိုရင် မေးကြည့်နိုင်ပါတယ်။
၈၈ မှာ နန်းရှေ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂအနေနဲ့ မန္တလေးတက္ကသိုလ် (ပင်မ) မှာ ပူးပေါင်းပါဝင်ချီတက် ဆန္ဒပြခဲ့ တယ်၊ အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက် “အမျိုးသားနိုင်ငံရေးကျောင်းသားလူငယ်အဖွဲ့ (အနကလ)” ရဲ့ ဆိုင်းပုဒ်အောက်မှာ အမျိုးသား နိုင်ငံရေးတပ်ပေါင်းစု (မနတ)၊ လူ့ဘောင်သစ်၊ ဒီမိုကရက်တစ် ဘွဲ့ရကျောင်းသားဟောင်းများအဖွဲ့ (ဂေါစတာ) တို့နဲ့ လက်တွဲပြီး အဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှု။ ဗကသ လှုပ်ရှားမှု။ ယူဂျီလုပ်ငန်းတချို့မှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ တောထဲမှာ ဘယ်လိုနေခဲ့သလဲ သိလိုရင်တော့ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း (၄၀၁) တပ်ရင်းက ရဲဘော်တွေ။ မြောက်ပိုင်းကချင် ကျောင်း သားတပ်မတော်က ရဲဘော် ရဲမေတွေကို မေးကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ကေအိုင်အေ အပစ်အခတ်ရပ်ဆဲပြီးနောက် (၁၉၉၆ ၉၇) မှာ ကျမ အမေရဲ့ နောက်ဆုံးဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းဖို့ အိမ်ကလာ ခေါ်တဲ့အတွက် မြောက်ပိုင်းမှာ လုပ်သက် (၅) နှစ်ပြည့် ရဲမေများကို တရားဝင် အိမ်ပြန်ခွင့်ပြုချက်အရ အမှောင်ပြန်ဝင်ခဲ့ တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ မန္တလေးလှုပ်ရှားမှုရဲ့ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တဦး ကျမနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်၊ “မင်းမှာလည်း တာဝန်ရှိတယ် ဘာလို့မတားမြစ်ခဲ့တာလဲ” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းအပေါ် “ကိုယ်တိုင်လာနေကြည့်မှပဲ သိနိုင်မယ်” လို့ ဖြေခဲ့တယ်။
“မင်းရဲ့အမြင်တွေကို ရေးပေးနိုင်မလား” လို့ တောင်းခံလာခဲ့အပေါ် “အခုချိန်မှာ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဘာမှ ရေးမပေးနိုင်ဘူး” လို့ဖြေခဲ့တယ်၊ သိချင်လို့ မေးလာတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုတော့ “တချို့လူတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်” လို့ ဖြေခဲ့တယ်။
၁၉၉၈ မှာ အိန္ဒိယ (မဏီပူကန့်) ကို ရောက်တယ် (လူလိမ္မာ အခါခါမိုက်)၊ အေဘီ (အနောက်ပိုင်း) တာဝန်ရှိသူက ရဲမေ လုပ်မလား အိမ်ထောင်သည်လုပ်မလား မေးခဲ့တဲ့အပေါ် အထဲကိုပြန်ဝင်ခဲ့တဲ့သူတယောက်အဖြစ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို လိပ်ပြာ မသန့်တဲ့အတွက် အိမ်ထောင်သည်ကို ရွေးချယ်ခဲ့တယ်၊ နောက်ပိုင်းမှာ ဘယ်လိုနေခဲ့သလဲ သိလိုရင်တော့ အိန္ဒိယက ရဲဘော် ရဲမေတွေ။ ထိုင်းနယ်စပ် လက်ရှိကျောင်းသားတပ်မတော်က ရဲဘော်တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့မိန်းမတွေ နိုင်ငံတကာမှာ ရောက်နေတဲ့ ရဲဘော်တွေနဲ့ မိသားစုတွေ ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ ကျမစာသင်ပေးခဲ့တဲ့ ကလေးတွေကို မေးနိုင်ပါတယ်။
၂၀၁၀ လက်ရှိမှာ ကျမသမီးရဲ့ ပညာရေးနဲ့အနာဂတ်အတွက် သြစတေးရီးယားကို ရောက်တယ်၊ ကျမဟာ မြို့မှာက တည်းက ကိုထွန်းအောင်ကျော် (GTI မန္တလေး၊ အသတ်ခံရ) ကိုအောင်နိုင်(MC မန္တလေး၊ လက်ရှိချင်းမိုင်) ကိုစိုးလင်း (RIT မန္တလေး၊ တောင်ပိုင်းမှာ အဖမ်းခံရပြီး ပြန်လွတ်မြောက်) တို့နဲ့အတူ လက်တွဲလုပ်လာခဲ့သူတယောက်ဖြစ်သလို သူတို့ (၃) ယောက် ရှောင်ပုန်းနေခဲ့ရာကတဆင့် တောထဲကိုသွားရမှာဖြစ်လို့ ကျမ (ရုက္ခဗေဒ ဒုတိယနှစ် ဂုဏ်ထူးတန်း၊ မန္တလေး) ကို မြို့လမ်းကနေတဆင့်သွားဖို့ ကိုညီညီရဲ့အကို ကိုမောင်မောင် (ရွှေကရ၀ိတ်) နဲ့ ကိုထွန်းအောင်ကျော်ရဲ့ အကိုဝမ်းကွဲ ကိုချိုကြီး (မန္တလေး ယူဂျီ) တို့ စီစဉ်ပေးခဲ့ကြတာပါ။ တောထဲကိုလာခဲ့တုန်းက တယောက်တည်းပါ။ ဘယ်အ ဖော်မှ မပါပါဘူး။ တောထဲရောက်မှ ကိုသံချောင်း (မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ် မိုးညှင်း မိုဟန်)။ ကိုမျိုးဝင်း(RIT မိုးညှင်း၊နမ္မား) ဒေသခံ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ စုံတွေ့ခဲ့တယ်။
ကျမကိုယ်ကျမ တာဝန်ခံရဲတာက ကျမတောထဲကိုလာခဲ့တာ တော်လှန်ရေးလုပ်ဖို့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်မှုတွေ ဒေသစွဲတွေ လုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပါ။ လုပ်တဲ့သူတွေဘက်ကလည်း ဒီလူတွေအားလုံးဟာ ရန်သူ့သူလျိုတွေပါလို့ စွပ်စွဲခဲ့သလို သူတို့မှာ ခိုင်လုံတဲ့ သက်သေ အထောက်အထားတွေရှိတယ်။ တချိန်ချိန်မှာ ဒီအတွက် ကြိုးစင်တက်ရမယ်ဆိုရင်လည်း ကြိုးစင်တက်မယ်လို့ ပြောခဲ့ကြတယ်။
ခံရသူတွေဘက်ကလည်း ငါ့တို့အားလုံးဟာ တယောက်မှ ရန်သူ့သူလျှိုမဟုတ်ဘူး မတရားလုပ်တာခံခဲ့ကြရတဲ့ ကျောင်း သား အစစ်အမှန်တွေပါလို့ ပြောခဲ့ကြတယ်။
ကျမကတော့ နှစ်ခုစလုံးကို လက်မခံချင်တဲ့သူ။ ၅၀၀ လောက်ရှိတဲ့တပ်ကိုဖြိုဖို့ ရန်သူ့သူလျှို ၅ ယောက်တောင်မလိုသလို ရန်သူ့လူ အမှန်တကယ် မပါခဲ့ရင် ဒါတွေလည်းဖြစ်လာစရာ အကြောင်းမရှိဘူးလို့ ကျမ ယူဆတယ်။ ရန်သူ့သူလျှို တ ယောက်မှမပါဘဲ သူတို့အချင်းချင်း တောထဲမှာ အာဏာလုခဲ့ကြတာပါဆိုတဲ့ ပုံပြင်က ရိုးစင်းလွန်းအားကြီးပါတယ်။ အာ ဏာလုတာမှန်ရင် အမျိုးသမီးရဲမေတွေနဲ့ အောက်ခြေက ရဲဘော်တွေအများကြီးကို ဖမ်းစရာအကြောင်း မရှိပါဘူး။
သေချာတာကတော့ ကျောင်းသားလူငယ်တွေရဲ့ အတွေ့အကြုံနုနယ်မှုနဲ့ ရဲစိတ်ရဲမာန်ထက်သန်နေကြမှုကို အသုံးချပြီး တိုက်စရာမလိုဘဲ ကိုယ့်လူကိုယ်ပြန်စားနည်း (ရန်သူ့သူလျှိုကို ထွက်ပေါက်အသင့်ပေးထားပြီးသား ကာကွယ်ထားပြီး သားဖြစ်တဲ့ ကျောင်းသားကို ကျောင်းသားက သတ်တဲ့အဖြစ်မျိုး ဖန်တီးခြင်း) နဲ့ ဖြိုခွဲဖို့ ဆင်ထားတဲ့ ရန်သူ့ရဲ့ပရိယာယ် ထောင်ချောက်ထဲကို ကျမတို့အားလုံး ၀င်မိခဲ့ကြတယ်ဆိုတာပါပဲ။
အစီစဉ်ရှိရှိလုပ်ခဲ့ကြတဲ့အပေါ် အစီစဉ်ရှိရှိ ပြန်အသုံးချနိုင်ဖို့ ကျောင်းသားတပ်ရဲ့ စစ်ရုံး၊ ကော်မတီရုံးတွေထဲမှာ ရှိနေရမဲ့ ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေ။ ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေ စစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေလက်ထဲ၊ ကိုယ်လွတ်ရုန်းပြေးခဲ့ရပါတယ်ဆိုတဲ့ လူ တချို့ရဲ့ လက်ထဲကနေ အလျှိုလျှို ပလူပျံပြီး ထုတ်ဝေဖို့စာအုပ်အသင့်နဲ့အတူ လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ အချိန်ကိုက် ပေါ်ထွက်လာနေပုံကလည်း “ဒါကို စနစ်တကျ လုပ်သွားခဲ့တဲ့ “သူလျှိုတစု ရှိနေတယ်” ဆိုတဲ့ သင်္ကေတကို ညွှန်ပြနေပါ တယ်။
28 Responses to “မြောက်ပိုင်းကျောင်းသားတပ်မတော်ကို ဖြိုခွဲသွားတဲ့ တရားခံအစစ်က ဘယ်သူတွေလဲ (၁)”
ကိုကောင်း March 27, 2012
Phome March 27, 2012
Thu Htut March 27, 2012
Based on hate and anger to military regime transformed to fear and suspicious then finally relinquish to each other in inhuman ways.
Immoral of the human’s dignity like as CPB Thakhin Than Tun’s manslaughter in 1967 and Red Flag Thakhin Soe’s Sinswe village homicide in 1958.
ကိုဗမာ March 27, 2012
ကျွန်တော် မရှင်းတာလေးရှိလို့ မေးပါရစေ၊ ၁။အေဘီ (အနောက်ပိုင်း) တာဝန်ရှိသူက ရဲမေ လုပ်မလား အိမ်ထောင်သည်လုပ်မလား မေးခဲ့တဲ့အပေါ် အထဲကိုပြန်ဝင်ခဲ့တဲ့သူတယောက်အဖြစ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို လိပ်ပြာ မသန့်တဲ့အတွက် အိမ်ထောင်သည်ကို
ရွေးချယ်ခဲ့တယ် … အဲဒါက ဘာကိုဆိုလိုတာလဲခင်ဗျာ။ ကျွန်တော် စဉ်းစားလို့ရသလောက် ရဲမေဆိုရင် အရင်လို ပြန်တိုက်ရမယ်ပေါ့ဗျာ။ဒါဆို အိမ်ထောင်သည်ဆိုတာကရော … ကျွန်တော် ဘယ်လိုမှ နားမလည်ဘူးဖြစ်နေတယ် … တချက်လောက်ဖြေပေးပါလား။ ၂။ ကျမကိုယ်ကျမ တာဝန်ခံရဲတာက ကျမတောထဲကိုလာခဲ့တာ တော်လှန်ရေးလုပ်ဖို့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်မှုတွေ ဒေသစွဲတွေ လုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပါ ။ ဒါဆို အမ တောထဲကို ဘာသွားလုပ်ပါသလဲ ခင်ဗျ …
Set Set March 27, 2012
။နောက်တခါ မဒမ်သံခဲ ကလဲမန္တလေးမှာ အလင်းဝင်ပြီးရောက်လာ ချိန်မှာ“ဒီမှာကိုညီညီ ဒီသတ်ဖြတ် မှုတွေမှာ CS သံချောင်းမှားခဲ့တယ် ဆိုရင်တောင်စေတနာအမှားပဲဖြစ် ရမယ်ဆိုပြီး အဲဒီတုန်း ကမန္တလေး တရုပ်တန်းဈေးက ကျနော်.မိန်းမဆိုင်ရှေ. မှာ အော်ပြောတော့ကျနော်တောင်ဆဲလွှတ် လိုက်သေးတယ်။
အဲဒီမဒမ်သံခဲကပဲ ကိုထွန်းအောင်ကျော်ကို ကျမ ကိုယ်တိုင်ခေါင်းဖြတ်ပါရစေလို.သံချောင်း အီမ်ကို တက်ပြီးတောင်းဆိုတယ်ဆိုတာ အားလုံးပြောနေတဲ့ကိစ္စပါ။ (ညီညီ)
မိုးနတ် March 27, 2012
အေဘီဆိုတာ ခေါင်းဖြတ်သတ်တဲ့အဖွဲ့ကြီးလား စစ်ဆေးပုံကတော့ စစ်တပ်ထက်လက်သံပြောင်ပါပေတယ် သူတို့ဥပဒေမှာကိုပြဌာန်ရေးဆွဲထားလို့ သတ်တဲ့သူတွေဘက် တရာမျှတတယ်လို့ ဒေါ်လှိုင်ပြောချင်ပုံရတယ်
ကောင်ပါပေ့ အေဘီ ရယ် ငါတို့တွေ ထောက်ခံအားပေ လာရတာ ရှက်တောင်လာပြီ
AgKg March 27, 2012
No culture, all Myanmar under military! But this is history, not reading lovel poem! So we can stay but history will live always all the time in the world!
ုသံခဲ March 27, 2012
ကိုယ့် လူ ဘက်တော် သား အချင်းချင်း သတ်ပစ်တာ မြန်မာ့ တပ်မတော် မှာ တစ်ခါမှ မကြားဖူးဘူး၊ ဆောင်းပါးသော ခင်ရွှေလိုင် ခင်ဗျား အပြစ်မဲ့ လူတွေကို သတ်ခဲ့ တဲ့ အပြစ်ကို စစ်အစိုးရ လက်ချက်၊စစ် အစိုးရ ရဲ့ အကွက် ၊ စစ်အစိုးရ ကြောင့် ဖြစ်တာလို့ လှီးလွှဲ မချပါနဲ့၊ အပြစ်မဲ့ သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသားတွေရဲ့ ၀ိညာဉ်က ခင်ဗျားကို ဒဏ်ခတ်ပါလိမ့်ဦးမယ်၊
88 မျိုးဆက် March 27, 2012
မခင်ရွှေလှိုင်ရဲ့ ကောက်နုတ်ချက်ကို ကောင်း မကောင်း မပြောလိုပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လူတွေကို ရက်ရက်စက်စက်နှိပ်စက်၊ သတ်ဖြတ်တာကို အားပေးအားမြေုာက်လုပ်နေတာကို တော့ ကျမ နားမလည်တော့ပါဘူး။ ဖမ်းခံထားရသူတွေ ထွက်မပြေးနိုင်ခင် မန္တလေးက ထောက်တွေလက်ထဲမှာ ကိုထွန်းအောင်ကျော်တို့ပုံတွေရောက်နေတာကတော့ အမ အပြောအတိုင်းဆိုရင် လုပ်သူတွေထဲမှာ ထောက်လှမ်းရေးပါလို့နေမှာနော်။ ကျမက တောမခိုဖြစ်ပေမဲ့ တောခိုခဲ့သူတွေကို သိပ်လေးစားမိတာပါ။ ဒါပေမဲ့ အခုတော့ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေ အပေါ်ရပ်တည်ချက်တွေကို သိရတော့ ကျမ ငါတောမခိုဖြစ်တာ သိပ်ကောင်းတာပဲလို့၊ ထောင်ကျတာက ငါ့အတွက် သိပ်ကောင်းတာပဲလို့ ယူဆမိတယ်။ အမ တို့ရဲ့ ရပ်တည်ချက်တွေက နောငက်လာနောင်သားတွေကို ကျမလိုခံစားမိစေပါတယ်။
အရိုးတွန်သံကိုအစမှအဆုံးဖတ်နေသူ March 27, 2012
ဘာခေါင်းစဉ်ပဲတပ်ပြီးသတ်သတ် ညှင်းဆဲသတ်ဖြတ်ခဲ့သူတွေကိုအရေးယူနိုင်အောင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်စေချင်တယ်။
သူလျှိုကသွေးခွဲလို့ အထင်မှားတယ်ဆိုရင်တောင် လူလူချင်း တိရိစ္ဆာန်လောက်တောင် အကြင်နာတရားမရှိတဲ့လုပ်ရပ်တွေကို ရွံရှာမိတယ်။ မခင်ချိုဦးအပေါ်လုပ်ရပ်တွေ ဖတ်ပြီးပြန်တောင်မတွေးနိုင်ဘူး။ ဆို့နင့်လွန်းလို့။ ကိုထွန်းအောင်ကျော်၊ ကိုကျော်ဝေ၊ ကိုချိုကြီး၊ ကိုအောင်မင်း။သေဆုံးခဲ့သူအားလုံးကိုယ်စားတောင်းဆိုပါတယ်။ တရားခံများအညှင်းဆဲခံရပြီး သေစားသေစေကျပါစေ။
kyaw March 27, 2012
၈၈၈၈အရေးခင်းတုန်းကလဲ စစ်ထောက်လှမ်းရေးဆိုပြီး စွပ်ဆွဲပြီး တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းထဲမှာ ခေါင်းဖြတ်အသတ်ခံရတဲ့ ကျောင်းသားတွေကိုလည်း သတိရသင့်ပါတယ်။
ဘီတူး(၂၁၄) March 27, 2012
ခင်ရွှေလှိုင်(ခ)မဒမ်သံခဲ ရေ -ဖုံးကာမှ အကုန်ပေါ်ကုန်ပြီ။ သေချာစဉ်းစားပြီးမှပြော။ ခင်ဗျားတို့ နိုင်အောင်အုပ်စုက လုပ်နေတာတွေက ရိုးစဉ်းလွန်းပါတယ်။ တခါဖတ်လိုက်ရတယ်။ မြောက်ပိုင်းကိစ္စပေါ်လာပြီး နိုင်ငံတကာရောက် အေဘီအဖွဲ့ဝင်တွေက အေဘီကိုမထိနဲ့။ အသက်နဲ့ရင်းကာကွယ်မယ်ပေါ့။ စာရင်းကြည့်လိုက်တော့ နိုင်အောင်ဘက်ကလူတွေချည်းဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်။ မြောက်ပိုင်းလူသတ်တရားခံ အောင်နိုင်ကို ဥက္ကလေး လို့အမြဲတမ်း အားပေးအားမြောက်ပြုနေသူတွေဖြစ်နေတယ်။ ဒါ စဉ်စားစရာတချက်ပါ။ နောက်တချက်က ၈၈ တောခိုကျောင်းသားအများစု ရောက်ရှိစုရုံးခဲ့တာ ကချင်ဒေသမဟုတ်ဘူး။ မွန်၊နဲ့ကရင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးနယ်မြေတွေဘဲဖြစ်တယ်။ ဘာကြောင့် ရန်သူက ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစု၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုကို ဖြိုခွဲဘို့ မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတယ်ဆိုရင် ဘာမှအင်အားမရှိတဲ့ ကချင်ဒေသက ကျောင်းသားတွေဆီ သူတို့ သူလျှိုတွေကို ရာနဲ့ချီပို့လွှတ်မလဲ။ အေဘီ ဗဟိုဌာနချုပ်တည်ရှိရာဒေသ ကျောင်းသား သောင်းချီရှိတယ်။ ရန်သူ့လူဘယ်နှစ်ယောက်ဖမ်းမိတယ်ကြားလဲ။ မမိတော့ရော ဘာမကောင်းတာတွေဖြစ်ခဲ့တာကြားလဲ။ မြောက်ပိုင်းက ဆက်စပ်တယ်ဆိုပြီး စိုးလင်း၊ နေ၀င်းအောင်၊ အောင်သူ၊(နိုင်အောင်ဗဟိုကဖမ်းဆီးနှိပ်စက်၊ အောင်သူကို သတ်ပစ်)ဌေးနိုင်(မိုးသီးဗဟိုက စစ်ဆေးနှိပ်စက် သတ်ပစ် – ၀င်းနိုင်ဦး၊ အောင်သူငြိမ်းတို့အမိန့်နဲ့) ဒါဘဲရှိတယ်။ လုပ်ခဲ့ပြီးပြီမဟုတ်လား။ ကိုယ်ခံရမဲ့အလှည့်ကျတော့ မကြောက်မဒမ်သံခဲရေ။ မင်းအလှည့်တနေ့ရောက်လာလိမ့်မယ်။ လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေအလှည့်လဲ မကြာသောတစ်နေ့မှာ လာပါလိမ့်မယ်။ နိုင်အောင် ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်မှ ရေးဦးမယ်။ ဟိုလူ့လွှဲချ၊ ဒီလူ့ပတ်နဲ့ ရန်သူလုပ်ရပ်ဆန်တဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ကိုလဲ ကိုယ်ဟာကို ပြန်ဖတ် ပြန်သုံးသပ်ပါဦး နိုင်အောင်ရေ။
Mon March 27, 2012
TOTALLY AGREE with all the comments.. I don’t understand what you mean in some parts of your article… Look!!! We couldn’t stand what they had done to all the innocent student heroes. There’s no reason to torture and murder inhumanely to anyone… Most of all, why and how did the photos of Ko Tun Aung Kyaw and others arrive in the hands of the MI????
We wish, we all can see the punishments to all those who were involved in these inhumane incidents…And I couldn’t understand why Ronald Aung Naing and Dr. Naing Aung are still doing well…And also, what about Madame Than Khae who requested to behead Ko TUn Aung Kyaw herself???? Most importantly, why is current AB chief, Than Khae so quiet about this???
kochit March 27, 2012
ရန်သူ့ရဲ့ပရိယာယ် ထောင်ချောက်ထဲကို ကျမတို့အားလုံး ၀င်မိခဲ့ကြတယ်ဆိုတာပါပဲ လို့ ပြောထားတယ်နော် — ရန်သူက ပရိယာယ် မိပြီး ကိုယ့်လူကို ဖမ်းမှားဖမ်းရင်တောင် အဲဒီလောက် ရက်စက်ဖို့လိုလို့လား– အခုမှ ဆင်သေကို ဆိတ်သားရေနဲ့ မဖုန်းချင်စမ်းပါနဲ့ဗျာ– ကိုယ့်အပြစ် လွတ်အောင် အများမုန်းပါတဲ့ဆိုတဲ့ စစ်တပ်ကို ဆွဲထည့် လည်း ခင်ဗျားတို့ ရက်စက်မှုကတော့ မလွတ်ပါဘူး– ရက်စက်တာက ရက်စက်တာပါပဲ–
အစမှအဆုံးဖတ်နေသူ March 27, 2012
No matter what the reason behind it.
They can give 1001 reasons, but shouldn’t done that way. What’s go around will come around. just the matter of time.
စစ်မင်းအောင် March 27, 2012
အေးကွာ။မင်းတို့ပြောတော့လည်းအကောင်းသားပဲ။မင်းတို့ငယ်ငယ်တုန်းက လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်နဲ့ ကြီးကြီးတုန်းလုပ်တဲ့အလုပ်ဘာဖြစ်လို့မတူတာလဲ။ဥပမာ။ မင်းတို့ငယ်ငယ်တုန်းက နေ့တိုင်းပဲမျက်နှာသစ်တာဆပ်ပြာနဲ့ပါ။အခုတော့ မျက်နှာသစ်ဆေးတွေသုံးတော့ အရင်တုန်းရူးလို့လုပ်ခဲ့တာလား။ကိုယ်ကိုကိုယ်ဆန်းစစ်ကြည့်ကွာ။
အောင်ကြူး March 27, 2012
စစ်ထောက်လှမ်းရေးဗိုလ်မှူးဟောင်း အမေရိကန်နိုင်ငံ မြန်မာသံမှူးကြီးဟောင်း ဦးအောင်လင်းထွဋ်ဆီက မှတ်ချက်စကား တခုခု ကြားချင်သား…။ အဲဒီဖြစ်ရပ်ဆိုးမှာ စစ်ထောက်လှမ်းရေး လက်ချက်လည်း မကင်းဘူးလို့ ယူဆပါတယ်။ ကိုယ့်ဖက်က အသုံးမကျတော့ အပ်နဲ့ထွင်းရမှာ ပေါက်ဆိန်နဲ့ပေါက်မိသွားတယ် ထင်ပါတယ်။ ဘယ်သူ့ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် လူမဆန်စွာ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့မှုများအပေါ် စုံစမ်းဖော်ထုတ် အရေးယူရပါမယ်…။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ် ကျောင်းသားတပ်မတော်အပေါ် ချစ်ခင်လေးစားမှုများ လျော့ကျသွားမည်မဟုတ်ပါ။။
ကျော် March 27, 2012
နေကြပါအုံးဟ ။ ဆုံးအောင် ပြောပါစေအုံး ။ တကယ်ခံရသူတွေတောင် ဘာမှမပြောရသေးဖူး ။ တကတဲ မိုးသံကြားရင်ဖါးတွေ ခေါင်းထောင်ထလာကြတယ်။ မခင်ရွှေလှိုင်ကိုပြောချင်တာက ၊ ကွန်မင့်တွေက ဖိအား မဖြစ်ပါစေနဲ့ ၊ ကိုယ်မှန်တယ်လို့ ထင်မြင်ရာကို ရိုးရိုးသားသား ရှင်းရှင်း လင်းလင်း ဆက်ရေးပါ။
zazawa March 27, 2012
ဒီစာဖတ်ရတော. ခေါင်းဖြတ်သတ်တဲ.သူမှာအပြစ်မရှိဘူး လက်စသတ်တော.တရာခံက အခုဒီအကြောင်းတွေအချိန်ကိုက်ဖေါ်ထုတ်နေတဲ.သူတွေဖြစ်နေပြန်ပေါ. တတ်လည်းတတ်နိုင်ကြပါတယ် သွေးရူးသွေးတန်းနဲ.ရှောက်မရေးနေနဲ.တော. ကျောင်းသားဘဲဖြစ်ဖြစ် သူလျွှိုဘဲဖြစ်ဖြစ် လူသတ်တာကလူသတ်တရာခံဘဲ သတ်တဲ.သူဘယ်သူလည်း ? ဘယ်သူအမိန်.ပေးတာလည်း? ဒါအဓိကပါ သာမညနဲ.အဓိကမှားနေတယ်
charlie March 28, 2012
Guilty* March 28, 2012
Even though they could have been true spies , they should not have been treated like this . In civilized world , this is unacceptable for any reason.
Anyway or for any reason , murder is murder.
Similar bad fortune would/should come to committers by other ways.
May God bless souls of victims..
ပီတာ ကြည်သာ March 29, 2012
အမှန်ကို ဖေါ်ထုတ်ချင်တယ် ဆိုရင် အမှန်အတိုင်း ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ကြည့်ဖို့ လိုတယ်။ ခုဟာက ရန်သူ့လူ ရန်သူ့သူလျှိုဆိုပြီး အပေါစား စွပ်စွဲနည်းနဲ့ ပြော နေတဲ့ကိစ္စပဲ။ ၀ိပဿနာတရားရှု တရားထိုင်တဲ့အခါ မခံမရပ်နိုင်အောင် စိတ်ကော ခန္ဓာကိုယ်ကော အစပထမမှာ နာကျင်ကိုက်ခဲရသလို အခု အေဘီ မြောက် ပိုင်းကိစ္စမှာ အမှန်အတိုင်း ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် တွေ့နိုင်တဲ့ အချက်တွေကို ထောက်ပြတဲ့သူက ထောက်ပြရင် နာကျင်ကိုက်ခဲ မခံမရပ်နိုင် ဖြစ် ကြမယ် ဆိုတာ ကြိုပြောထားပါရစေ။ တရားထိုင်ရင်း ရလာတဲ့ နာကျင်ကိုက်ခဲတဲ့ ဝေဒနာကို တည့်တည့်ရှုရင်း နာကျင်ကိုက်ခဲမှုတွေ တစတစ သက်သာ ပျောက်ကွယ်ပြီး စိတ်တွေ ကြည်လင်သန့်ရှင်း တရားထူးတရားမြတ်ကို ခံစားရရှိသလိုမျိုး ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ပြောပါရစေ။ အစပထမမှာ မခံမရပ်နိုင် ဖြစ်ကြ ရပေမယ့် အမှန်အတိုင်း ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ကြည့်ရင် အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် အချက်အလက်တွေကို တွေ့ရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်စည်းကမ်းတွေ အမိန့်နာခံမှုတွေ စနစ်တကျနဲ့ လေ့ကျင့်ထားပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာ နိုင်ငံတကာစစ်တပ်တွေလို အသားကျနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက အစိုးရ စစ် တပ်အတွက်ကတော့ အေဘီအက်စိဒီအက်ဖ် ဆိုတာကို လေးလေးစားစား မရှုမြင်ပါ။ တခြားသော ဗကပ တို့လို တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလို တဦးချင်းမှာ နိုင်ငံရေးတွေ သဘောတရားရေးတွေ ခိုင်ခိုင်မာမာ ယုံကြည်မှုနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ တည်ဆောက်ထားတဲ့ စနစ်တကျ လက်နက်ကိုင်စစ်တပ်တွေ လို လေးလေးစားစား မရှုမြင်ပါဘူး။ ၁၉၈၈ လူထုအုံကြွမှုကြီး ဖြိုခွင်းခံရတေှာ့ မခံချင်စိတ်တွေ စိတ်ခံစားမှု emotion တွေနဲ့ တောထဲကို စနစ်မကျ အစီအစဉ်မဲ့ ကျောထောက်နောက်ခံ resources မရှိကြပဲ ပရမ်းပတာ ထွက်လာကြတဲ့ ကလေးသာသာလေးတွေလို့ပဲ အေဘီအက်စိဒီအက်ဖ်ကို အစိုးရစစ်တပ်က မြင်ပါ တယ်။ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေ ဆင်နွှဲဖို့ နေနေသာသာ လက်နက်ကိုင်ခွင့်ရဖို့ကိုပဲ စိတ်ကူးယဉ်နေရတဲ့ မလောက်လေး မလောက်စား စစ်တိုက်တမ်း ကစား ချင်တဲ့ ကလေးအရွယ်တွေလို့ပဲ အေဘီအက်စိဒီအက်ဖ်ကို အစိုးရစစ်တပ်က သဘောထားပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကို အစိုးရစစ်တပ် ပေါ်ပေါက် ပေါက် ဖွားလာပုံနဲ့ အေဘီအက်စိဒီအက်ဖ် ပေါ်ပေါက်လာပုံကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်။ အေဘီအက်စိဒီအက်ဖ် ခေါင်းဆောင်တွေ ဟိုနိုင်ငံသွားဒီနိုင်ငံသွား လုပ်နေ ကြတာကို ရန်သူက မျက်စေ့နောက်တာနဲ့ ဗီဇာတွေ မရအောင်ဆိုပြီး အေဘီအက်စိဒီအက်ဖ်ကို မတရားသင်းတို့ အကြမ်းဘက်အဖွဲ့တို့ အဖြစ် တခြားနိုင်ငံတွေ ကို အသံပေးချင်တာနဲ့ တံဆိပ်တပ်ထားတာပါ။ ဗကပ တို့လို တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလို ရန်သူက လေးလေးစားစား ရှိနေလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဂလိထိုးထားတာလောက် လုပ်တာပါ။
ဒီကနေ့ အစိုးရစစ်တပ်ရဲ့ ဘီအိုင်အေ ဆိုတာက စတဲ့ သူ့သမိုင်းကို ပြန်ကြည့်ရင် လူရိုသေရှင်ရိုသေတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ နှစ်နဲ့ချီ အချိန်ယူ စဉ်းစားစီစဉ် ကြံဆမှုတွေနဲ့ စနစ်တကျ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြလို့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်က ဘီအိုင်အေကို ပေါက်ပေါက်လာစေဖို့ အခင်းအကျင်းအနေအထား ပေးခဲ့လို့ ဒီအခင်းအကျင်းကိုလည်း မျိုးချစ်မြန်မာ့ခေါင်းဆောင်တွေ ဉာဏ်ပညာနဲ့ အသုံးချနိုင်လို့ ဆိုတာတွေကို ပြန်တွေ့ရလိမ့်မယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ အတူ ကျဆုံးခဲ့တဲ့ သခင်မြလို ဒေါက်တာသိမ်းမောင်တို့လို လူရိုသေရှင်ရိုသေ ခေါင်းဆောင်အကြီးပိုင်းတွေက ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နဲ့ ဂျပန်နဲ့ကို အသုံးချပြီး နှစ်နဲ့ချီ အချိန်ယူ စဉ်းစားစီစဉ်ကြံဆမှုတွေနဲ့ စနစ်တကျ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာဟာ ဘီအိုင်အေတပ်ပေါ်ပေါက်လာစေဖို့ ရှေ့ပြေးအကြောင်းတရားဖြစ်တယ်။ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဆိုတာကို အသုတ်လိုက် စနစ်တကျ မြန်မာပြည်ထဲကနေ လျှို့ဝှက်ထွက်ခွာနိုင်အောင် သခင်ချစ်တို့လို ခေါင်းဆောင်လတ်တွေက အသက် စွန့်ပြီး စီစဉ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ တခါ အင်္ဂလိပ်နဲ့ အမေရိကန်က တရုတ်ပြည်မှာ ဂျပန်တပ်တွေကို ခံချနေတဲ့ ချန်ကေရှိတ်တရုတ်တပ်တွေဆီကို တရုတ်-ဗမာလမ်း မကြီးကနေ လက်နက်တွေပို့ပြီးကူညီနေတာကို ရပ်သွားစေဖို့ ဂျပန်က အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီမြန်မာပြည်ကိုပါ စစ်တိုက်ရတော့မယ့် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ရဲ့ အခင်းအ ကျင်းတခုက ထပ်ပြီးပေါ်ပေါက်လာပြန်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာမှ သခင်အောင်ဆန်းလို အရည်အချင်းပြည့် တနိုငံလုံးသိပြီးသား ကျောင်သားခေါင်းဆောင်နဲ့ ဒို့ဗမာအစည်းအရုံးခေါင်းဆောင်ဟာ အင်္ဂလိပ်ကို လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ဖို့ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့ အဆက်အသွယ်ရဖို့ မြန်မာပြည်ပြင်ပကို ရောက်နေလို့ ဒီလိုလူတော်ခေါင်းဆောင်နဲ့ ဂျပန်နဲ့ ဆက်မိလို့ နောင်မှာ ဘီအိုင်အေတပ် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။ မြန်မာပြည်ပြင်ပရောက်နေတာ ဘာကြောင့် ထည့်ပြောရလဲဆိုတော့ သခင်အောင်ဆန်းထက် ၀ါရင့်တဲ့ တခြားခေါင်းဆောင်တွေ တန်းတူခေါင်းဆောင်တွေ ထောင်တွေကျနေကြ နယ်စပ်ရောက်ပြီးမှ အင်္ဂလိပ်အစိုးရစုံထောက်တွေရဲ့ အဖမ်းခံရပြီး ပြည်ပကိုထွက်လို့ မရနဲ့ ဖြစ်ခဲ့ကြတာကြောင့်၊ အရည်အချင်းပြည့်ခေါင်းဆောင်တွေ ရှိပေမယ့် အခြေအနေ မပေးရင်လည်း ဘာမှ ဖြစ်မလာဘူးဆိုတာ ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်စေချင်လို့ပါ။ မြန်မာပြည်ပြင်ပကို ရောက်နေတဲ့ ခေါင်းဆောင်က ခပ်ညံ့ညံ့ဆိုရင်လည်း ဒီကနေ့ အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကြီးမပြောနဲ့ ဘီအိုင်အေတောင် ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူ။ ခေါင်းဆောင်က ညံ့လို့ ဘီအိုင်အေလောက်ဖြစ်မလာပဲ ဒီကနေ့ အေဘီ အက်စ်ဒီအက်ဖ်လောက်ပဲ ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း ပါဂျောင်က လူသတ်ပွဲမျိုး အဲဒီတုန်းကတည်းက ဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်။ တခါ ကမ္ဘာ့တန်းမှီ စစ်ပညာသင်ကြားနိုင်တဲ့ ဂျပန်စစ်တပ်ရဲ့ လေ့ကျင့်ပေးခံရတဲ့ အထက်အောက်အဆင့်ဆင့် အမိန့်နဲ့ စစ်စည်းကမ်းလိုက်နာရိုသေမှု ဆိုတာကိုလည်း ဒီကနေ့ အစိုးရစစ်တပ်ကို ဖြစ်ပေါ် လာစေတဲ့ ရဲဘော်သုံးကျိပ်မှာ ရရှိခဲ့ကြတယ်။ ဒါတွေက စစ်တပ်တခုအတွက် ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းစစ်လက်နက်တွေထက် စိတ်ဓါတ်ရေးရာအရ ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့ သေရေးရှင်ရေး တမျှလိုအပ်မှု ဖြစ်တယ်။ ကျောထောက်နောက်ခံ resources အဖြစ် အင်္ဂလိပ် အမေရိကန်နဲ့ တန်းတူရည်တူ စစ်တိုက်နေတဲ့ ဂျပန်စစ်တပ်ရဲ့ စစ်ရေးလေ့ ကျင့်ပေးမှုကို ရဲဘော်သုံးကျိပ်က ရရှိခဲ့ကြတယ်။ ဒီလိုအကြောင်းတရားတွေနဲ့ ဘီအိုင်အေ ဘီဒီအေ မျိုးချစ်ဗမာ့တပ်မတော် နောက်ဆုံး ဒီကနေ့အစိုးရရဲ့ စစ်တပ်အထိ ဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကို ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ကြည့်ရင် တွေ့နိုင်ပါပြီ။ ရဲဘော်သုံးကျိပ်တို့ စနစ်တကျ ရရှိခဲ့တာမျိုးတွေ အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ်မှာ မရှိဘူး။ အခြေအနေအချိန်အခါတွေ မတူလို့ ဆိုတာကိုလည်း အချက်တချက်အဖြစ် တွေ့ရမယ်။
အခု ဒီကနေ့အစိုးရစစ်တပ် ပေါက်ဖွားလာပုံနဲ့ အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ် ပေါက်ဖွားလာပုံက်ု အားမနာတမ်း အရှိကိုအရှိအတိုင်း နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ တူနေတာ ဆိုလို့ တစ်ခုပဲ ရှိတာကို တွေ့ရပါမယ်။ အဲဒီခေတ်က မျိုးချစ်ခေါင်းဆောင်တွေ အင်္ဂလိပ်အစိုးရကို မခံချစ်စိတ်နဲ့ လက်နက်ကိုင်တပ်မတော် တည်ထောင်ချင် တာဖြစ်သလို၊ ၁၉၈၈ မှာလည်း စစ်အစိုးရ မဆလကို မခံချင်စိတ်နဲ့ စွန့်စားရဲသူ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ အရပ်သားတချို့ လက်နက်ကိုင်တပ်မတော် တည်ထောင်ချင်ကြတာမှာ စိတ်အခံ emotion ချင်းမှာ တူညီနေကြပါတယ်။ ဒီတခုမှပဲ တူပါတယ်။
ကျန်တာတော့ တခုမှ မတူဘူး။
၁၉၈၈ လူထုအုံကြွမှု မတိုင်ခင်က ဘယ်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကမှ သို့မဟုတ် ကျောင်းသားတွေအပေါ် သြဇာလွှမ်းနိုင်သည့် ဘယ်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်စေ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဖြစ်စေ၊ တနေ့မှာ လက်နက်ကိုင်တပ်မတော် တည်ထောင်နိုင်ရေး (သခင်မြတို့ ဒေါက်တာသိမ်းမောင်တို့လို) ရှေ့ပြေးစဉ်းစားစီစဉ် ကြံဆတာ တွေနဲ့ အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ် ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ အပေါ်က ဘီအိုင်အေ ပေါ်ပေါက်လာစေတဲ့ အကြောင်းတရားတွေနဲ့ တချက်ချင်း တိုက်ဆိုင်နှိုင်း ယှဉ်ကြည့်ပါ။ စစ်အစိုးရနဲ့ တန်းတူရည်တူ စစ်မတိုက်နိုင်တဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဆီ ကျောင်းသားတွေ ရောက်သွားခဲ့ခြင်းကလည်း မတူတဲ့ တချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ရဲဘော်သုံးကျိပ်က သူတို့အတွက် ကျောထောက်နောက်ခံ resource ဖြစ်တဲ့ ဂျပန်စစ်တပ်ကြီးဆီ ရောက်သွားခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။ ဒီတော့ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု military training အထက်အောက်အဆင့်ဆင့် အမိန့်နဲ့ စစ်စည်းကမ်းလိုက်နာရိုသေမှု ဆိုတာတွေမှာလည်း၊ ဒီကနေ့ အစိုးရစစ်တပ်နဲ့ အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ်တို့ ကြားမှာ သိပ်ကို ကွာခြားသွားတယ်။
ဒါတွေကြောင့် ဒီကနေ့ အစိုးရစစ်တပ်က အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ်ကို မလောက်လေး မလောက်စား စစ်တိုက်တမ်းကစားချင်တဲ့ ကလေးအရွယ်တွေလို့ပဲ သဘောထားတယ်။ ဒီလို အကြောင်းတရားတွေကြောင့် ဒီကနေ့ အစိုးရစစ်တပ်က အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ်လို ပါချီပါချက်ကို သူလျှိုလွှတ်ပြီး ဖျက်ဆီးပစ်ဖို့ ထိ အချိန်ကုန်ခံ ကြံစည်စရာအကြောင်း မရှိပါ။
အစိုးရစစ်တပ်က သူတို့လိုပဲ စစ်ရေးအရ တန်းတူထားတဲ့ ဗကပနဲ့ တခြားတိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဆီတောင် သူလျှိုလွှတ် ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ သမိုင်း မရှိခဲ့ပါ။ ဒီနေရာမှာ အစိုးရစစ်တပ်ဘက်ကို ကြည့်ရင်လည်း သူ့ရန်သူတွေထဲ တသီးတသန့်လွှတ်ပြီး သူလျှိုထည့်ထားနိုင်လောက်တဲ့ အနေအထားကော အရည်အချင်းကော အစိုးရစစ်တပ်မှာ မရှိပါ။ ဒေသခံနယ်မြေခံ သတင်းပေး မွေးထားတာတွေပဲ အာဏာကုန်လုပ်နိုင်တယ်။ ဒါကလည်း အရည်အချင်း မရှိ တာထက် ၁၉၀၅ မှာ ရုရှကို ဂျပန်က အနိုင်မတိုက်ခင် ဂျပန်မှာလေ့ကျင့်ထားတဲ့ နဂါးနက်သူလျှိုတွေကို နှစ်နဲ့ချီပြီး ရုရှနိုင်ငံထဲမှာ မြှုပ်ထားပြီးမှ စစ်တိုက်နိုင်တဲ့ ခေတ်မျိုး မဟုတ်တော့လို့ ပါ။ အေဘီ မြောက်ပိုင်းမှာ ရန်သူစစ်အစိုးရက လာမြှုပ်နှံထားတဲ့ သူလျိုတွေလို့ စွပ်စွဲခံရသူတွေဟာ ရန်ကုန်လို မန္တလေးလို မြို့ကြီး တွေက ရောက်လာကြတဲ့ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ကြပြီးတော့ ရုရှဆိုက်ဘေးရီးယားမှာ ဂျပန်က နဂါးနက်သူလျှိုတွေ လွှတ်ပြီးနှစ်နဲ့ချီ မြှုပ်နှံထား တာမျိုး စွပ်စွဲခံကြရတာပါ။ ပါဂျောင်လိုဒေသနဲ့ (ရန်ကုန် မန္တလေးလိုနဲ့) နှိုင်းယှဉ်ပြောရင် စွပ်စွဲသူတွေကမှ အဲဒီဘက်နဲ့နီးတဲ့ နယ်သားတွေပါ။ ရန်သူစစ်အစိုး ရက သူ့ရေသူ့မြေ ရန်ကုန် မန္တလေးလို နေရာတွေမှာ လေ့ကျင့်ထားတဲ့ (ဂျပန်နဂါးနက်လို) သူလျှိုတွေကို ပါဂျောင်လိုနေရာမှာ လာပြီြးဲမှုပ်နှံဖို့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ် နိုင်ပါ။ မဖြစ်နိုင်တဲ့ အကြောင်းက ခုနကပြောသလို ရန်သူစစ်အစိုးရက သူတို့လိုပဲ စစ်ရေးအရ တန်းတူထားတဲ့ ဗကပနဲ့ တခြားတိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့တွေဆီမှာတောင် ဂျပန်နဂါးနက်လို သူလျှိုတွေကို (ရန်သူစစ်တပ်က အရည်အချင်းမရှိလို့ပဲ ဖြစ်ပါစေ) မြှုပ်နှံတဲ့ အလုပ်မလုပ်တာမှာ၊ သူတို့အတွက် ပါချီပါချက် အေဘီ မြောက်ပိုင်းကို သူလျှိုလွှတ်စရာ အကြောင်းမရှိပါ။ ဒါ့အပြင် ဂျပန်နဂါးနက်တွေလို သူလျှိုတွေကို ပါဂျောင်လိုနေရာကို သွားပြီးမြှုပ်နှံဖို့ဆို တာ အဘက်ဘက်က ဘယ်လိုပဲတွက်တွက် ရန်သူအတွက် အမြတ်မရှိပါ။ ရန်သူက သူလျှိုတွေပို့မယ့်အစား ပါဂျေယင်ကို မီးလောင်ဗုံးတွေ ကြဲချဖို့သာ စဉ်းစားမှာ ဖြစ်တယ်။
ဗကပ ပြိုကွဲသွားတာကို ရန်သူအစိုးရက သူလျှိုလွှတ်လို့ပါလို့ သက္ခိာမဲ့စကား ဗကပဆီက မကြားဖူးပါ။ ကိုယ့်အချင်းချင်း ပညာပေးစည်းရုံးနိုင်မှု လစ်ဟင်း ပျက်ကွက်ခဲ့လို့ စစ်တပ်ကြီးအဖြစ်ကနေ ပြိုကွဲသွားပြီးတော့ အခု ယူဂျီမြေအောက်ပါတီအဖြစ် ရပ်တည်နေ ပါတယ်လို့ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်း ဗကပက ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ ၀န်ခံရေးသားပြောဆိုပါတယ်။ ၁၉၆၆ – ၆၈ သခင်သန်းထွန်း အချိန်အခါက ဖြုတ်-ထုတ်-သတ်တွေ ဖြစ်ခဲ့တာမှာလည်း ရန်သူလွှတ်ထား တဲ့သူလျှိုမို့ သတ်ပစ်လိုက်ရပါတယ်လို့ (ဒီကနေ့ အေဘီမြောက်ပိုင်းလူသတ်ပွဲတာဝန်ရှိသူတွေကို ကာကွယ်နေတဲ့ စကားမျိုး) ဗကပက မပြောခဲ့ပါ။ ဖြုတ်-ထုတ်-သတ်တွေလုပ်ခဲ့တာမှာလည်း ဟုတ်တာမဟုတ်တာ အပထား နိုင်ငံရေး သဘောတရားရေးအရ ဖေါက်ပြန်သူတွေအဖြစ် စွဲချက်တွေတင်ပြီးမှ (ပါဂျောင် မှာလို လူမဆန်တဲ့ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေ မလုပ်ပဲ) သတ်ပစ်ခဲ့တာကြောင့် အေဘီမြောက်ပိုင်း ပါဂျောင်လူသတ်ပွဲနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ဗကပရဲ့ ဖြုတ်-ထုတ်- သတ်က အများကြီးဂုဏ်ရှိပြီး ဖြုတ်-ထုတ်- သတ်ခံခဲ့ရသူတွေမှာလည်း အေဘီမြောက်ပိုင်း ချစ်သူတွေ fan တွေလို သူတို့ခေါင်းဆောင်တွေ သတ်ခဲ့သူတွေ ဟာ ရန်သူ့သူလျှိုပါလို့ ထပ်ပြီး သိက္ခာချခံနေကြရတာမျိုး မဖြစ်ခဲ့ပါ။
အားလုံးကို ခြုံကြည့်လိုက်ရင် နိုင်ငံရေးသဘောတရားရေးအခံ မရှိပဲ စိတ်ခံစားမှု emotion သက်သက်နဲ့ အစီအစဉ်မရှိ ကျောထောက်နောက်ခံမရှိ တောခို လာခဲ့ကြပြီး စစ်ရေးအရ အမိန့်နာခံမှုတို့ စစ်စည်းကမ်းရိုသေ လိုက်နာမှုတို့ကို စနစ်တကျလေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့ professional လက်နက်ကိုင်တပ် မဟုတ်တဲ့ အေဘီအက်စ်ဒီအက်မှာ ဒေသစွဲ ကျောင်းစွဲ အဆင့်အတန်းစွဲတွေနဲ့ အတွင်းကြိတ်ပဋိပက္ခတွေ ရှိလာရာကနေ professional စစ်တပ်လို တကယ့်သေအတူ ရှင်မကွာ ညီအစ်ကိုစိတ်ဓါတ် ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ဓါတ်လည်းမရှိ အထက်ကနေ မှန်မှန်ကန်ကန် အမိန့်ပေးကွပ်ကဲနိုင်မှုလည်း မရှိကြပဲ အာဏာရူးထာထက် စာမတတ် ပေမတတ် ရပ်ကွက်လူမိုက်လို ရပ်ရွာလူမိုက်လိုလူတွေက ပဋိပက္ခအတွင်းမှာ လက်နက်အားကိုးနဲ့ အထက်စည်းနေရာရအောင်ယူပြီး ရွေဘရုပ်ရှင် ကားတွေထဲက ဆင်ခြင်တုံဉာဏ်ပညာမဲ့ တောလူမိုက်တွေလို ကိုယ်မကျေနပ်ကြည့်မရခဲ့သူတွေကို မိုက်ဂုဏ်ပြ သောက်စားမူးရူးရင်း ရမ်းကားနှိပ်စက်ပြီးမှ သတ်ဖြတ်ပစ်တဲ့ အဆင့်အတန်းမရှိ လူတွေသတ်တဲ့လုပ်ရပ်ဆိုးကြီးကို အဓိပ္ပါယ်မဲ့ ကျူးလွန်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်တယ်။ လူသတ်ပွဲကြီးကျူးလွန်ပြီးခါမှ အရိုးတွန် ချိန်တန်လို့ တွန်သံတွေထွက်လာတေှာ့ လူသတ်သမားတွေနဲ့ မကင်းရာမကင်းကြောင်းတွေ ဒီလို လနဲ့ချီ နှစ်နဲ့ချီဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပါဂျောင်လူသတ်ပွဲကြီးအတွက် တာဝန်ရှိသူတွေက ဒီလူသတ်မှုကြီးထက် ပိုမိုအောက်တန်းကျလှစွာ ပိုမိုဆိုးရွားစွာ မိုးကြိုးပစ်တာကို ထန်းလက်နဲ့ ကာလိုကာ အရိုးတွေတွန်လာတာကို မတွန်ရဘူးလို့ ခြိမ်းခြောက်လိုခြောက် တော်လှန်ရေးအကြောင်းပြီး ဒါတွေ မပြောနဲ့တော့နော်လို့ မိန်းမသံနဲ့ ချော့လိုချော့ အသတ်ခံသွားရတဲ့လူတွေကို တကယ့်သူလျှိုတွေလိုလို ထပ်ထပ်ပြီးစွပ်စွဲချင်သလိုလို ထမင်းရည်ပူကို စစ်ထောက်လှမ်းရေးဆီ လျှာလွှဲလိုလွှဲနဲ့ ဖြစ်ပျက်နေကြတာ အင်မတန်ရွံဖို့ ကောင်းနေတယ်။
ရန်သူအစိုးရစစ်တပ်က အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ်ကို ပါချီပါချက်ကလေးကလား ဖုတ်လေတဲ့ငါးပိ ရှိလေတယ်တောင် သဘောမထားတာမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရန်သူအစိုးရ စစ်တပ်က တလေးတစားအရေးထားတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေလို အိုက်တင်ထုတ်ပြီး အေဘီအေဘီနဲ့ လုပ်နေကြတာ သိက္ခာ ကို လုံးဝမရှိဘူး။ အခုလည်း ရန်သူအစိုးရက ငြိမ်းချပ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖခ်ါတယ်ဆိုတာ ကေအင်ယူက သူတို့ထဲမှာ ၀င်ကစွပ်ကောင်လို လာပြီး အငှားခန္ဓာ မြှောင်နေတဲ့ အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ်ကို မြန်မာပြည်ထဲ သိက္ခာလေး တပဲသားလောက်နဲ့ လက်နက်ချပြန်ဝင်သွားနိုင်အောင် ရန်သူအစိုးရကို ပွဲစားလုပ်ပြော ပေးထားလို့ ရန်သူကလည်း သူ့အကွက်နဲ့သူ လက်ခံလိုက်တယ်ဆိုတာ ရန်သူအစိုးရကော ကေအင်ယူကော အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ်ပါ သိပြီးသားပါ။ ကိုယ့် ကိုယ်ကို ရန်သူက လေးစားတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေလို ပဲများမနေပဲ မြောက်ပိုင်းလူသတ်ပွဲက အမှန်တရားကို ဖေါ်ထုတ်ဝန်ခံတဲ့ အလုပ်ကို ရန်သူ့ဆီ ခေါင်းလေးငုံ့ ပြန်မသွားခင် အရင်လုပ်သွားလိုက်ကြဦး။
အခုလို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းထောက်ပြလိုက်လို့ ၀ိပဿနာတရားရှု တရားထိုင်တဲ့အခါ မခံမရပ်နိုင်အောင် စိတ်ကော ခန္ဓာကိုယ်ကော အစပထမမှာ နာကျင် ကိုက်ခဲကြသလို မခံမရပ်နိုင် ဖြစ်ကြမှာပဲ။ တရားထိုင်ရင်း ရလာတဲ့ နာကျင်ကိုက်ခဲတဲ့ ဝေဒနာကို တည့်တည့်ရှုရင်း ဝေဒနာတွေ တစတစ သက်သာ ပျောက် ကွယ်ပြီး စိတ်တွေ ကြည်လင်သန့်ရှင်း တရားထူးတရားမြတ်ကို ခံစားလာရမယ် ဆိုတာ မမေ့ကြနဲ့။
ColinLynn March 30, 2012
I like your analysis. Good. Sharp. Precise.
Htun Htun Oo March 30, 2012
ပီတာ ကြည်သာ ခင်ဗျား
ကျွန်တော် တော်တော်လေး သဘောကျပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ FB မှာ တင်ဖို့ ခွင့်တောင်းပါရစေ။ အားလုံး စဉ်းစား Analysis လုပ်နိုင်ဖို့ပါ။
mg thant March 29, 2012
သိကြားမင်း March 30, 2012
မခင်ရွှေလှိုင် နဲ့ တစ်ဖွဲ့လုံး မောင်သိန်းစိန် ပုဆိုးအောက် ၂၀၁၅ မတိုင်မီ အရောက်သာ သွားလိုက်ပါ။ သောက်တစ်လွဲတွေ ဖြီးဖြန်း မနေပါနဲ့။
ပီတာ ကြည်သာ …. အေဘီကို ပြောသလိုလိုနဲ့ “ရန်သူစစ်တပ်” ဆိုတာကို အကြိမ်ကြိမ် သုံးပြီး ” စစ်တပ် ကြော်ညာ” ဝင်သွားတာတော့ “စိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်”။
မင်းတို့စစ်တပ်က လွန်ခဲ့တဲ့ ၆၇ နှစ်အတွင်း ဘယ် အဖွဲ့ကို အပြုတ်တိုက် နိုင်ခဲ့သလဲ? (ဗကပ ဟာ ပေါက်ဖော်ကြီး က မလိုတော့လို့ ပြန်သိမ်း သွားတာပါ၊ မင်းတို့ ဖြိုခွဲလိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။)
အဲ့ဒါ စစ်တပ်ရဲ့ အရည်အချင်း အမှန်ပဲ။
gg March 30, 2012
ခင်ရွှေလှိုင်ကိုခင်မင်ဖူးတဲ့ရဲဘော်ရဲမေတဦးအနေနဲ.အကြံပေးလိုတာကဘယ်အရာကိုမှ မိမိသမိုင်းကြောင်းနဲ.ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်တွယ်ဖက်မနေပါနဲ.။အမှန်တရားကိုတွေ.ပြီသိပြီဆိုတာနဲ.ရဲရဲ ဝန်ခံပြီးအဖြစ်မှန်တွေကိုဖွင့်ချပါ။ကိုယ်အဖမ်းမခံရပြီးရောဆိုပြီးအခြားသူတွေအဖမ်းခံနေရချိန်မှာဖာသိဖာသာနေနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အရှက်တရားထားပြီး မကဒတ ရဲ.ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်ပြန်လည်ဆေးကြော ခြင်း၊မကဒတ မျက်နှာဖုံးအောက်မှာရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျုးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်သားတွေကိုဖော်ထုတ်ရေး အစီအစဉ်မှာပါဝင်ပေးပါ။အနည်းဆုံးတော့ကိုယ်ရဲ.မျိုးဆက်ကလေးတွေအနေနဲ.လူ.ဘဝထဲရဲရဲဝံဝံနဲ.သူများတွေမျက်နှာကိုကြည့်ရဲတဲ့သူတွေဖြစ်လာပါလီမ့်မယ်။ခင်ရွှေလှိုင်ရဲ. comment ထဲကလူ ၅ ယောက်လေက်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို.ဆိုတော့ကျန်တဲ့လူ ၁၀၀ ကျော်မတရားဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာ။ သေတဲ့သူ ၄၀ လောက်ထဲက ၃၅ ယောက်လောက်ကတော့အပြစ်မဲ့သူတွေပါလို.ခင်ရွှေလှိုင်ဝန်ခံလိုက် ပြီပေါ.။အဲဒီတော့ GOSDA ရုံးကနေပြီးနိုင်ငံရေးလုပ်သွားတဲ့သူတဦးက မိခင်အဖွဲ. အနကလ ရဲ. ဥက္ကဌ ကဦးစီးပြီးလူသတ်ပွဲ၊နှိပ်စက်ပွဲလုပ်ခဲ့တာကိုတော့လက်ပိုက်ပြီးကြည့်နေခဲ့တာ။အနှစ် ၂၀ ကျော်ဘာမှ မပြောပဲနေခဲ့တာလိပ်ပြာသန်.ပါသလားလို.မေးချင်ပါတယ်။နောက်ပြီးသံခဲနဲ.ပက်သက်ပြီး သူယူထားတဲ့နေရာ၊သူမြောက်ပိုင်းနဲ.ပက်သက်ခဲ့မှုတွေအတွက်သူပြန်ပေးဆပ်ခဲ့တာကရာဇဝတ်မှုတွေကိုလက်ပိုက်ထိုင်ကြည့်ပြီးနှုတ်ပိတ်နေခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပိုင်းမှာတယောက်နဲ.တယေက်အပြစ်ပုံချပြီးကိုယ်လွတ်ရုန်းဖို.ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေအကြောင်း ခင်ရွှေလှိုင် ပိုသိမှာပါ။အမှန်ကိုမြင်ပြီး ပူးပေါင်းလာမယ်ဆိုရင်(ကိုယ်တိုင်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျုးလွန်ထားတာမရှိလို.)အားလုံးကခွင့်လွတ်နိုင် ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ခင်ရွှေလှိုင်အပါအဝင်မည်သူမဆိုရာဇဝတ်မှုဖော်ထုတ်ရေးအတွက်ပူးပေါင်းလာကြမယ်ဆိုရင်ကြိုဆိုပါတယ်။နောက်တခါတောင်ပိုင်းမှာထပ်မံခြီမ်းခြောက်ခြင်းခံနေရတဲ့ကျနော်တို.၇ဲ.သေဖော်သဖက် ၃ ဦးကိုလည်းခင်ရွှေလှိုင်ရဲ.ခင်ပွန်းမှတဆင့်အကာအကွယ်ပေးဖို.ပြောဆိုပေးပါ။ ရာဇဝတ်မှုအသစ်တွေထပ်မဖန်တီးကြပါနဲ.တော.။ များမျးလုပ်ထားတဲ့သူတွေကတော့များများအပြစ်ခံ ရမှာဖြစ်ပေမဲ့နည်းနည်းပဲလုပ်ထားတဲ့သူတွေကတော့နည်းနည်းပဲခံရမှာဖြစ်ပြီဲးအလျှင်းသင့်ရင်ခွင့်လွတ်မှုကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။မေးစရာလေးကျန်သွားလို.မေးကြည့်ပါရစေ။ခင်ရွှေလှိုင်က ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ရင် စပိုင် ၅ ယောက်လောက်တော့ရှိလီမ့်မယ်ဆိုတော့အဲဒီသံသယရှိတဲ့ စပိုင် ၅ ယောက်ရဲ.နာမည်လေးကို တဆိတ်လောက်POSTမှာတင်ပေးစမ်းပါ။ဒီမှာကျန်ခဲ့တဲ့လူ၁၀၀လောက်ကဝိုင်းစုံစမ်းကြစစ်ဆေးကြ လုပ်ကြပေမဲ့ အနှစ် ၂၀ ကျော်တဲ့အထိတယောက်မှမပေါ်လို.ပါ။ဒါပေမဲ့ မကဒတ ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ.မှာပါခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ မသင်္ကာံစရာလူတွေနဲ.ပေါင်း၊အဖွဲ.တွေနဲ.ပေါင်းပြီး မသင်္ကာံစရာအလုပ်တွေလုပ်နေကြနေလေရဲ.။ ခင်ရွှေလှိုင်ဆက်ရေးမဲ့ POST တွေကိုဆက်ဖတ်နေရအုံးမယ်လို.မျှော်လင့်နေတဲ့ ……………………
Posted by admin on March 28, 2012 34 Comments
34 Responses to “မြောက်ပိုင်းကျောင်းသားတပ်မတော်ကို ဖြိုခွဲသွားတဲ့ တရားခံအစစ်က ဘယ်သူတွေလဲ (၂)”
ခေါင်းအပိုမပါသူ March 28, 2012
ကိုကြီးသံချောင်း၊ကိုကြီးမျိုးဝင်း တို့ကတကယ်ကို သူရဲကောင်းကြီးတွေဆိုတာ ဒီစာဖတ်ပြီးနားလည်လိုက်ရတယ်။ (ကိုကြီး လို့တပ်ခေါ်တယ်နော်…..) ကိုကြီးသံချောင်းထောင်ကလွတ်ရင် ခင်ရွှေလှိုင်ကဘဲ သူရဲကောင်းဘွဲတံဆိပ်ချီးမြှင့်ပေးဖို့အကြံပြုပါတယ်။( အရိုးခေါင်းကြက်ခြေတံဆိပ်ဆိုရင်ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။) ကိုကြီးမျိုးဝင်းကိုတော့ ကျောက်တိုင်လေးစိုက်ပြီး နှစ်သွားကန်တော့ပေါ့ဗျာ။ လွှတ်တော်မှာကိုကြီးမျိုးဝင်းကျဆုံးတဲ့နေ့ကို ရုံးပိတ်ရက်သတ်မှတ်ပေးဖို့ လွှတ်တော်ရှေ့အစာငတ်ဆန္ဒပြုဖို့ အကြံပေးလိုက်ပါတယ်။
မင်းသစ် March 28, 2012
အမှန်တကယ်လဲ အဖမ်းခံရတဲ့သူတွေက ဓာတ်ပုံလဲမပို့နိုင်ဘူး။ အရေးကြီးတာက
အေဘီ အဖွဲ့ဟာ လူတွေကို လက်တွေခုတ်ဖြတ်၊ ခေါင်းတွေခုဖြတ်၊ မိန်းမတွေကိုအရှက်တကွဲဖြစ်အောင်လုပ်
မုဒိန်းကျင့်ပြီးသတ် တာတွေ လုပ်ခဲ့သလား မလုပ်ခဲ့ဘူးလားဆိုတာဘဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဗျ
မိုးသိကြား March 28, 2012
အော် အေဘီ -အေဘီ တရားကျလိုက်တာ
သန်းဇော်တို့ ဇော်ဇော်မင်းတို့ကကောထောက်လှမ်းရေး မဖြစ်နှိုင်ဘူးလား ဒေါ်လှိုင်
အမှန်တရား March 28, 2012
ခင်ရွှေလှိုင် လား… ခင်လှိုင် လူပျက်ကတော့ ရယ်ရတယ်ဗျာ…. ခင်ရွှေလှိုင် ဘာပျက်လဲတော့မသိဘူး … ဖတ်ရတာတော့ ရွံတယ်…. ခင်ဗျား အခုချိန်ထိ အမှန်တရားကို ဖုံးချင်နေရအောင် လူယုတ်မာတွေ စုံစမ်းဖော်ထုတ်မဲ့ အရေးမှာ ခင်ဗျား ၀ါဒဖြန့်မှု အောင်မြင်ပါစေဗျာ..
တောလူသစ် March 28, 2012
ခင်ရွှေလှိုင်ရေးလိုက်တော့မှပဲ သံချောင်းတို့ မျိုးဝင်းတို့ကို အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ်ရဲ့ အမြင့်ဆုံး သူရဲကောင်းဘွဲ့ပေးထိုက်သူတွေမှန်း သိရပါတော့တယ်..နိုင်ငံရေးအရ နောက်ကနေ ထောက်ခံပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ ရော်နယ်ကြီးတို့ နိုင်အောင်တို့ ကိုလဲ ဘွဲ့တခုခုပေးသင့်တယ် တောင်ပိုင်းအေဘီဗဟိုကို မြောက်ပိုင်းက အေဘီလို အမိန့်နာခံပြီး စည်းစနစ်အပြည့်နဲ့ တိုက်ရည်ခိုက်ရည် ကောင်းအောင် ပုံသွင်းချင်တဲ့ မြောက်ပိုင်းက လာတဲ့ ကချင်ကျော်ကျော် လှဌေး တို့ကိုလဲ စည်းရုံရေးသူရဲကောင်းဘွဲ့ပေးသင့်တယ်လို့ အကြံပြုပါတယ်.
မီးမီး March 28, 2012
အရမ်းသူရဲခေါင်းဆန်တဲ့ မျက်စိတစ်ဖက်ကန်း သံချောင်း၊ သာယာဝတီထောင်ထဲမှာ ထောင်ကျဘက်တွေကို မုန်းလို့ ၀န်ထမ်းကို ချွန်တွန်းလုပ်တဲ့ သံချောင်းကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့ကြို သံချောင်းနေ့လို့ ပြောင်းဖို့ ကျိုးစားပါလား ခင်ရွှေလှိုင်ရယ်
ပေါက်စ March 28, 2012
ဆက်ရေးပါ။ အားပေးပါသည်။ အခုမှပဲ ဘက်ပေါင်းစုံ
မြောက်ကျွန်းသူ March 28, 2012
စာတစ်စောင်ကိုဖတ်လိုက်ရင်ရေးတဲ့သူရဲ့အာဘော်ကိုသိနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်ဘက်ကရပ်တည်တယ်ဆိုတာလည်းပေါ်လွင်ပါတယ်။ ကိုသံချောင်းနဲ့ ကိုမျိုးဝင်းတို့ရဲ့ စွမ်းရည်တွေကိုဖော်ထုတ်တာမှာ ကျန်နေတာတွေရှိပါသေးတယ်။ စွပ်စွဲခံရသူတွေကိုဘယ်လို သွေးအေးအေးနဲ့ခေါင်းဖြတ်သတ်ခဲ့ပုံတွေကိုလည်းထည့်ပြောမှပြည့်စုံမှာပေါ့။အဲ့ဒီတုန်းကအ၀တ်အစားမပါဘဲအသတ်ခံခဲ့ရတာ မခင်ချိုဦးမဟုတ်ဘဲ မခင်ရွှေလှိုင်ရဲ့ညီမရင်းချာဆိုရင်ရော (ဒီလိုစာမျိုးရေးပါဦးမလား)
သံခဲ March 28, 2012
မ ခင်ရွှေလှိုင် ဆင်သေ ကို ဆိတ်သရေ နဲ့ ဖုံးဖို့ မကြိုစားပါနဲ့
ဗန်းမော်သား March 28, 2012
ဗန်းမော်မြို့ထဲအထိ ၀င်ချနိုင်တယ်?? ဟားဟား လို့သာရယ်လိုက်ချင်တယ်။ ၈၅-၈၆ ကေအိုင်အေက မြို့ထဲဝင်ပီး မီးစက်ကို လောင်ချာနဲ့ပစ်တဲ့အခေါက်က လွှဲပီး နောက်ထပ် ဘယ်တော့မှ ကပ်လာလို့မရတော့အောင် စစ်အစိုးရက အင်အားတောင့်တင်းတဲ့ တပ်တွေနဲ့ မြို့ကိုကာထားလိုက်တာ ခင်ဗျားမသိဘူးပေါ့? ကေအိုင်အေလို အင်အားကြီးတောင်မကပ်နိုင်တာ အေဘီက မြို့ကိုဝင်ချတယ်ဆိုတော့ အားလူးများသွားပီဗျာ။ နောက်ထပ်သေချာအောင် ထပ်ပြောရရင် ခင်ဗျားဖာသာပြောချင်တာပြော။ ပထမဆုံးထွက်ပြေးတဲ့ ၃ယောက်ထဲက ရဲဘော်သက်တင်က ကျနော့်အသိဗျ။ ခင်ဗျားပြောနေတာတဲ့စကားတွေထက် သူရင်ဖွင့်သွားတဲ့စကားတွေကို ပိုယုံတယ်ဗျာ။ ငါတို့ကိုဘာလို့မှန်းမသိ နှိပ်စက်တယ်ကွာတဲ့။ သမ္မတသင်ကန်းတိုက်က ဆယ်ကျော်သက်ချာတိတ်ကလေးကို သံချိတ်နဲ့နှာခေါင်းကနေချိတ်ပီးဆွဲပေးတာက ကော..ကိုကြီး မျိုးဝင်းလား … သူရဲကောင်းကြီးလားးး… ခင်ဗျားဖြေလေ။ အဲ့ဒီချာတိတ်ကျောင်းသားလေးက ခင်ဗျားမောင်လေးလိုသဘောထားတာဆို? ဆင်သေကိုဆိတ်သားရည်နဲ့ဖုံးနေတာ အတော်ရယ်ရတဲ့မိန်းမ။ ထွီ!!
ဘလူး March 28, 2012
ဒီမိုကေ၇စီအေ၇းအတွက် တိုက်ဖို. အမှန်တ၇ားဘက်က၇ပ်တည်ပေးဖို.အတွက်..
ခြေဖြတ်.လက်ဖြတ် .. ခေါင်းခုတ်ဖြတ်တယ် ဆိုတာတော.မဖြစ်သင်.ပါဘူး…
ိုနိုင်တာပဲ..ထောင်ချထားနိုင်တာပဲလေ..တ၇ားဥပဒေအ၇စီ၇င်နိုင်တာပဲ…ဘာကြောင်.သတ်၇တာလဲလို. မဖြေပဲ..ထောက်လှမ်းေ၇းကြောင်.ပါ..ဟိုဟာကြောင်.ပါအကြောင်းပြတာကတော. ကလေးကလားဆန်လွန်းပါတယ်..လက်နက်ကိုင်တိုက်နေကြတဲ. လူတွေ တပ်တွေက တော. သူလျှိူ လွတ်တာဆန်းတာမှမဟုတ်တာ..ဒါကို သိအောင်ဖော်ထုတ်ပြီး အေ၇းယူယုံပါပဲ…ဒီမိုကေ၇စီအေ၇းအတွက်တိုက်နေတဲ. လူ(အထုးသဖြင်.ဒေါ်ခင်ေ၇ွလှိုင်က ဘယ်လိုတိုက်ခိုက်မှူမျိုးကိုမဆို တုန်.ပြန်မှာမဟုတ်ဘူးလို.ပြောတာက အဝေဖန်မခံနိုင်တာကိုပြတာ..ငါ.စကားနွား၇ ပြောတဲ.
လေသံပါပဲ..ဒါမျိူးစိတ်ဓာတ်နဲ. ဒီမိုကေ၇စီအေ၇းတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်ဆိုတာ မယုံနိုင်စ၇ာပါပဲ)….၇န်သူသူလျိူမပါဘူးလို.ဘယ်သူမှ
မငြင်းပါဘူး..လူတွေမေးခွန်းထုတ်ချင်.သိချင်နေတာက ဘာကြောင်. လူပေါင်းများစွာကိုသတ်၇တာလဲ..ဖမ်းထား၇တာလဲ.
ဒေါ်ခင်ေ၇ွလှိုင်ပြောသလို ကိုထွန်းအောင်ကျော်.ကိုချိုကြီးနဲ. ဦးစိန်တို.က အစီအစဉ်၇ှိ၇ှိထိုးကျွေးခံလိုက်၇တာ သိနေတုန်းနဲ.ဘာလို.သတ်၇တာလဲ..ထောက်လှမ်းေ၇းမှန်း၇ိပ်မိနေတာတောင် ပေါ်အောင်မဖော်နိုင်ပဲနဲ.
ပေါ်လွင်လွန်းပါတယ်.. ဖွတ်မိကျောင်းဖြစ်မြစ်မချမ်းသာတာ သဘာဝပါ…ကျတော်ေ၇းတာလဲများသွားပြီး
စစ်မင်းအောင် March 29, 2012
သူလျှိုဆို အကုန်သတ်ကွာ။ဘယ်ပုံစံနဲ့သတ်သတ်သေရင်ပြီးတာဘဲ။မင်းတို့အဖေ စစ်အစိုးရတော့မပြောတော့ဘူးလား။
သူပါးစပ်ထဲထည့်ပြီး ရွာထဲလမ်းဘေးမှာထားတာ ကိုမြင်
လူအခွင့်အရေးအော်ချင်ရင် စစ်တိုက်နေတဲ့အချိန် မင်းတို့ ကိုခေါ်လိုက်မယ်။ပြေးမယ်မကြံနဲ့။
မင်းသစ် March 29, 2012
မင်းတို့သတ်တာက စစ်မြေပြင်မဟုတ်ဘူးကွ မင်းတို့
ကိုကောင်း March 29, 2012
အင်း AB မှာဒီလိုကျောက်ခေတ်လူတွေပါလာလို့
မြောက်ပြန်လေတွင်တင်သောကဗ္ဗည်း March 29, 2012
ကွန်မင့်ရဲသူများခင်ဗျား/ ခင်ရွှေလှိုင်က သံချောင်း၊မျိုးဝင်း၊အောင်နိုင် တို့လို့ရေးတယ်ဆိုမကြိုက်တဲ့အကြောင်းရေးထားပါတယ်။ သေနတ်ကိုင်ပြီးအုပ်စုလိုက် ကြိုးတုပ်ရိုက်၊လျှပ်စစ်နဲ့လျော့တိုက်၊လက်ဖြတ်၊ခေါင်းဖြတ်မှုတွေကို ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ခင်ရွှေလှိုင်ရဲ့သူရဲကောင်းကြီးများကို ” ကို၊ကိုကြီး” တခုခု တပ်ပြီးရေးပေးကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ တော်ကြာစိတ်ဆိုးပြီး ကွန်မင့်ရေးသူတွေ ကိုဒုတိယရေလှိုင်းစစ်ဆင်ရေး ခေါင်းစဉ်နဲ့ ခြေဖြတ်၊လက်ဖြတ်၊ခေါင်းဖြတ်ခံရနိုင်ကြောင်း အသိပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျား။
Minaung March 29, 2012
ခင်ဗျားကိုရှင်းရှင်းပြောမယ် ရက်စက်တာနဲ့ သူလျှိုဝင်တာနဲ့ တခြားစီ– သူလျှို တစ်ယောက်နှစ်ယောက်ရှိနေခဲ့ရင်တောင် အဲဒီ တစ်ယောက် နှစ်ယောက်အတွက် မသင်္ကာ ဖြစ်ခံရတဲ့ လူအများကြီး ကို ရက်ရက်စက်စက်နှိပ်စက်ပြီး သတ်ဖို့ လို့လိုလား– ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ယုတ်မာရက်စက်မှုကို ခုချိန်မှာ ဘယ်လိုမှ ဖုံးကွယ် လို့ မရနို်င်တော့ဘူးဆိုတာ ခင်ဗျား သဘောပေါက်သင့်တယ်–
အောင်နေစိုး(၂၀၈) March 29, 2012
tartay March 29, 2012
လုံးနဲ့ ကျန်ရစ်သူအားလုံး စားပွဲဝိုင်းမှာတွေ့ဆုံပြီးအဖြေ
နေရင်တော့ ဘယ်တော့မှပြီးမှမဟုတ်ပါဘူး ၊အမှန်အ
ကျောင်းသားသမိုင်းမှာနံမည်အပျက်ဆုံးပါ။ ဖြစ်ရပ်မှန်အမြန်ပေါ်ပေါက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါရင်းမျှော်လင့်လျှက်..
အောင်ကြူး March 29, 2012
အခုလို နှစ်ဖက်အပြန်အလှန် ရေးကြမှ အပြင်လူများ စဉ်းစားနားလည်နိုင်ကြပါမယ်။ ဆက်ဖတ်နေပါတယ်…. တခုပြောချင်တာ မခင်ရွှေလှိုင်ရေးတဲ့အထဲမှာ အချက်အလက် အားနည်းနေသလိုပဲ။ ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်ထက် အချက်အလက်နဲ့ ချေပမှ ပြည့်စုံပါမယ်။ ခံစားချက်အရ ပြောကြေးဆို အနှိပ်စက်ခံ အသတ်ခံရသူများကို ဘယ်လိုမှ မှီနိုင်မယ် မထင်ဘူး။ ကိုယ့်ဖက်က အထောက်အထားနဲ့ (ပြဖို့မလွယ်လည်း အနီးစပ်ဆုံး ရည်ညွှန်းချက်များနဲ့) ရေးသားဖို့ အကြံပေးပါရစေ။
Maung Than Swe March 29, 2012
(ဆက်ရန် ) ဆိုတော့ နံပါတ်(၃) လာဦးမယ်ဆိုတဲ့သဘောလို့နားလည်ပါတယ်။ အောက်မှာတွဲပါတဲ့ အသိပေးချက် ကိုဆိုလိုတာတော့ မဟုတ်လောက်ဘူးထင်ပါတယ်။
Thu Htut March 29, 2012
Why we till bow down Bogyoke Aung San among Myanmar heroes !
Please see the following of Bogyoke’s sincere confession, I prefer most is his sincerity and leadership responsibility.
“ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ တာဝန်ယူမှု ဥပမာ နှစ်ခု”
“ဘုရင်ခံက သူကြီးကွပ်မျက်မှု အကြောင်းကို မေးမြန်းသောအခါ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ရှောင်လွှဲဖုံးကွယ်ခြင်း အလျဉ်းမပြုဘဲ ယင်းအမှုအတွက် သူ့တွင် တာဝန်ရှိသည်ဟု မဆိုင်းမတွ ပြောသည်။ ဣနြေ္ဒမပျက် တည်ငြိမ်စွာ ပြောခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရင်ခံပင် အံ့သြသွားသည်။ ထိုသူကြီးကို ဗမာ့လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် စစ်ခုံးရုံးက စစ်ဆေးပြီး သေဒဏ်အပြစ်ပေး၍ ကွပ်မျက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ဘုရင်ခံကို ပြောသည်”
တောလူသစ် March 29, 2012
ကဲကဲ ကော်မန့်တွေကို ဖတ်ပြီး အေဘီကို မထိနဲ့ ဆိုသူတွေ ရေးကြပါဦး မှတ်တမ်းလေး တင်ထားပါမယ် ခင်ဗျားတို့ ပြောတဲ့ တချိန်ကြရင် ပြည်သူတွေကို ဒီလူတွေဟာ ဒီလိုပါ ခင်ဗျားတို့ စဉ်းစားကြည့်ကြပါလို့ ချပြပါမယ် ထောက်လှမ်းရေးတွေ သစ္စာဖေါက်တွေ လို့လဲ မစွပ်စွဲပါဘူး ခင်ဗျားတို့ ရေးတာလေးတွေ ချပြရုံပါပဲ..ရေးကြပါ..အထူးသဖြင့် ဒေါက်တာနိုင်အောင် တပည့်တွေ ရေးကြပါ..ဖတ်ရသိရ သက်သေရတာပေါ့..မှန်တယ်လို့ ထင်တယ်ဆို ချရေးလိုက်ပါ..တိုက်တွန်းပါတယ်…
လူကြီး March 29, 2012
ဖြစ်ပျက်မှာ ပါခဲတဲ့လူတွေလည်း လက်ရှိရှိနေတာပဲ ။ အားလုံး လူစုပြီး ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ချိန်းလိုက်ပြီး ဖြေရှင်း လိုက် လူစုံတက်စုံ အဲဒါက ပိုပြီး အဖြေနဲ့ နီးစပ်မယ် ထင်ပါတယ် ။ မမြင်ရတဲ့ ဘလော့ဘ် ပေါ်ကနေ ရှင်းနေတာက တရားခံတွေကို ပြင်ဆင်ဖို့ အချိန်ပေးနေသလို ဖြစ်နေတယ်။ တကယ်လို့ လူ စုံညီပြီး ရှင်းဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း အများပြည်သူကို သတင်းဌာနတစ်ခုကနေလိုက်ဖ်ရှိုးလေး ပြဖို့ မနေနဲ့ပေါ့ဗျာ။ ဒါမှ ဒီမိုကရေစီပုံစံ ထင်သာမြင်သာ ရှိမယ် မဟုတ်လား
fatty March 29, 2012
ရှမ်း သားကြီး March 29, 2012
အားလုံးပဲ ဆက်ရေး ဆက်ဝေဖန်ကြပါဗျာ ကျနော်အမြဲဖတ်နေတယ်။ စောင့်လည်းဖတ်နေမယ်။ ဖတ်ရတာကို အရသာရှိလို့ ။ ဘာလို့ လည်းဆိုတော့ ကျနော်က ၀တ်ထုကြိုက်လို့ ။ သင်ခန်းစာလေး အတွေ့ အကြုံ အတွေးအခေါ်များတွေကို ဖွံ့ ဖြိုးပေးချင်လို့ ပါ
Set Set March 29, 2012
ကျမရဲ.နာမည်ကျော် ထွက်ချက်လဲ တင်ပြအုံး။ ရေလှိုင်းစစ်ဆင်ရေးဆိုတာလေ။ အဲဒါဘယ်လိုရသလဲ ဆိုတာ သိချင်ရင် ပြောပြမယ်။ ကျမကို လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာကားစင်တင် ကြိုးတုပ်ပြီး နှိပ်စက်တော့ ဒီစစ် ချက်ကို ကျမ သံချောင်းကို ၀တ္ထုတိုတစ်ပုဒ် ရေးပေးလိုက်တာ၊ ၅ နှစ် စီမံကိန်းဆိုတာ သိချင်ရင်တော့ လက်ရှိ ABSDF ဥက္ကဌ သံခဲမိန်းမ ခင်ရွှေလှိုင် အသိဆုံးပဲ။
အဲဒါသူလုပ်ခဲ့တဲ့ ဇတ်လမ်း၊ ကျမက သူ.ကိုအကာအကွယ်ပေးပြီး အသားအနာခံ ကာကွယ်ပေးခဲ့ပြီး ရခဲ့တဲ့ ဇတ်လမ်း၊ ဟုတ်ပြီလား။ (နန်းအောင်ထွေးကြည်)
kyawthan March 29, 2012
what is mean of this phrase? they say un-clear mind cannot produce clear vision and clear writing.
ကိုမိုး March 29, 2012
http://www.burmese.panglong.org/news/86-2008-08-01-03-20-45/2877-2012-01-23-10-35-21.html မခင်ရွှေလှိုင်ရဲ့ သူရဲကောင်းကိုကိုကြီး သံချောင်း တယောက် လက်နက်ချ အညံခံ တာကို လူသတ်သမား က သတ္တိပြောင်စွာ အံဘွယ်သုတ ပါပဲ
Mon March 29, 2012
Why do we need to address, ‘Ko’ to muderers who killed inhumanely innocent students like Ko Tun Aung Kyaw???
Look!! I address ‘Ko’ to Ko Tun Aung Kyaw as he deserves our repsect even though he was much younger than us…
Agree with most comments except some like Sit Min Aung who said emotionally.
Sit Min Aung! Never compare our students to Burmese army. You shoudln’t compete in bad things…I understand your feelings which came from being suppressed by those heartless militarymen…And we all already know how Burmese militray is cruel…
Khin Shwe Hlaing should stop taking side and covering up.
William Thargi March 29, 2012
ဒေဝဒတ်ရဲ့နောက်လိုက်တွေဆို ပေါမှပေါ။ အိုင်ဒီအာမင်ကို ကိုးကွယ်တဲ့ လူတွေလဲရှိတာဘဲ၊ လမ်းစဉ်ပါတီ ဥက္ကဠကြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး လို့ခေါ်ပြီး ကိုရှုမောင်ကို ကိုးကွယ်တဲ့ လူတွေလဲရှိတာဘဲ၊ ဘဘ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွန့်ကို ဦးတော်လုပ်နေတဲ့ လူတွေကလည်း အများသား၊ တပ်ချုပ်ကြီးကို ဝပ်တွားခယနေကြတဲ့ လူတွေကလည်း အများကြီး၊ အင်း အေဘီမြောက်က လူသတ်ကောင်တွေ မှာလည်း သူတို့ကို ကိုးကွယ်တဲ့ လူတွေရှိမှာပေါ့။
myo set March 30, 2012
ခင်ရွှေလှိုင်…မခင်ချိုဦးဟာ နင့်လို မိန်းမသား တစ်ဦးနော်။ အဲ့ဒါ မမေ့နဲ့။ မခင်ချိုဦးကို မုဒိမ်းကျင့်ပြီး သတ်တာကို သဘောတူတယ်ဆိုရင် နင်လဲ စစ်အာဏာရှင်နဲ့ တစ်ဂိုဏ်းထဲပဲ။ ထပ်ပြောမယ် နင်လည်း မိန်းမသားပဲနော်။ နင်သာ မခင်ချိုဦးနေရာမှာ ဆိုတဲ့ အတွေးကို တွေးကြည့်လိုက်စမ်း။ နင်တွေးရဲသလား။ အေး..ဒါဆို စောက်ကြီးစောက်ကျယ်တွေလျှောက်ရေးမနေနဲ့။
ခင်ရွှေလှိုင် (၁) တွေ (၂) တွေ တပ်ပြီး ရှောက်ရေးမ နေပါနဲ့တော့။
ဖုံးလေ သမျှ ကုန်းလိုက်တိုင်း ပေါ်ပေါ်နေလို့ပါ။
Smiling Face March 30, 2012
(ကို)သံချောင်းတို့၊(ကို)မျိုးဝင်းတို့ရဲ့စရိုက်တွေနဲ့၊ မခင်ရွှေလှိုင်ရဲ့ဆောင်းပါးမှာပါတဲ့သူတို့ရဲ့စရိုက်တွေက အစွန်း၂ဖက်ရောက်နေသလိုဘဲ တကယ်ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေ ဘက်က မျမျတတတော့ ရေးစေချင်ပါ တယ်။ (ကို)မျိုးဝင်း မှာ သင်းသင်းအပေါ် ထားတဲ့ စိတ်ထားမျိုးတကယ်တန်း ရှိတယ်ဆိုရင် မခင်ချိုဦးဟာ ထောက်လှမ်းရေး က ဖြစ်စေအုန်းသူမအပေါ်နှိပ်စက်မှုပုံစံမျိုး(သူကိုယ်တိုင် ကျူးလွန် တာမဟုတ်တောင်)ကျူးလွန်တဲ့သူတွေအပေါ်တားမြစ် သင့်ပါ တယ်၊
ုလူဝ March 30, 2012
Posted by admin on March 30, 20122Comments
မြောက်ပိုင်းရဲ့ ယူဂျီ (ပင်မ) လမ်းကြောင်းက တနိုင်ငံလုံးရဲ့ ဆက်သွယ်ရေး စုံချက်ဖြစ်တဲ့ မန္တလေး၊ ဥက္ကဋ္ဌ ကိုထွန်း အောင်ကျော် (မန္တလေး အသတ်ခံရ) နဲ့ အတူ အစီစဉ်ရှိရှိ ထိုးကျွေးတာခံခဲ့ရတဲ့ (ဒီအဖြစ်အပျက်တွေ ဖြစ်ခါနီးနဲ့ အချိန် ကိုက် မြို့မှာနေလို့မရအောင် ဖန်တီးပြီးမောင်းပို့ခဲ့လို့ တောထဲကိုရောက်လာခဲ့ရတဲ့) ကိုချိုကြီး (မန္တလေး အသတ်ခံရ)၊ ကိုအောင်မင်း (မန္တလေး၊ အသတ်ခံရ) တို့ဆိုတာ မြို့မှာယူဂျီလိုင်းတွေကို အဓိက ကိုင်ထားသူတွေ။
ဖြစ်သွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်က တောနဲ့မြို့ပြ ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းကို အပြီးအပိုင် ဖြတ်တောက်ခံလိုက်ရခြင်း၊ (ဒီ နေရာမှာ ကျမတခု ပြောချင်တာက မြောက်ပိုင်းဗဟိုကော်မတီတွေကလွဲရင် ကျမအပါအ၀င် မြောက်ပိုင်း ရဲဘော်ရဲမေ တွေဟာ ရောက်တဲ့နေရာမှာ ကိုယ်လုပ်ရမဲ့အလုပ်ကို လုပ်နေကြသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက် အေဘီ (ဗဟို) နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုမိုးသီး၊ ကိုနိုင်အောင်တို့ နာမည်တွေကို မကြားမဖြစ် ကြားဖူးနေတာကလွဲလို့ အဲဒီတုန်းက ဗဟိုနဲ့ပတ်သက်ပြီး တခြား ဘာကိုမှ သိလည်းမသိခဲ့ကြသလို စိတ်ဝင်စားမှုလည်းမရှိခဲ့ကြဘူး။ ကျမကိုယ်တိုင် ထိုင်းဘက်ရောက်မှ တချို့နာမည် တွေနဲ့ ရင်းနှီးခဲ့တာပါ။ လူ (၁၅) ယောက်ကို သတ်ပြီးတဲ့နောက် အဖမ်းခံထားရတဲ့ နန်းအောင်ထွေးကြည်၊ ဘိုဘိုတို့ မိဘ တွေ တောထဲလာကြတဲ့အချိန် ဥက္ကဋ္ဌ ကိုနိုင်အောင်ကို (၁၉၉၂) ခုနှစ် ဧပြီလထဲမှာမှ မြင်ဖူးတွေ့ဖူးခဲ့တာပါ)
သေချာတာကတော့ ရန်သူ့လူတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာ ဥက္ကဋ္ဌ ကိုထွန်းအောင်ကျော် အပါအ၀င် ကိုညီညီကျော်တို့ကအစ မြောက်ပိုင်းဗဟိုကော်မတီတခုလုံးက လက်ခံခဲ့ကြတယ်။
သတင်းပေါက်ကြားမှုတွေကြောင့် စစ်ကြောင်းထွက်ချိန် မမျှော်လင့်တဲ့နေရာတွေကနေ ဖြတ်တိုက်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက် ရဲ ဘော်တချို့ မဆုံးရှုံးသင့်ပဲ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာတွေ။ ရင်ဘတ်တည့်တည့်ကို မှန်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့ အီကွေးမန့်မှာချိတ်ထားတဲ့ ဓါး မြှောင်ဓါးရိုးခံနေလို့။ ကျောတည့်တည့်ကို မှန်ရမှာ ဖြစ်ပေမဲ့ နောက်ကျောမှာ ချိတ်ထားတဲ့ ဟန်းကောခံနေလို့။ ဦးခေါင်း ဘေးနားရွက်အထက်မှာပဲ ရှပ်ထိသွားလို့ သေကံမရောက်အသက်မပျောက်ခဲ့တဲ့ ရဲဘော်တွေလည်း ရှိခဲ့တယ်။ ရှေ့တန်း ထွက်ချင်လို့ ပူဆာခဲ့တဲ့ ကျမတို့ရဲမေတွေတောင် ရှေ့တန်းမရောက်ခင်၊ ရှေ့တန်းအလယ်လောက် ဖျားနာကုန်လို့ လှည့် ပြန်ခဲ့ကြသူတွေရှိသလို နှစ်လနီးပါး တောထဲတောင်ထဲမှာ ရေငတ် ထမင်းငတ်နဲ့ ညတိုင်းဓါတ်မီးမပါ ဘာမပါနဲ့ ချီတက်ရ၊ ရောက်တဲ့နေရာထိုးအိပ်လို့မရ၊ ကင်းစောင့်ရနဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြားမှာ တချို့ရဲမေတွေ စစ်ဆင်ရေးအစအဆုံး ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့ ပေမဲ့ တကြိမ်ဆို တကြိမ်ပါပဲ နောက်တကြိမ် ရှေ့တန်းထွက်ချင်တယ်ပြောဖို့ အတော်လေး အားပြန်ယူရအုံးမယ်။ ဒါ တောင် ရှေ့တန်းထွက်တဲ့ ရဲဘော်တွေအပေါ် နောက်တန်းက ရဲမေတွေ ကိုယ်ချင်းစာနားလည်တတ်အောင် လုပ်ပေးတဲ့ အစမ်းသဘောပဲ ရှိပါသေးတယ်။
ရန်သူနဲ့ လက်တကမ်း (လူ့အခွင့်အရေးတွေ ခံစားခွင့်ရနေတဲ့ နိုင်ငံခြားမှာ နေကြရသူများမဟုတ်) အသက်ကိုဖက်နဲ့ ထုပ် ထားရသလို ကိုယ်မချရင် သူချတာခံရမဲ့ အမှန်တကယ်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ ရဲဘော်တွေအတွက်ကတော့ ဆိုဖွယ်မရှိပါဘူး။
ကျမတို့ရဲဘော်တွေဟာ နောက်တန်းမှာ မူးရူးပြီး အချင်းချင်း အော်ဟစ်ဆဲဆို ထိုးကြကြိတ်ကြလိမ့်မယ်။ ရှေ့တန်းရောက် ရင် အဲဒါတွေ သတိမရတော့ဘူး။ တက်ညီလက်ညီနဲ့ တယောက်ကိုတယောက် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြလိမ့်မယ်။ ရဲဘော်အချင်းချင်းကြားမှာရှိတဲ့ သံယောဇဉ်ကြိုးဟာ အိမ်ကမိန်းမတွေထက်တောင် ခိုင်မြဲပါသေးတယ်။ ဒါကို တကယ်အ သက်ပေးပြီး အမှန်တကယ် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ဖူးတဲ့သူတွေသာ ခံစားနိုင် နားလည်နိုင်တယ်။ ဒီခံစားမှုမျိုးကို ပိုက်ဆံဘယ် လောက်ရှိရှိ ယူထားတဲ့နေရာ ဘယ်လောက်ကြီးကြီး အချောင်သမားတွေ ခံစားနိုင် နားလည်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။
ရွာတွေနဲ့မနီး နက်ရှိုင်းတဲ့တောတောင်တွေ တတောင်ပြီးတတောင် မြစ်တွေ၊ ချောင်းတွေ၊ ချောက်ကမ်းပါးတွေ တခုပြီး တခု ကျော်လွှားဖြတ်သန်းရင်း ရှေ့တန်းထွက်ခဲ့ရတဲ့ ရဲဘော်တွေရဲ့အသက်ဟာ “ဆန်နဲ့ ကျည်ဆံ” ဖြစ်သလို ရဲဘော်တွေ အတွက် အလေးဆုံး သယ်ပိုးရတဲ့အရာဟာလည်း ဆန်နဲ့ကျည်ဆံ ပါပဲ။ ရှေ့တန်းထွက်တဲ့ ရဲဘော်တိုင်း ဆန်ကြိုးပါရသ လို လက်နက်၊ ကျည်ဆံ၊ ဆေးဝါး၊ ရေဘူး၊ ရိက္ခာခြောက် သွားရမဲ့ခရီး တက်ရမဲ့တောင် အနေအထားနဲ့ နှစ်ရက်စာအပြင် ပိုမသယ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ချီတက်ရမဲ့ခရီးတလျှောက် တောတောင်ချောက်ကမ်းပါးတွေမှာပဲ ဆန်တွေကို ကြိုတင် လှောင်ထားရတယ်။ ဆန်ထုတ်ဖို့လိုပြီ ဆိုရင် ရှေ့တန်းထွက်ရင်း ခဏစခန်းချထားရာ နေရာကနေ အနည်းဆုံး (၁၀) မိ နစ်လောက် လမ်းလျှောက်ပြီ ချောက်တွေထဲမှာ အသင့်ဝှက်ထားခဲ့တဲ့ဆန်တွေကို ဆင်းယူကြရတယ်။ ကျမကိုယ်တိုင် အဲ ဒီလိုသွားယူခဲ့ဖူးတဲ့အတွက် သိနေတာပါ။
နအဖ ထိုးစစ်ဆင်တဲ့အချိန်ဟာ မိုးတွင်းအချိန်ပါ။ တောတောင်နယ်မြေအနေအထားက ဆိုးဝါး၊ ရာသီဥတုက ကြမ်းတမ်း၊ ရွှံ့တွေ ဗွက်တွေ ကျွတ်တွေ ဒက်တွေ မျှော့တွေနဲ့ အင်းဆက်ပိုးတွေမျိုးစုံကြား ငှက်ဖျား၊ တုပ်ကွေး၊ ၀မ်းရောဂါတွေက ပြင်းထန် ကိုယ်ခံအားကောင်းနေမှသာ တွန်းလှန်နိုင်တဲ့ အနေအထားမျိုးပါ။ အဲဒီလိုအချိန် အဲဒီလိုအခါမျိုးမှာမှ ခရီးစဉ်တ လျှောက် ဆန်တွေသိုလှောင်ထားရာနေရာတွေ (တနေရာတည်းမှာမဟုတ်) ကို ရန်သူက သိရှိရရှိသိမ်းပိုက်သွားနိုင်ခဲ့ဟာ မတော်တဆ တိုက်ဆိုင်မှုလို့ ယူဆနိုင်ပါသလား။ အပြင်းအထန် ထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့တဲ့အပေါ် စားစရာဆန်တောင် မရှိတော့ တဲ့ ရဲဘော်တွေဟာ တောထဲမှာ တွေ့သမျှ စားလို့ရတာမှန်သမျှ အကုန်ကောက်စားရင်း ခရီးကြမ်းကို မရရအောင်ဖောက် ထွက် ကျော်ဖြတ်ခဲ့ကြရတယ်၊ အဲဒီအတွက် ကျဆုံးကျန်ခဲ့တဲ့ ရဲဘော်တွေ။ အဟာရငတ်ပြတ်ဖျားနာပြီး လမ်းခရီးမှာ သေ ဆုံးသွားခဲ့ကြတဲ့ ရဲဘော်တွေ စခန်းရောက်မှ သေဆုံးသွားတဲ့ ရဲဘော်တွေ၊ ဒါတွေကို ဒီရဲဘော်တွေနဲ့အတူ ဖြတ်သန်းရင်း မျက်စိရှေ့မှာတင် မြင်ရတွေ့ရ ကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ရသူက ရဲဘော်မျိုးဝင်း။ ဒီလူဟာ ရန်သူလို့ သူထင်ခဲ့တဲ့ သူတွေအပေါ် ရက်စက်ချင် ရက်စက်လိမ့်မယ်(ရန်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သူရဲ့စိတ်ဓါတ်ကိုလည်း ရန်သူသူလျှိုတွေက ကြိုတွက်ထားပြီးသား ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်) သူ့ရဲဘော်တွေကိုတော့ သူချစ်ခဲ့တယ်၊ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်။ (ဘယ်သူပြောပြခဲ့တာလည်း မ မှတ်မိ) စားစရာ နောက်ဆုံးလက်ကျန်ဆန်ကို ရဲဘော်တွေ ဆန်ပြုတ်ပြုတ်စားကြတဲ့အချိန်မှာ လူကြီးဖြစ်တဲ့သူ့အတွက် ဟန်ကောချိုင့်လေးနဲ့ ထမင်းချက်ထားပေးခဲ့တယ်။ အဲဒီ ဟန်ကောချိုင့်ထဲကထမင်းကို ဆန်ပြုတ်အိုးထဲလာသွန်ထည့်ပြီး ရဲဘော်တွေနဲ့အတူစား အတူနေပြီး သေတဲ့အထိ တိုက်ပွဲဝင်သွားခဲ့တဲ့သူ။
ကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲ့ အဓိကလိုအပ်ချက်က ကိုယ်ပိုင်သီးသန့်နယ်မြေဖြစ်သလို ရေမဲ့ငါးလို မဖြစ်ရအောင် ၀ိုင်းရံ ထောက်ပံ့ပေးမဲ့ မိဘပြည်သူတွေလည်း လိုပါတယ်။ အဲဒီလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်နိုင်ဖို့ ကော်လင်း၊ ၀န်သို၊ ကသာ၊ စစ်ကိုင်း တိုင်းဘက်က ကျောင်းသားရဲဘော်တွေ အများဆုံးပါဝင်တဲ့ ပထမအကြိမ် “စစ်ကိုင်းတိုင်းထိုးဖောက်ရေးစစ်ကြောင်း” ဆို ပြီး ထွက်ခဲ့ကြတာရှိပါတယ်။ သတင်းပေါက်ကြားမှုကြောင့် လမ်းမှာတင် ဖြတ်တိုက်ခံခဲ့ရပြီး စစ်ကြောင်းပျက်သွားခဲ့ရ တယ်။ ရဲဘော်တွေ ကစင့်ကလျားနဲ့ ဆုတ်ခွာခဲ့ရတဲ့အတွက် နစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေ အများကြီးဖြစ်ခဲ့ရပြီး ရဲဘော်အနည်းစု လောက်ပဲ ဗဟိုကိုပြန် ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ (ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုတော့ ကိုရဲလင်း (ဗဟိုကော်မတီ) ပိုသိပါလိမ့်မယ်)
ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်း ထိုးဖောက်ရေးစစ်ကြောင်းကို ရင်းမှူးအောင်ဆွေဦး ဦးဆောင်ပြီး ရဲဘော်မင်းဌေး (မိုး ကောင်း၊ ရမ်ဘိုကားရိုက်ခဲ့သူ) အပါအ၀င် ရဲဘော်တွေ ထပ်ပြီးကြိုးစားကြည့်ခဲ့ကြတယ်။ နယ်မြေအနေအထား ကြမ်း တမ်းခက်ခဲမှု၊ ရိက္ခာမလုံလောက်မှု၊ ငတ်ပြတ်ဆင်းရဲနေမှုတွေနဲ့အတူ ရှေ့ဆက်ရင် အားလုံးသေတွင်းထဲဝင်သွားသလို ဖြစ်နိုင်တဲ့ အခက်အခဲအမျိုးမျိုးတွေကြောင့် ပြန်ဆုတ်လာကြရတယ်။
ရဲဘော်သံချောင်းနဲ့ ရဲဘော်တစု အဖမ်းခံခဲ့ရတာက တတိယအကြိမ် “စစ်ကိုင်းတိုင်း ထိုးဖောက်ရေး စစ်ကြောင်း” ပါ၊ ရှမ်း ပြည်တောင်ပိုင်းကနေ စထွက်တဲ့စစ်ကြောင်းဟာ ပင်းပန်းဆင်းရဲတဲ့ဒဏ်မခံနိုင်တဲ့ ရဲဘော်တချို့ လမ်းခရီးမှာ ထွက်ပြေး ခဲ့တဲ့အတွက် သတင်းပေါက်သွားပြီး တပ်ရင်း (၂၀) လောက်နဲ့ ဖြတ်လေးဖြတ်ကိုသုံးပြီး လမ်းကြောင်းတလျှောက် ပိတ် ဖမ်းခဲ့တဲ့အတွက် အားအင်ကုန်ခမ်းငတ်ပြတ်ပြီး လမ်းတောင်ကောင်းကောင်း မလျှောက်နိုင်တော့တဲ့ ရဲဘော်သံချောင်းနဲ့ ရဲဘော်တွေကို ၀ိုင်းပြီးအဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့နေရာက ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်၊ နမ်းခမ်းဘက်မှာပါ။
သေဒဏ်ကျခံနေရတဲ့ရဲဘော်သံချောင်းကို နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအဖြစ်က စာရင်းဖျက်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုနေတဲ့သူတွေ။ ကိုယ့်ခွင်ထဲက ကိုယ့်ဖီးတွေအကြောင်းပဲ ပြောမနေပါနဲ့ ဆိုတဲ့လူတွေကို “တောင်မတက်ခိုင်းပါဘူး။ အဲဒီလိုလူမျိုးတွေကို ပြေးပြီးတက်ခိုင်းကြည့်ချင်တာက ဒုက္ခသည်က တောင်ကုန်းလေး တကုန်းလောက်ပါပဲ။ လိုအပ်တဲ့အစာလည်း အ၀ကျွေး ပါ့မယ်၊ စိန်ခေါ်ရဲရင်ပေါ့၊
မြောက်ပိုင်းရဲ့တောတောင်တွေထဲမှာ ကျဆုံးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ ရဲဘော်ရဲမေပေါင်း (၇၀) ကျော်ရှိတယ်။ အများစုက ဒေသခံ ကျောင်းသားရဲဘော်ရဲမေတွေ။ အဲဒီ ရဲဘော်ရဲမေတွေမှာလည်း သူ့သားလိုချင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီမရမချင်း ဆွမ်းသွပ်အမျှမဝေ ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ ကြက်ကလေးချီတစ် (ခ) ရဲဘော် မျိုးကိုကို (မိုးညှင်း၊ ရန်သူဖမ်းမိပြီး ညဉ်းပမ်းနှိပ်စက်အသတ်ခံ ခဲ့ရတဲ့အပြင် အလောင်းကို ရွာလည်ခေါင်ကအပင်မှာ ကြိုးနဲ့ချိတ်ဆွဲ အပြခံခဲ့ရသူ) ရဲ့ အမေလို အမေမျိုးတွေလည်း ရှိကြ တယ်။ အခု အသတ်ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းရင် မြောက်ပိုင်းတခုတည်းမှာပဲ အနည်းဆုံး အမေတရာလောက် ငိုကြပေအုံး တော့။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို တော်လှန်ရေးဘက်တော်သားပါလို့ ခံယူထားတာမှန်ရင် ရဲဘော်အားလုံးကို သိမ်းကြုံးပြီး ၀ါးလုံးရှည်နဲ့ မ ရမ်းပါနဲ့။ အဖွဲ့ကို မစော်ကားပါနဲ့။ အဖြစ်အပျက်ကို အဖြစ်အပျက်အတိုင်း ခွဲခြားပြီး မြင်အောင်ကြည့်ပါ။ မပြောမဖြစ်လို့ ပြောချင်ရင်လည်း ငါအချောင်သမားဟုတ်မဟုတ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို မှန်ထဲ အရင်ပြန်ကြည့်ပါ။
နက်ရှိုင်းတဲ့ တောတောင်တွေထဲမှာ တွေ့ကြုံလာသမျှ အခက်အခဲ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကို လက်သီးဆုပ်တွေထဲမှာထည့် အ မှုန့်ခြေရင်း အသက်ပေးသွားခဲ့ကြရတဲ့ (တောထဲက ရဲဘော်တွေ ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာဆိုလို့ အမေတွေပေးခဲ့တဲ့ အဲဒီအသက် လေးတွေပဲ ရှိပါတယ်) မြောက်ပိုင်းက ရဲဘော်တွေ၊ ကေအိုင်အေ အပစ်အခတ်ရပ်ပြီးတဲ့နောက် ဘ၀ကို သုံညကနေ ဆင်း ဆင်းရဲရဲ အငတ်ငတ်အပြတ်ပြတ်နဲ့ ကုန်းရုန်းရှာဖွေရင်း ရပ်တည်ခဲ့ကြရတဲ့ လက်ရှိတရုတ်နယ်စပ်မှာ ကျန်ရှိနေတဲ့ တိုက်ပွဲ ၀င်နေဆဲ ရဲဘော်ရဲမေတွေကိုယ်စား အချောင်သမားတွေ အချောင်နာမည်ရဖို့ ပြောနေတာမျိုးဆိုရင် ရင်နာလွန်းလို့ပါ။
မြောက်ပိုင်းမှာ လက်ရှိတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ ဒူဝါ လှဆိုင်း (မြစ်ကြီးနား၊ဂုဏ်ထူးတန်းကျောင်းသား) ဆိုတာ ရဲဘော်ရဲမေများရဲ့ (ကျမ က အက်စ်အက်စ်အေ (ရှမ်းပြည်) မှာ စစ်သင်တန်းယူခဲ့သူပါ) သင်တန်းဆရာ၊ သင်တန်းမှူးတဦးဖြစ်သလို ဒါတွေ မဖြစ်ခင်က နန်းအောင်ထွေးကြည်၊ ကျော်ခိုင်ဝင်း၊ သင်းသင်း၊ ဘိုဘိုတို့တွေနဲ့ သီချင်းဆိုဖော်ဆိုဖက် ဂစ်တာတီးဖော်တီး ဘက် ရဲဘော်တဦးဖြစ်ပြီး ရဲဘော်ရဲမေတွေကြားမှာ ဟာသလေးတပြောပြောနဲ့ ရယ်ရယ်မောမော ပျော်ပျော်ရွင်ရွင် နေ တတ်တဲ့ အားလုံးရဲ့ အချစ်တော်ထဲမှာပါခဲ့တဲ့ ဗဟိုကော်မတီဝင်ပါ။ ကျမတောင် ဒူဝါလှဆိုင်းနဲ့ အဖမ်းခံခဲ့ကြရတဲ့သူတွေ လောက် မရင်းနှီးခဲ့ပေမဲ့ ဒူဝါလှဆိုင်းရဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့မျက်နှာ အပြောအဆိုတွေနဲ့တင် “ကျောင်းသား” ဆိုတာ ကျမယုံတယ်။
အပြောသက်သက် အချောင်သမားတွေမဟုတ်ဘဲ (အနုနည်းဖြစ်စေ၊ အကြမ်းနည်းဖြစ်စေ ကြိုက်တဲ့နည်းကိုသုံး) တိုက်ရဲ တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအဖြစ်အပျက်မျိုးတွေ တော်လှန်ရေးအင်အားစုကြားမှာ တကြိမ်မဟုတ် အကြိမ်ကြိမ် အခါခါဖြစ် အောင် ဖန်တီးနေတဲ့ တရားခံအစစ်က နေပြည်တော်မှာ အသင့်ရှိနေပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက တရားခံ လိုက်ရှာနေတဲ့ သူတွေအားလုံး စနစ်ဆိုးအတွင်းက သားကောင်တွေချည်း ဖြစ်နေတာကိုပါ။
ပြောတော့ကျောင်းသား လုပ်နေတာကခွေးသား ခွေးကျင့်ခွေးကြံတွေနဲ့ ဒါတွေရဲ့ နောက်ကွယ်မှာရှိနေတဲ့ တရားခံအစစ် ကတော့ လက်ရှိရပ်တည်နေတဲ့အဖွဲ့ကိုပါ ဘယ်လိုနည်းနဲ့တွန်းပို့ ဇာတ်သိမ်းပေးရရင် ကောင်းမလဲဆိုပြီး ဖြစ်ပျက်နေသမျှ တွေကို အခုအချိန်ထိ စင်ပေါ်ကနေ အပြုံးမပျက် ကြည့်နေအုံးမှာပါပဲ။
“တခါသေဖူး ပျဉ်ဖိုးနားလည်” ဆိုသလို ဘယ်သူတွေက အဖြစ်အပျက်အမှန်ကို နစ်နာခဲ့ရသူတွေအတွက် ရိုးသားစွာ ဖော် ထုတ်လိုတာ ဘယ်ကောင်တွေက အေဘီပျက်စီးရေးအတွက် ရည်ရွယ်လုပ်နေတာဆိုတဲ့ စာရင်းကို ပြောပုံဆိုပုံရေးသား တင်ပြနေပုံတွေနဲ့ အဲဒီလူတွေရဲ့နောက်ခံသမိုင်းတွေကို လေ့လာရင်း အခုကတည်းက ခွဲခြားပြီး ကျမ စာရင်းပြုစုနေပါ တယ်။ နောင်တချိန် “အေဘီကို ဘယ်သူတွေ ဖြိုခွဲဖျက်စီးခဲ့ကြတာလဲ” ဆိုပြီး တရားခံရှာကြတဲ့အခါ အသုံးပြုနိုင်ဖို့ပါ။
ကမ္ဘာမှာ ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ မရှိခဲ့ဖူးတဲ့ “ကျောင်းသားတပ်မတော်” ဆိုတာ စစ်အစိုးရစကား ဌားသုံးပြောရရင် ကမ္ဘာ့အလယ် မှာ မြန်မာဟေ့လို့ ၀င့်ကြွားဂုဏ်ယူနေတဲ့နိုင်ငံမှာမှ သမိုင်းရဲ့လိုအပ်ချက်အရကို ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရတယ်။ သမိုင်းအဆက် ဆက် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားတို့ရဲ့သင်္ကေတ ခွပ်ဒေါင်းဘက်တံဆိပ်တပ်ထားတဲ့ “ABSDF ဆိုတာ တစုတဖွဲ့တည်း က ပိုင်တဲ့နာမည် မဟုတ်ဘူး၊ သမိုင်းက ပေးခဲ့တဲ့နာမည် သမိုင်းက ပိုင်တဲ့နာမည်၊ တောထဲမှာ လက်ရှိရှိနေကြတဲ့ ရဲဘော် တွေ တင်မက ပါဝင်ပတ်သက်ဖူးခဲ့တဲ့ ထောင်ပေါင်းများစွာသော ပြည်တွင်းပြည်ပ ကျောင်းသားအားလုံးရဲ့ ရင်ထဲနှလုံး သားထဲက နာမည်၊ ထပ်တူပြုလို့လည်းမရ ရူပကအလင်္ကာလည်းမမြောက်တဲ့ “ကျောင်းသားတပ်မတော်” ဆိုတဲ့ ဒီနာ မည်ကို နောင်လာ နောက်သားတွေ သမိုင်းစာမျက်နှာတွေမှာ တွေ့နေရတိုင်း။ ကြားနေရတိုင်း စစ်အစိုးရဟာ မိဘပြည် သူတွေရဲ့ သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့အရင်းအမြစ် ကျောင်းသားလူငယ်တွေအပေါ် သူတို့လုပ်ခဲ့သမျှတွေအတွက် အမေပေါင်းများစွာ ငိုကျွေးခဲ့ကြရတာတွေအတွက် အမြဲတမ်း အရှက်ရနေစေရပါမယ်။
ကမ္ဘာကျော်လျောက်လဲချက်ကိုလေ့လာနေသူ March 30, 2012
ခင်ရွှေလှိုင်ရဲ့အမှတ်(၃)ကိုဖတ်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာ ကမ္ဘာကျော် လျောက်လဲချက်များလို့ သတ်မှတ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ကိုကြီးမျိုးဝင်းက သူ့အတွက်ချက်ပေးတဲ့ထမင်းကိုသွန်ပစ်ပြီး ရဲဘော်တွေနဲ့ ဆန်ပြုတ်အတူဆိုတာလေးဖတ်မိတော့ ရင်ထဲကိုနစ်အောင်ခံစားရတယ်ဗျာ…..ကိုကြီးမျိုးက တကယ်ရဲဘော်စိတ်ပြည့်သူကြီးပါလားလို့…. နောက် ကိုကြီးသံချောင်းကလည်း ထမင်းငတ်ပြတ်လို့အဖမ်းခံလိုက်ရတာဘဲ။ ကိုကြီးသံချောင်း၊ကိုကြီးမျိုးဝင်း၊ကိုကြီးလှဆိုင်း၊ကိုကြီးအောင်နိုင်တို့ဟာ အနော်ရထာလက်ထက်ကလို သူရဲကောင်းကြီး(၄)ဦးဆိုတာပေါ်လွင်အောင်အမှတ်(၄)မှာဆက်ရေးပေးဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ခင်ရွှေလှိုင်ရဲ့ ကမ္ဘာကျော်လျောက်ချက်များအမှတ်(၄)ကိုမျော်နေပါတယ်။ ပြည်တွင်း၊ပြည်ပက အသက်မသေဘဲကျန်ခဲ့တဲ့ ညီနောင်ညီမတို့ရေ မင်းတို့ဟာသေချာပေါက် ထောက်လှမ်းရေးဘဲလို့ပြောနေပြီ နောက်တကြိမ်ထပ်အဖမ်းခံရပြီး အနှိပ်စက်မခံရအောင်ခေါင်းဖြတ်မခံရအောင် ခင်ရွှေလှိုင်နဲ့ သူရဲ့ ကိုကြီးသူရဲကောင်းကြီးများကို အမြန်ဆုံးတောင်းပန်ရတော့မယ်ထင်တယ်နော်။
ကြည်ယု March 30, 2012
မခင်ရွှေလှိုင် ပြောတဲ့ ကိုမျိုးဝင်း၊ကိုသံချောင်း တို့ရဲ့ တော်လှန်ရေးရဲ့ အနစ်နာခံမှုတွေကို မြင်နိုင်ပေမဲ့ လည်း၊ လူလောကနဲ့ အယုတ်စွအဆုံး တိရိစ္ဆာန်လောက မှာတောင် မတွေ့နိုင်တဲ့ မြန်မာ့သမိုင်း၊ ကမ္ဘာသမိုင်းနဲ့ အဆုံးစွန် လူ့သမိုင်းမှာတောင် မကြားဘူးခဲ့တဲ့ ရဲဘော်ရဲဘက် အချင်းချင်းကို ခေါင်းဖြတ်၊ အမေနှစ်မ ကိုယ်ချင်း မစာနာစွာနဲ့ ရဲမေတွေကို အ၀တ်ချွတ်၊ မိန်းမအင်္ဂါထဲ ရှာဖွေတာကိုလုပ်ခဲ့တာ၊ electric shock ပေးတာ၊ သေသည် အထိ (နံချုပ်ကုနဲ့) ရိုက်နှက် ခဲ့တာနဲ့ စာရင်၊ အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ ဆန်ပြုတ်စားပြီး တော်လှန်ရေးအတွက် အနှစ်နာခံတာတွေဟာ ဘာမှမဟုတ်ပါ။
အကယ်၍ အထက်ပါခေါင်းဆောင်များက ရဲဘော် ရဲဘက်အချင်းချင်း မနှိပ်စက်ခဲ့ပဲ၊ ရဲဘော်တွေနဲ့အတူ စားအတူတူ၊ ငတ်အတူတူ၊ သေအတူတူ ဆိုပြီး တော်လှန်ရေးကို ဦးဆောင်ခဲ့တယ် ဆိုပါက၊ (အများက မသတ်မှတ်တောင်) ကျွန်တော်အနေနဲ့ သူတို့ကို သေသည်အထိ လေးစားသွားမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ အေဘီမြောက်ပိုင်းရဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေက အဲဒီလိုမဟုတ်တဲ့ အတွက် ရွံရှာတယ်။
= = = = = = = = = -= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Posted by admin on April 1, 20120Comment
စစ်ဆင်ရေးနယ်မြေအတွင်းမှာ ဆန်တွေသိုလှောင်ထားတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး
သင်္ကာမကင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ လူတချို့ကို စောင့် ကြည့်ခဲ့ကြတယ်။
ထွက်ပြေးခဲ့တဲ့ စိုးမင်းအောင် (မန္တလေး) ဟာ အဲဒီလိုစောင့်ကြည့်ခံခဲ့ရသူတွေထဲက
တယောက်ဖြစ်ခဲ့ သလို စိုးမင်းအောင် တယောက်ထဲကပဲ
စိုးမင်းအောင် (မန္တလေး) ဆိုတာ ရင်းမှူးသိုက်ထွန်းဦးရဲ့ (၅၀၁)
တပ်ရင်းက ရင်းမှူးရဲ့ကိုယ်ရံတော်ဆိုပေမဲ့ တောင်ပိုင်းက မဟုတ်ဘူး။
ဥက္ကဋ္ဌ ကိုထွန်းအောင်ကျော်တို့အတွက် ကိုယ်ရံတော် တွေအဖြစ်
စိုးမင်းအောင် (မန္တလေး) နဲ့
ရဲဘော်ခင်မောင်စိုး (ခ) ကိုစိုးကြီး (အင်းတော်) တို့ နှစ်ယောက်ကို
ဗန်းမော်ရင်း ကနေ ထည့်ပေးလိုက်တဲ့သူက
ခွဲမှူး စောသက်ထွန်း၊ သူဟာ သန်းထွန်းစိုး(ခ)တိုက်ပိတ်နဲ့အတူ
ရှေ့တန်းနယ်မြေမှာ အ ဖမ်းခံခဲ့ရသလို မြစ်ကြီးနားထောင်မှာ
အတူကျပြီး ပြန်လွတ်ခဲ့သူတဦး ဖြစ်တယ်။
အများကတော့ သန်းထွန်းစိုး (ခ) တိုက်ပိတ်ကို
ကိုယ်တိုင်သွားရောက် အဖမ်းခံခဲ့တယ်လို့ပဲ ယူဆခဲ့တယ်။
(သန်းထွန်းစိုး (ခ) တိုက်ပိတ်အနေနဲ့ ရန်သူ့သူလျှိုမဟုတ်ကြောင်း
သက်သေပြနိုင်ဖို့ ထောင်ကျဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။
ဒါမျိုးတွေကို တော့ လူမှန်တွေမို့ နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်တွေကျခံခဲ့ရဖူးတဲ့ ၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေက ထောင်ထဲမှာ
သူတို့ကြား “ကိုယ့်လူ သူ့ဘက်သား” လုပ်သွားခဲ့တဲ့
ထောင်ကျ (ရန်သူ့လူတွေ) နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပုံပြင်တွေအများကြီး ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာ ကို
ရန်သူ့သူလျှိုတွေကို ဖော်ထုတ်ဖို့ နောက်တန်းမှာရှိနေတဲ့
ကို ထွန်းအောင်ကျော်၊ ကိုညီညီကျော် တို့ကိုယ်တိုင်
အစပိုင်း စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့ကြတယ်။
ဘာဖြစ်လို့ ကျမ အဲဒီလိုပြောရတာလဲဆိုတော့
ကျမကိုယ်တွေ့ ဥပမာလေးနှစ်ခုပဲ ပေးပါ့မယ်၊
အသတ်ခံရတဲ့အထဲမှာပါတဲ့ မန္တလေးက ရဲဘော် ရန်အောင် ကိုတော့ မန္တလေးကျောင်းသားတွေ ကောင်းကောင်း သိကြပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ဘွဲ့ရ ကျောင်းသားများအဖွဲ့က လူတွေပေါ့။
မြို့မှာကတည်းက ကိုထွန်းအောင်ကျော်၊ ကိုညီညီကျော်တို့ ကိုညီညီ (ဆမား) တို့
ခိုင်းခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကို လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ရဲဘော် လူငယ်တယောက်။
ကျမနဲ့က မြို့မှာတုန်းက မြင်ဖူးပေမဲ့ စကားမပြောဖူး ဘူး။
တောထဲရောက်မှ တမြို့တည်းသားချင်းမို့ စကားပြောမိရာက
သူ့ရဲ့ရိုးသားမှုနဲ့ စိတ်ဓါတ်ကိုသဘောကျပြီး ခင်မင် သွားခဲ့တဲ့ ရဲဘော်တယောက်။
ဒီအဖြစ်အပျက်တွေ စဖြစ်ချိန်က သင်းသင်း၊ နန်းစော၊ ရန်အောင်နဲ့ ကျမတို့က ကေအိုင် အေ ဆေးသင်တန်းကျောင်း တက်နေကြတဲ့အချိန်၊
သင်တန်းသားတွေကို တရားဝင်သွားလာခွင့် ပိတ်ထားတယ်။
ဒါပေမဲ့ မိုင်းထောင်ထားတဲ့ လမ်းကြားတွေကနေတဆင့်
(ကိုအိုက်လျှံ အဲဒီလိုခိုးပြန်တုန်းက မိုင်းထိဖူးတဲ့လမ်း) ကနေ တပ်ကို ခိုးပြန်လို့ ရတယ်။
ရန်အောင်ကို ဆေးသင်တန်းမှာ လာဖမ်းတဲ့အချိန်တုန်းက
ကျမ အဲဒီလိုခိုးပြန်ပြီး လက်ရှိအာဏာရှိနေဆဲ
ဥက္ကဋ္ဌ ကိုထွန်း အောင်ကျော်ကို သွားတွေ့ခဲ့တယ်။
အဲဒီမှာ ဗန်းမော်ခရိုင်မှူး ကိုညီညီကျော်လည်း ရှိတယ်။
အတွင်းရေးမှူး ကိုအောင်နိုင် က အခန်းထဲမှာ လှဲနေတယ်။
ကျမက ရန်အောင် ဒီလောက်ရိုးသားဖြူစင်တာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတော့
ဥက္ကဋ္ဌ ကိုထွန်း အောင်ကျော် ရော ခရိုင်မှူး ကိုညီညီကျော်ကပါ
မြို့ထဲမှာတုန်းက ငါတို့နောက် လိုက်ရင် သူဘယ်လောက် ဘယ်လောက်ရတယ်လို့
အဲဒီအချိန်မှာ အခန်း ထဲမှာလှဲနေတဲ့ ကိုအောင်နိုင်က ၀င်ပြီး “ဟုတ်လား
ကျနော့်နောက်လိုက်ရင်ကော သူ ဘယ်လောက်ရသလဲဗျာ” လို့ ၀င် မေးခဲ့တယ်။
ကိုယ်အာဏာ လက်ရှိရှိနေဆဲအချိန်မှာ ကာကွယ်မပေးခဲ့ဘဲ
ဘာဖြစ်လို့ သူတို့ကိုယ် တိုင် ရိုက်စစ်တာမခံရသေးဘဲနဲ့
“ဟုတ်တယ်” လို့ အဲဒီအချိန်က ဖြေခဲ့သလဲဆိုတာကို
မန္တလေးမှာ လက်ရှိရှိနေတဲ့ ဗန်း မော်ခရိုင်မှူးလုပ်ခဲ့တဲ့
ကိုညီညီကျော်ကို ကျေးဇူးပြုပြီး အချက်အလက်အမှန်တွေ ဖြည့်ရေးနိုင်ဖို့ မေးကြည့်ပေးပါ။
ရန် အောင်ဟာ ကိုညီညီကျော်တို့ပြောခဲ့သလို “ဟုတ်တယ်” ဆိုရင်လည်း
ကိုထွန်းအောင်ကျော်တို့ ကိုညီညီကျော် တို့ကို ဆွဲ ထည့်သွားဖို့ မေ့နေမယ် မထင်ပါဘူး။
နောက်တယောက်က နန်းစော၊ နန်းစောနဲ့ ကျမနဲ့က
လူကြီးတွေထက် ကျမတို့ရဲ့ ရဲဘော်တွေကို ကျမတို့က ပိုချစ်တယ်။
အဲဒီအချိန်က တော်လှန်ရေးအတွက်ဆို အသက်ကို တောင် ပေးဖို့ဝင်မလေးအောင်
ကျမတို့ လူကြီးတွေကို ကျမတို့ယုံကြည်သလို
သူတို့ကလည်း ကျမတို့ကို ယုံကြည်တယ်။
ဒါကြောင့် ဥက္ကဋ္ဌ ကိုထွန်းအောင်ကျော် ကိုယ်တိုင် တောင်ထိပ်က သူနေတဲ့တဲမှာပဲ
ကျမနဲ့ နန်းစောကို ပစ်မှတ်ကို မှန်အောင်နဲ့ မြန်အောင်
အချိန်မှတ်ပြီး အနီးကပ် ပစ္စတိုပစ် လေ့ကျင့်ပေးခဲ့တယ်။
ဒီအလုပ်မျိုး လုပ်တဲ့သူတွေဆိုတာ အသက်ရှင်လျှက်
ပြန်လာစရာအကြောင်းလည်း မရှိတာမို့ မှတ်တမ်းဝင်ဓါတ်ပုံတွေပါ
လေ့ကျင့်ချိန် မှာ ကိုယ်တိုင်ရိုက် ပေးခဲ့သေးတယ်။
ကိုမင်းဌေး ဖေ့ဘုတ်ခ်မှာရှိတဲ့ ပစ္စတိုနဲ့ ကျမပုံဟာ
ကိုထွန်းအောင်ကျော် ကိုယ်တိုင် မှတ်တမ်းတင်ဖို့ ရိုက်ပေးခဲ့တာပါ။
ကျမတို့နှစ်ယောက် အဓိက လုပ်ရမဲ့အလုပ်က
ပြည်တွင်းကိုပြန်ဝင်ပြီး ရန်သူကြားမှာလုပ်ရမဲ့ အထူးလုပ်ငန်းတခု။
အဲဒီအချိန်က ကျမတို့ ဘာလုပ်မလဲဆိုတာ နည်းနည်းပါးပါး
အရိပ်အခြေနားလည်နေတဲ့ (၄၀၁) တပ်ရင်းက
ရဲဘော်ကျော်စွာဝင်းမောင်က ကျမတို့အတွက် စိတ်ပူပြီး သတိလာပေးတာလည်း ရှိတယ်။
ကျမ အဓိ က ပြောချင်တာက
ကျမတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကို ကျမတို့ရဲဘော်ရဲမေတွေ အသက်ပေးရဲတဲ့အထိ
သူတို့ခိုင်းတာလုပ်ဖို့ ဘယ်လောက်တောင် ယုံကြည်မှုရှိခဲ့ကြသလဲ ဆိုတာကိုပါ။
နန်းစောနဲ့ သင်းသင်းကို ဆေးသင်တန်းမှာ
ဥက္ကဋ္ဌ ကိုထွန်း အောင်ကျော် နေတဲ့တဲကို နောက်တကြိမ်တက်ခဲ့တယ်။
ကျမ တက်လာတာကို လှမ်းမြင်တဲ့ ကိုညီညီကျော်က “ဥက္ကဋ္ဌ ပြောနေတယ်
မယုံရင်ကြည့်နေ ခင်ရွှေလှိုင် တက်လာအုံးမယ်လို့ အဟုတ်ပဲ”။
အဲဒီအချိန်က အဲဒီတဲမှာ ကျောင်းသား ထောက်လှမ်းရေးထဲမှာပါတဲ့
မန္တလေးက ကိုသန်းဇော် (လက်ရှိ စစ်အစိုးရရဲ့အဖမ်းခံရပြီး ပြန်လွတ်မြောက်လာသူ)လည်း ရှိနေတယ်။ နန်းစောက ထောက်လှမ်းရေးဟုတ်တဲ့အကြောင်း
သူ့ထွက်ဆိုချက်တွေ လက်မှတ်ထိုးထားတွေရှိတယ် ဖတ် ကြည့်မလားလို့ မေးတယ်။
ကျမက လူတယောက်ကို ရိုက်စစ်ပြီး မေးထားတာတွေအပေါ် မယုံကြည်ဘူး။
နှစ်ယောက် တည်း ပေးတွေ့ပါလို့ပြောတော့
ကိုသန်းဇော်က “ဟုတ်ရင် မင်းသူ့ကို ပါးရိုက်မလား” လို့ ဖြတ်မေးတယ်။
နှစ်ယောက်ထဲ ပေးတွေ့လို့ သူ့ပါးစပ်က ဟုတ်ပါတယ်လို့ ကျမကိုပြောခဲ့ရင်
ကျမကိုယ်တိုင် သတ်ပစ်မယ်လို့ ပြန်ပြောခဲ့ပေမဲ့ တွေ့ခွင့်မရခဲ့ ဘူး။
အဲဒီလောက်ထိ ကျမ ယုံကြည်ချစ်ခဲ့တဲ့ ရဲမေကို
ဥက္ကဋ္ဌ ကိုထွန်း အောင်ကျော် ကိုယ်တိုင်က ရိုက်စစ်နေစရာမလိုပဲနဲ့
“အဟုတ်ပဲ” လို့ အဖြေပေးနေတယ်။
ကိုထွန်းအောင် ကျော်ကို မေးခွင့်မရတော့တဲ့အတွက်
အဲဒီအချိန်က ကိုထွန်းအောင်ကျော်နဲ့ အတူရှိနေခဲ့တဲ့
ကိုညီညီကျော် ပဲ ကျေးဇူးပြု ပြီး ဖြေပေးပါ။
ရဲဘော် ရန်အောင် (မန္တလေး၊ အသတ်ခံခဲ့ရ) ကို
ဒါတွေဟာ အထက်ထိ ရောက်လာနိုင်တယ်လို့ ကျမစိတ်ထဲ သံသယ၀င်လာခဲ့ဖူးတယ်။
မန္တ လေး၊ ရန်ကုန်ကလူတွေ ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။
အဲဒါကို နန်းစော အဖမ်းမခံရခင်မှာ ကျမ ပြောပြခဲ့ဖူးတယ်။
သူသာ အဲဒါတွေကို ပြန်ပြောခဲ့ရင် ဒေါ်လှိုင်လည်း
အဖမ်းခံရမှာ သေချာတယ်လို့ နောက်ပိုင်းမှာ နန်းစော ကျမကို ပြန်ပြောဖူးတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကိုသန်းဇော် (ကျောင်းသားထောက်လှမ်းရေး၊ မန္တလေး၊ အစိုးရထောင်ကျပြန်လွတ်)
နောက်တခေါက် ဆေးသင်တန်းကို ရောက်လာတဲ့ အချိန်မှာ
“ဥက္ကဋ္ဌ (ကိုထွန်းအောင်ကျော်)နဲ့ (ကိုအောင်နိုင်) အဖမ်းခံရတယ်လို့ကြားရင်
ကျမကို မဖမ်း လည်း ကျမ လာအဖမ်းခံမယ်” လို့ ပြောခဲ့တယ်။
ကျမတို့ တော်တော်ကြာတဲ့အထိ မသိခဲ့ဘူး။
ဆေးသင်တန်းရဲ့ စားဖို ဆောင်ထဲမှာ သင်တန်းသားတွေအားလုံး
မနက်စာစားနေချိန်မှာ ကေအိုင်အေ လူကြီးတချို့နဲ့
ထိစပ်မှုရှိတဲ့ ကေအိုင်အေ ရဲမေတယောက်က ကျမနားလာထိုင်ပြီး
“နင်တို့ ဥက္ကဋ္ဌကို ဖမ်းလိုက်ပြီ နင်တို့သိလား” လို့ တိုးတိုးလေး လာမေးတယ်။
ကျမ ထမင်းဆက်စားလို့ မရတော့ဘူး။
မျက်ရည်တွေပဲ ကျလာတာနဲ့ အဆောင်ပေါ် ပြန်တက်လာခဲ့တယ်။
အဲဒီနေ့က အ လုပ်လုပ်တဲ့ရက်ဖြစ်လို့ ရဲမေအငယ်တွေ
တောထဲကို ထင်းခုတ် ၀ါးခုတ်သွားကြတဲ့အခါ ငိုနေတဲ့ကျမကို ချန်ထားခဲ့ကြ တယ်။
ဆေးသင်တန်းကိုလည်း ကျမ စိတ်မ၀င်စားတော့ဘူး။
သူတို့သွားတာနဲ့ ထုံးစံအတိုင်း အဆောင်နောက်က
တော လမ်းအတိုင်း ဆင်းခဲ့ပြီး ဖြတ်လမ်းကနေ ကျောင်းသားတပ်ကို လာခဲ့တယ်။
“ထောက်လှမ်းရေးရုံး” ကိုသွားဖို့ စခန်းရုံးမှာ အကြောင်းကြားခဲ့တယ်။
အဲဒီအချိန် စခန်းမှူးက ရဲဘော် ဆရာထိန် (ဗန်း မော်၊ လက်ရှိ ချင်းမိုင်)
သူက ငိုထားတဲ့ကျမ မျက်နှာကို ကြည့်ပြီး ဘာမှမမေးဘူး။
ရဲဘော် မြင့်ဇော်ဦး (တိုက်ပွဲကျ) ကို လိုက်ပို့ခိုင်းခဲ့တယ်။
ကျမတို့နှစ်ယောက် လက်ချာဟောကို ဖြတ်တဲ့အချိန်မှာ
အဲဒီမှာ အစောင့်ကျနေတဲ့ ဒူဝါး လှဆိုင်း (မြစ်ကြီးနား၊ နောက်တန်းမှူး) ထွက်လာပြီး “ဘယ်သွားမလို့လဲ” မေးတယ်၊ “ထောက်လှမ်းရေးရုံးကို သွားမလို့” ဆိုတော့ “
အဲဒီမှာ အခု အလုပ်လုပ်နေတယ် သွားလို့မရဘူး၊
သွားချင်ရင် ဆေးခန်းမှာ CS (ရဲဘော်သံချောင်း) နဲ့
GS (ရဲဘော် အောင်နိုင်) ရှိတယ်” လို့ ပြောရင်း
ဆေးခန်းထဲကို ၀င်လိုက်တာနဲ့ ကျမ ဘာမှမပြောရသေးခင် ငိုထားတဲ့ကျမ မျက်နှာကိုကြည့်ပြီး
CS သံချောင်းက “ခင်ရွှေ လှိုင် ဥက္ကဋ္ဌ တယောက်ကိုဖမ်းဖို့ဆိုတာ
၉၀% မသေချာပဲနဲ့ ငါတို့မလုပ်ရဲဘူး။
မင်းတို့ ဥက္ကဋ္ဌကတောင် ဒီလိုလားဆိုပြီး မဟာမိတ်ယုံကြည်မှု အပျက်ခံပြီးလုပ်ရတာ။
ခင်မောင်ဇော် (မန္တလေး၊ အရာရှိရိပ်သာမှာ အကျယ်ချုပ်နဲ့ အဖမ်းခံရပြီး ပြန် လွတ်) ဆိုကြည့်စမ်း
ငါဘယ်လောက် ယုံကြည်ခဲ့သလဲ စစ်ရုံးကိုကိုင်ခိုင်းထားတာ
ကြောင် (ကျော်နိုင်ဦး) သာယာဝတီ၊
အရာရှိရိပ်သာမှာ အကျယ်ချုပ်နဲ့ အဖမ်းခံရပြီး ပြန်လွတ်) ဆိုလည်း
GS က ယုံကြည် လို့ သူ့နားမှာတောင် ခေါ်ထားခဲ့တာပဲ”
ပြောရင်းနဲ့ သူ့မျက်လုံးတွေကို စိုက်ကြည့်နေတဲ့
ကျမ မျက်လုံးကို သူသတိထား မိပြီး “မင်းက ငါပြောရင် ယုံမှာမဟုတ်ဘူး၊
GS ခင်ဗျာ့ပဲ ရှင်းပြလိုက်ပါ” လို့ ပြောပြီး ဆေးခန်းထဲက ထွက်သွားတယ်။
ကိုအောင်နိုင် က “လောလောဆယ်တော့
မင်းတက်နေတဲ့ ဆေးသင်တန်းကိုပဲ ပြီးအောင်လုပ်ပါ။
ငါ့ကိုဖမ်းခဲ့ရင်လည်း ငါတော့ အသားအနာမခံဘူး။
ကျမ ဘာဆက်ပြောစရာ ကျန်ပါသေးလဲ။
အဲဒီအချိန်မှာ ကျမ နားလည်လိုက်တာက
ရန်သူ့သူလျှိုတွေဟာ ယူဂျီလမ်းကြောင်းကတဆင့် ၀င်လာခဲ့သူတွေ ဖြစ်တဲ့အ တွက် ယူဂျီလမ်းကြောင်းမှာရှိနေကြတဲ့ ကျမ အပါအ၀င် အားလုံးကို
ဒီလိုနဲ့ တရက်၊ ဆေးသင်တန်း လက်ချာဟောမှာ စာသင်နေတုန်း
ဧည့်သည်လာတယ်ဆိုပြီး သင်တန်းကြီးကြပ်က လာခေါ်ခဲ့ တယ်။
ဆေးသင်တန်းမှာ လာဖမ်းရင်လည်း ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ပဲ ခေါ်ထုတ်သွားတတ်တာမို့
ကျန်ခဲ့တဲ့လူတွေက ကျမကိုဖမ်းသွား တယ်လို့ပဲ ထင်ခဲ့ကြတယ်။
စောင့်ကြည့်နေတဲ့ ကိုသန်းဇော်နဲ့ ဒူဝါလှဆိုင်း။
အမှတ်တွေလည်း ကျလာ တယ် ပြောလို့လာတွေ့တာ၊
ရဲဘော်တပ်စိပ်နှစ်စိပ်၊ ရဲမေတပ်စိပ်နှစ်စိပ်) အတွက် လည်း
တခြားလိုအပ်တာတွေ ဘာတွေရှိရင်လည်း ပြောဖို့” တဲ့။
ဒါဟာ ကျမကို အကဲစမ်းနေတာ ဆိုတာလောက်တော့ ကျမနားလည်ပါတယ်။
ရဲဘော်မြဇော် (ခ) ၀သုန် (ပုလိပ်မြို့၊ လက်ရှိအမေရိက၊ တောနဲ့မြို့ဆက်သွယ်ရတဲ့ ရဲဘော်တပိုင်း ယူဂျီတပိုင်း) အရက်မှူးပြီး ရောက်လာတယ်၊
“ကျနော် ကိုကြီး (ကိုထွန်းအောင်ကျော်) ကို ထိုးခဲ့ရိုက်ခဲ့ တယ်” လို့ပြောပြီးငိုတယ်။
ပြီးတော့ “ကိုကြီးက ဟုတ်တယ်၊ ကျနော် သူလွတ်လိုက်လို့
သူ့အိမ်ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာ ကျနော် အ၀ိုင်းခံခဲ့ရတယ်။
မနည်းအသက်လွတ်အောင် ပြေးခဲ့ရတာ၊ မန္တလေး တီတီစီကျောင်းထဲက
မြက်ရိုင်းတွေကြား မှာ မြက်ရိတ်သမားအယောင်ဆောင်ပြီး
နှစ်ရက်သုံးရက်လောက် အောင်းနေခဲ့ရသေးတယ်” လို့ ဆက်ပြောတယ်။
ကျမ က “သူ ဟုတ်တယ်ဆိုရင်လည်း သူ့ဘာသာ သူခံလိမ့်မယ်။
မင်းကြားထဲက ဘာမှ သွားထိုးစရာ အကြောင်းမရှိဘူး” လို့ ပြောခဲ့တယ်။
တခါတလေ သူက ကျောင်းသား ထောက်လှမ်းရေးရုံးကလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့
ကျမကိုစကားတွေ လာအစ်အောက်နေတာ ရှိတယ်။
မင်းငါ့ကို စကားတွေ လာအစ်အောက်နေတာ ငါမသိဘူးများ မှတ်နေလား” ဆိုပြီး
ကျမ ဆေးခန်းမှာ တာဝန်ကျနေတုန်းက
သူ တကိုယ်လုံးတုန်ပြီး ငှက်ဖျားထနေလို့ ဆေးခန်းလာပြတယ်။
ဆေးထိုးပေးရင်း အဲဒီကိစ္စနဲ့ စကားထများတယ်၊
“ဟုတ်လို့ မှန်လို့လုပ်တာ၊ မဟုတ်ရင် ကြိုးစင် တက်မယ်” ပြောပြီး ဆေးတောင်မယူတော့ဘူး၊ စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးနဲ့ ထွက်သွားတယ်။
ကျမကလည်း “အေး မင်းတို့ ကြိုး စင်တက်မယ့်အချိန်ထိ စောင့်ကြည့်နေမယ်လို့” ပြောခဲ့တယ်၊ အိန္ဒိယဘက်မှာပြန်တွေ့တော့ အဲဒီလိုမလုပ်ရင် ကျနော် လည်း ပါနိုင်လို့တဲ့။
ကဲ ကြိုးစင်တက်မယ်လို့ ကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့ သူရဲကောင်းများ ထွက်လာပြီး ရှင်းကြပါ။
ဆေးသင်တန်းတက်နေချိန်မှာပဲ နောင်ရာပါရွာလေးကို ခွပြီးစီးနေတဲ့
တောင်ကျချောင်းနှစ်ချောင်းက တချောင်းတည်း ပေါင်းပြီး တိုက်စားသွားလို့ လူတွေအများကြီး သေကြေပျက်စီးခဲ့ရတယ်။
အဲဒီထဲမှာ ကျမတို့ ကျောင်းသားရဲဘော် (၈) ယောက်လည်း ပါသွားခဲ့တဲ့အတွက်
သူတို့အတွက် အမှတ်တရမှတ်တိုင်လေး အဲဒီနေရာမှာ စိုက်ထူခဲ့ကြတယ်။
တယောက်ကတော့ သဲတွေနုန်းတွေထဲမှာ ကိုယ်တပိုင်းနစ်ပြီး သတိလစ်နေတာပြန်တွေ့ခဲ့တယ်၊
အသက်ရှင်ခဲ့ပေမဲ့ ခြေ ထောက်တဘက် မသန်တော့ဘူး။
ရဲဘော်တယောက်ကတော့ ဆန်ထမ်းရင်း ကြိုးတံတားပေါ်က ပြုတ်ကျသေဆုံးခဲ့ရ တယ်။
ရွာသားတွေကို လွိုင်ဆာဘက်မှာ ပြောင်းရွှေ့နေရာချထားတာကို
ဆေးသင်တန်းသားတွေသွားကူပြီး ဒူးလောက် နစ်တဲ့ ရွံ့တွေနွံတွေထဲမှာ နာရီဝက်လောက်သွားရတဲ့ တောထဲက ၀ါးတွေ၊ တိုင်တွေကို ထမ်းသယ်ရင်း အဆောက်အဦ တွေ ပြန်ဆောက်ပေးကြရတယ်။
အဲဒီ လွိုင်ဆာဆိုတဲ့ ရွာလေးဟာ နအဖဂိတ်တွေနဲ့ တနာရီတောင် မဝေးတော့ပါဘူး။ ထွက်ပြေးချင်ရင် ပြေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကျမ မစဉ်းစားခဲ့ဘူး ရင်ဆိုင်ဖို့သာ ပြင်ထားခဲ့တယ်။
အရင်က ကျမကို ခင်ခဲ့တဲ့ မဘေဘီ (မိုးညှင်း)၊
မနှင်းမေ (မိုးညှင်း) တို့ဟာ ကျမကို မခေါ်မပြောနိုင်တော့အောင်
အစကတည်းက သိပ်အတွဲ မဖြစ်ခဲ့တဲ့ တခြားရဲမေအကြီးတချို့ကတော့ သူတို့ပါအဆစ်ပါသွားမှာ ကြောက်တယ်ထင်ပါရဲ့
ကျမနဲ့ စကားမ ပြောဖြစ်အောင် ရှောင်ကွင်းနေကြတယ်။
ကျမအနားမှာတော့ နဂိုကတည်းက ကျမကို ခင်မင်နေတဲ့ ရဲမေအငယ်တွေပါပဲ။
တခါကတော့ ထောက်လှန်းရေးရုံးက လာခေါ်လို့ လိုက်သွားရတယ်။
“ဘာမှ မ ဟုတ်ပါဘူး ငါတို့စစ်တာကို မင်းကြည့်ချင်ရင် ကြည့်ရအောင်” တဲ့။
မျက်လွှာလေးတွေချပြီး ငုတ်တုတ်လေးတွေ ထိုင်နေ သူ သုံးယောက်က
ရဲဘော်ရန်အောင်၊ မခင်ချိုဦး၊ သင်းသင်း၊ မျက်လုံးချင်းစုံကြည့်မိရင်
ကျမအတွက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်တာ ကို သူတို့သိနေလို့ ထင်ပါတယ်။
တချက်မှ ကျမကို မကြည့်ကြဘူး။
ကျမရှေ့မှာမို့ ဘာမှထူးထူးခြားခြား မေးမြန်းနေတာ မျိုး မရှိပါဘူး။
ဒါလည်း ကျမကို အကဲစမ်းနေတယ်ဆိုတာ သိနေတဲ့ ကျမက
“အဲဒီအထဲမှာ ကျမကော မပါဘူးလားလို့” တမင်ဘုတောပြီး ၀င်မေးခဲ့တယ်၊
သုံးယောက်စလုံး “မပါပါဘူး” လို့ ပြိုင်တူ ဖြေခဲ့ကြတယ်။
ဇော်ဦး (တိုက်ပွဲကျဆုံး၊ ရှေ့တန်းထွက်စဉ်က ကျမရဲ့တပ်စိပ်မှူး) ပြောဖူးတယ်” တဲ့။
ဘယ်တုန်းကမှ ကျမကို အဖမ်းခံထားရတဲ့ဘက်မှာ တာဝန်မချပေးခဲ့ဘူး။
အမျိုးသမီးတွေအတွက် ဘယ်ရဲမေတွေကို အ စောင့်ချထားတယ်ဆိုတာလည်း
ကျမ မသိဘူး။ ဆေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တာဝန်ကိုတော့
ဆေးတာဝန်ခံ ရဲမေ အန်ရမ်တီး (မိုးကောင်း) နဲ့
ဆေးဆရာမ တင်စန်းဦး (မိုးညှင်း) ပဲ တာဝန်ယူခဲ့တယ်။
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ မအင်္ဂါကို စစ်ဆေးခဲ့သူက
ဆေးတာဝန်ခံ ဆရာမ အန်ရမ်တီး ပါ။
ဘယ်သူစစ်တာလဲ ထည့်မပြောတော့ လုပ်ခဲ့သူတွေကပဲ
တဏှာရူးလို့ လုပ်ခဲ့သလို ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်စေပါတယ်။
တခါတော့ ကျမကို ကျောင်းသားထောက်လှမ်းရေးထဲက
ကျော်ထင်ဦး (အထဲပြန်ဝင်သေဆုံး) လာခေါ်လို့ လိုက်သွားရတယ်။
အဖမ်းခံထားရတဲ့ လူတွေကိုထားတဲ့ ဟောကြီးရဲ့
နေပူဆာလုံ ရင်း စကားပြောနေကြတာကို တွေ့ရတယ်။
ကျမကိုကြည့်လိုက်တဲ့ မျက်လုံးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်၊ ပြုံးလိုက်တဲ့ နှုတ်ခမ်းကို မမေ့ပါ ဘူး။
ကျမ ဘယ်လိုရဲမေလဲဆိုတာ သိတဲ့လူထဲမှာ ကိုထွန်းအောင်ကျော်လည်း ပါပါတယ်။
အထဲမှာ ဖျားနာနေတဲ့ ရဲဘော် တချို့ကို ဆေးထိုး၊ ဆေးပေးခဲ့တယ်။
မဖျားနာတဲ့ လူတွေအတွက် ကျမလက်ထဲမှာပေးစရာက
ငါးကြီးဆီပဲရှိတာမို့ သူတို့ တောင်းတောင်း မတောင်းတောင်း
အားလုံးရဲ့ လက်ထဲထည့်ပေးခဲ့တယ်။ ဒါလည်း အကဲစမ်းချက် တခုပါပဲ။
ကျမကို ယူဂျီလမ်းကြောင်းမှာ သုံးခဲ့တဲ့
တကျပ်တန် ငွေစက္ကူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးခဲ့တာရှိတယ်။
“သိချင်ရင် ဥက္ကဋ္ဌ ကိုအောင်နိုင်ကိုမေးကြည့်၊
သူ ခိုင်းခဲ့တာ” လို့ဖြေတော့ “မင်းကလည်း အလာကြီးပါလား” တဲ့။
အမှန်က ကိုအောင်နိုင်နဲ့ ကျမနဲ့ တိုက်ရိုက်မပါတ်သက်ပါဘူး။
ကျမ တမင်ဘုတော ပြီး ဖြေခဲ့တာ။
ရင်းမှူး သိုက်ထွန်းဦးဆိုရင်လည်း ကျမလိုပဲ သံသယနဲ့ အကြည့်ခံရတဲ့ထဲမှာ ပါပါတယ်၊
“ငါ့ကို ဒီလိုမဆက် ဆံနဲ့ ဖမ်းချင်ရင် တခါတည်းဖမ်းလိုက်” လို့
ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်ရင် ယုံကြည်အောင်လုပ်ပြသလို ဖြစ်နေမှာစိုးလို့
မကောင်းတာတွေ ဘဲ့တိုက် လုပ်ခဲ့တာရှိတယ်။
(ဒါကိုတော့ မရေးတော့ဘူး မိသားစုဝင်တွေ စိတ်မကောင်းမှာစိုးလို့)
မယုံ ကြည်ပဲနဲ့ ဆေးလာထိုးခိုင်းတဲ့ လူကြီးတွေရှိရင်
လူကြီးရော ရဲဘော်တွေ ရော တယောက်မကျန်
ငါးကန်တူးရမယ်ဆိုရင်လည်း မသွားလို့ CS သံချောင်းက
ရဲဘော်သက်လင်း (ကျောင်းသား ထောက်လှမ်းရေး၊ ဗန်းမော်) ကို လာခေါ်ခိုင်းတယ်။
“ဒေါ်လှိုင် မပါရင် ကျနော့်ကို ပြန်မလာနဲ့လို့ ပြောလိုက်တယ် လာပါ” လို့
အတင်းခေါ်ခဲ့ပေမဲ့ “မလိုက်ဘူးကြိုက်တာလုပ်” ဆိုပြီး ဇွတ်ပေနေတာမျိုးတွေလည်း ရှိတယ်။
ခရိုင်မှူး ကိုစိန်အေးကလည်း (မိုးညှင်း၊ ကိုသန်းဇော်နဲ့အတူ စစ်အ စိုးရ အဖမ်းခံ၊ ထောင်ကျ ပြန်လွတ်) က ကိုမျိုးဝင်းတို့ ရှေ့တန်းထွက်ဖို့ ပြင်နေချိန် ကျောင်းသားထောက်လှမ်းရေးရုံးထဲမှာ ကျမကို ပြောခဲ့တာရှိတယ်။
တခုလေးပဲ မှားနေတယ်” တဲ့၊
“အဲဒီ မှား နေတဲ့တခု က ဘာလဲ” လို့ ကျမ ချက်ချင်း ပြန်မေးတော့ ပြန်မဖြေခဲ့ဘူး။
လေ့ကျင့်မွမ်းမံ သင်တန်းတွေ ပြန်လုပ်နေတဲ့အချိန်
သင်တန်းတက်နေရင်း တညနေမှာ ဖျားနာခြင်း လုံးဝမရှိဘဲ
အ ကောင်းကြီးကနေ တကိုယ်လုံး ညောင်းကိုက်ပြီး အန်တာနဲ့
၀မ်းလျောတာနဲ့ တပြိုင်တည်းဖြစ်ပြီး သတိလစ်သွားတယ်။
သတိရလာတော့ ခြေထောက်နှစ်ဘက် လက်နှစ်ဘက်စလုံးမှာ ပုလင်းကြီးတွေ ချိတ်ထားတယ်။
ခြေသည်းတွေ လက် သည်းတွေ အားလုံး ပုတ်ကုန်တယ်။
ဆေးရုံကဆရာဝန်တွေလည်း ဒါမျိုးလက္ခ ဏာ တခါမှမတွေ့ဖူးဘူးတဲ့။
အဲဒီအချိန်မှာ ရင်းမှူးသိုက်ထွန်းဦးနဲ့ ရဲဘော်မြဇော် ရောက်လာပြီး သတင်းမေးတယ်။ “ဆေးသောက်တယ်ဆို” တဲ့၊ “ဆေးရုံတက်နေပါတယ် ဆိုမှ ဆေးသောက်တာပေါ့” လို့ အူကြောင်ကြောင်နဲ့ ဖြေမိတော့၊
ဆေးဖြုတ်ချတယ် ကြားလို့” တဲ့၊
ကဲ ကာယကံရှင်က အခုမှသတိရလာခါစ
ကျောင်းသားတပ်မှာတော့ “ဖမ်းတော့မယ်မှန်း သိလို့ ဆေးဖြုတ်ချတယ်” ဆိုတဲ့
ဘယ်သူတွေက ဒါတွေကို ဖြန့်နေကြတာလဲ။
ဘယ်သူ့ကို သွားရှင်းပြ ရမှာလဲ။
ဒါတွေအားလုံးဖြစ်ပျက်ပြီး တပ်ထဲမှာ နေချင်စိတ်ကုန်သွားလို့ (၁၉၉၂ ၉၃) ဗဟိုနဲ့ (၁၇) ရက်လောက် မေခ မေလိခ၊ ချီ ဖွေလောခေါင်ကားလမ်းကို ဖြတ်ပြီးသွားရတဲ့
ကျောင်းဆရာမသွားလုပ်ဖို့ ကျမနဲ့ အန်တီအေး (မန္တလေးမှာ အဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့
တောထဲကနေ ကိုမျိုးဝင်း ပြန်လွတ်တဲ့ ယူဂျီ မမူရဲ့ညီမ ရဲမေ မခင်မာ အေး)
သူက ကျမသွားမှာကို စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး
“ငါ မင်းကိုယုံတာပဲ မင်းက ဆေးဖြုတ်လိုက်တာကိုး” တဲ့။
ကြောင် (ခ) ကိုကျော်နိုင်ဦးကို ဖမ်းတဲ့အချိန်တုန်းကလည်း ကိုသံချောင်းက ကျောင်းသားထောက်လှမ်းရေးတွေကို
“ငါ့ ကြောင်လေးတော့ ဟုတ်မယ် မထင်ပါဘူးကွာ
မင်းတို့ကြည့်လည်း လုပ်ပါအုံး” လို့ ပြောခဲ့တယ်။
“မင်း ငါတို့ကို ထမင်းချက်ကျွေးခဲ့တာပဲ
ဘာလို့ အဆိပ်ခပ်မသတ်ခဲ့တာလဲလို့ သွားမေးသေးတယ်”
အဲဒီတော့ ကြောင်က ပြန်ဖြေခဲ့တယ် “ကျနော် CS ကို ချစ်လို့” တဲ့။
ကြောင် (ခ) ကိုကျော်နိုင်ဦး (သာယာဝတီ၊ လက်ရှိထောင်ကျနေတဲ့ ကိုသံချောင်းကို ကူ ညီပေးနေသူ) အဆောင်ရှေ့မှာ ကျမကို လာပြောခဲ့တာ ရှိတယ်။
“မင်းကို မျက်မြင်သက်သေအဖြစ် ချန်ထားနိုင်ဖို့ အား လုံးက ၀ိုင်းကာထားကြတယ်။
မင်း အဲလို ဗြောင်ပြော ဗြောင်ဖိုက် နေတာတွေ က မင်းကို ကယ်သွားတာတဲ့)
ငါ သူ့ကို စိတ်မချ လို့ ထွက်မပြေးသေးတာ” တဲ့၊
သူပြေးခါနီးအချိန် ကေအိုင်အေ အပစ်အခတ်ရပ်ပြီး
(၁၉၉၄ ၉၅) မှာ “ငါ မနက်ဖြန်ဆို ဒိုး ပြီ” လို့ ကျမ လိုက်ချင်လည်းလိုက်လို့ရအောင်
အဆိပ်များမိခဲ့သလားလို့တောင် သံသယဖြစ် လာတယ်။
အဲဒီလိုဖြစ်ခဲ့တာဟာ ကျမအတွက်အကောင်းလား အဆိုးလား ကျမ မသိဘူး။
(၁၉၉၂) ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၂) ရက်၊
လေ့ကျင့်မွန်းမံသင်တန်းက ရဲဘော် ရဲမေတွေကို ဘွန်လွန်းဘက် တရက်ခရီးလွတ်လိုက်တယ်။
နောက်တန်း မှာ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ ရဲဘော်တချို့ပဲ ကျန်ခဲ့တယ်။
ရဲမေဆောင်မှာ နေမကောင်းလို့ သင်တန်းကထွက်ခဲ့တဲ့
ကျမနဲ့ ကျမကို စောင့်ကြည့်နေတဲ့ ရဲမေ ဂျူးဂျူး (ခ) မာမာထွန်း (မိုးကောင်း၊ နောင်မှာ ကိုသံချောင်းဇနီးဖြစ်လာသူ) နှစ်ယောက် ပဲ ရှိတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ အတွင်းရေးမှူး ကိုအောင်နိုင်နဲ့ ကိုယ်ရံတော် ကျားလေး (ခ) ရဲဘော်အောင်စိုး ရှေ့တန်းသွားသ လို ၀တ်စုံအပြည့်နဲ့ ရောက်လာပြီး
“ခရာမှုတ်သံ မကြားဖူးလား” လို့မေးတော့ နှစ်ယောက်စလုံးက
“မကြားဖူး ဘာဖြစ်လို့ လဲ” ပြန်မေးတော့ မဖြေဘဲ ပြန်ထွက်သွားတယ်။
ခဏနေတော့ အာဆန်ကုန်းဘက် တက်သွားတဲ့
လူတန်းရှည်ကြီးကို ကျမတို့နေတဲ့ ရဲမေဆောင်ကနေ လှမ်းမြင်လိုက် တော့
“မဂျူး အဲဒါ ဘာလုပ်တာလဲ” လို့ ကျမမေးကြည့်တော့
ကျမက သူ့ကို “သွားကြည့် မယ် လိုက်မလား” လို့ မေးတော့ “မလိုက်ချင်ဘူး” တဲ့၊
“ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ငါသိကို သိနေရမယ်” ဆိုတဲ့စိတ်က
ကျမကို အမြဲ တွန်းအား ပေးနေခဲ့တယ်။
ကျမ သူတို့ရှိတဲ့နေရာ ကုန်းပေါ်ကိုရောက်တော့
ကိုသံချောင်းက “ဟာ မင်းကြည့်ရဲမှာ မဟုတ်ဘူး။
ကျမက ရပါတယ်လို့ ပြောရင်း သူတို့နားမှာ ၀င်ထိုင်လိုက်တယ်။
တန်းစီလျက်ရှိနေတဲ့ အသတ်ခံရမဲ့လူ (၁၅) ယောက်ရဲ့
တူးထားပြီးသားတွင်းတွေရဲ့ ရှေ့မှာ အားလုံးကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့။
တယောက် စီကို ဟုတ်သလား ထပ်မေးတော့
ခွဲမှူးသာဓု (မိုးကောင်း) တယောက်ပဲ
သူဟာ ငယ်ငယ်ကတည်းက မိဘမဲ့မို့ ရဲရိပ်သာ က ခေါ်ယူမွေးစားခဲ့တယ်။
ဒီကိုတာဝန်နဲ့ လွတ်လိုက်တာ ဟုတ်ပေမဲ့
သံယောဇဉ်တွယ်သွားလို့ သူ့ကိုခိုင်းခဲ့တာတွေ ဘာတခုမှ မလုပ်ခဲ့ပါဖူးလို့
အားလုံးက “ဟုတ်ပါတယ်” လို့ပဲ ၀န်ခံခဲ့ကြတယ်။
မခင်ချိုဦး (ရန်ကုန်) ဟာ နန်းအောင်ထွေးကြည်၊
တိုက်ပိတ် (ခ) သန်းထွန်းစိုးနဲ့ အတူလာခဲ့ သူတဦး ဖြစ်သလို၊
ကျမ မြောက်ပိုင်းရောက်စက ကျမနဲ့စားအတူ အိပ်အတူဖြစ်အောင်
ခင်မင်သွားတဲ့သူတဦး ဖြစ်သလို သူ့မှာရှိနေတဲ့ ပဲပုတ် ခြောက်လေးတွေ
မီးကင်ပြီး ကျမကို သုတ်ကျွေးတတ်တယ်။
မခင်ချိုဦးဟာ နန်းအောင်ထွေးကြည်နဲ့ အတူလာခဲ့ပေမဲ့
သူတို့နှစ်ယောက် အတူတွဲပြီး နေထိုင်စားသောက် သွားလာဆက်ဆံတာမျိုးတွေ
ကျမ တခါမှ မမြင်ခဲ့ဖူး တာကို သတိထားမိလာတယ်။
မခင်ချိုဦးက ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် မြန်မာစာကျောင်းသူလို့ ပြောခဲ့ပေမဲ့
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရဲ့အနေအထားကို မေးကြည့်တော့
သူဘာမှမသိဘူး ဖြစ်နေတဲ့အပြင် သူရဲ့နေပုံထိုင်ပုံတွေအရ
သူ့ကို မကောင်းတဲ့မိန်းမသဘော ယူဆထားတာကို ကြားခဲ့ရတယ်။
ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး နန်းအောင်ထွေးကြည်ကို ကျမမေးကြည့်တော့
“သူ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ ဟုတ်မဟုတ် ငါမသိဘူး။
ငါ ကတော့ စိတ်ပညာနဲ့ စာပေးစာယူ ယူထားတာပဲ၊
သူနဲ့ငါက NLD မှာ လုပ်ရင်းတွေ့ကြတာ။
သူ အရမ်းဆင်းရဲတယ် ဆို တာတော့ ငါသိတယ်။
အခု ကျူးကျော်ရပ်ကွက်တွေ ဖျက်လိုက်တော့
သူတို့မိသားစုတောင် ဘယ်ရောက်နေလဲ မသိ တော့ဘူး။
(တိုက်ပိတ် (ခ) သန်းထွန်းစိုးတော့ သိနိုင်မယ်လို့ ကျမထင်တယ်)၊
ပြီးတော့ မိချို ထွက်ဆိုတာတွေမှန်သမျှ
ငါ ကနောက်ကနေ ဒိုင်ခံလိုက်ဖြေနေရတာ။
ငါကတော့ အားလုံးကို သန်းထွန်းစိုး (ခ) တိုက်ပိတ်ကိုချည်းပဲ လွဲချဖြေခဲ့တာ” လို့ ပြောခဲ့တယ်။
သေချာတာကတော့ မခင်ချိုဦးဟာ လည်မလိုလိုနဲ့
အသုံးချခံလိုက်ရတာ ဖြစ်ဖို့ များပါတယ်။
တယောက်စီ နေရာတွေချပေးဖို့ ခေါ်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာ
ကိုထွန်းအောင်ကျော်က “VCS,CS တို့ မှား မယ်နော်” လို့ စကားတခွန်း ပြောသွားခဲ့တယ်”
ဓါးကိုအသုံးပြုဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ သတ်မယ့်သူ (၁၅) ယောက်လုံးရဲ့
အ၀တ်အစားတွေကို ပခုံးအောက်ကျောလယ်လောက်ထိ ချွတ်ချခဲ့ကြတယ်။
(နန်းအောင်ထွေး ကြည် ပြောခဲ့သလို
မခင်ချိုဦးကို တကိုယ်လုံးချွတ်ချပြီး ရဲဘော်တွေကို
မြောက်ပိုင်းက ရဲဘော်တွေအားလုံးကို သိမ်းကြုံးစော်ကားသလို ဖြစ်နေပါတယ်။
လုပ်ချင်လုပ်လို့ ပြော ရအောင်လည်း
အဲဒီအချိန်မှာ ရဲဘော်တွေအားလုံးက လူပျိုတွေချည်းပါ။
ကျော်ခိုင်ဝင်း အပါအ၀င် တခြားရဲဘော်တွေ လည်း အများကြီးရှိပါတယ်)
၁၅ ယောက်ကို သူလျှိုတွေအဖြစ် သေဒဏ်ချမှတ်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို
ဗဟိုကော်မတီထဲက ဘယ်သူတွေ ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ ကျမ မသိခဲ့ပေမယ့်
အမိန့်ပြဋ္ဌာန်းကိုတော့ အားလုံးကိုယ်စား ကိုမျိုးဝင်းတယောက်ပဲ
တာဝန်ခံလက်မှတ်ထိုးပြီး ထုတ်ပြန်ချက်ကို ရဲဘော်တွေကြားအောင်
တကယ်လုပ် တော့မယ့် အချိန်မှာတော့
ကိုမျိုးဝင်းနဲ့ ကိုသံချောင်းက ကျမကိုပြန်ခိုင်းခဲ့သလို
ကျမကိုယ်တိုင်လည်း လက် တွေ့ကျ ကြည့်နိုင်တဲ့အားမရှိတာမို့ ပြန်ဆင်းလာခဲ့ပေမယ့် ကျမခေါင်းထဲမှာတော့ မေးခွန်းတွေ တခုပြီးတခု ရောက်လာခဲ့ တယ်။
ဒါတွေ စဖြစ်ကတည်းက “ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဆိုပြီး
အဖြစ်အပျက်အမှန်ကို အသိချင်ဆုံး လူထဲမှာ ကျမရှေ့ ဆုံးက ပါခဲ့တယ်။
Posted by admin on April 3, 2012 64 Comments
တယောက်မကျန် ဟုတ်ပါတယ်။ ၀န်မခံမချင်း ရိုက်စစ်ခံခဲ့ရတာ သေချာရဲ့လား။ ရိုက်စစ်စရာ သိပ်မလိုဘဲ သိပ်အသား အနာမခံရဘဲ အစီစဉ်တကျ ဖြေဆိုခဲ့ကြသူတွေကော တယောက်မှ မရှိနိုင်ဘူးလား။ ဖမ်းတဲ့သူထဲကပဲဖြစ်ဖြစ် အဖမ်းခံရပြီး သူတွေထဲကပဲဖြစ်ဖြစ် မင်းတို့ ငြင်းမနေနဲ့ ငြင်းနေရင် အသားအနာခံရဖို့နဲ့ သေဖို့ပဲရှိတယ်။ ဟုတ်တယ်လို့ ဒီလိုဒီလို ဖြေ လိုက်လို့ဆိုပြီး လမ်းကြောင်းပေးခဲ့သူတွေ ရှိခဲ့လား။ ဘယ်သူတွေလဲ။ မဟုတ်ဘဲနဲ့ အဖမ်းခံခဲ့ရတယ်။
တယောက်စီ ခေါ် ထုတ်ခွဲစစ်ခဲ့တယ်။ ပုံမှန်ဆို ထွက်ဆိုချက်တွေက တယောက်တပေါက်စီ ဖြစ်ကိုဖြစ်နေရမယ်။ ရန်သူ့ သူလျှိုတွေ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အနေအထားတွေကို ဥက္ကဋ္ဌ ကိုထွန်းအောင်ကျော်။ ကိုညီညီကျော်တို့ အဖမ်းမခံရခင် အစ ပိုင်းမှာကတည်းက ညွှန်ပြနေရမယ်။
လက်တွေ့မှာ အရာရှိအဆင့်နဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့ လူတွေရဲ့စစ်ချက်တွေက အစီအစဉ်တကျ အချိတ်အဆက်မိမိ ရှိနေတဲ့အ ပြင် အဲဒီအဆင့်မှာ ချရေးခိုင်းခဲ့တဲ့ သူတို့ချင်းဆက်သွယ်တဲ့ ကုပ်တွေပါ တူနေကြတာက ယုံကြည်လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့ အနေအထားမျိုးတွေကို ညွှန်ပြခဲ့တဲ့အတွက် မှတ်တမ်းတွေယူ၊ ဗွီဒီယိုတွေ ရိုက်ခဲ့ကြတဲ့အပြင် “ငါတို့ မဟုတ်ပဲနဲ့ လုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး” ဆိုတာ သက်သေပြဖို့ “ယင်ဒီးလို” သတင်းထောက်မျိုးကိုတောင် တောထဲခေါ် ပြလိုက်ကြသေးတယ်။
အဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့ထဲက ကြောင် (ခ) ကိုကျော်နိုင်ဦး၊ နန်းအောင်ထွေးကြည်၊ ကိုညီညီအပါအ၀င် ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး မေး မြန်းလာကြတာတွေရှိခဲ့ရင် သက်သေပြနိုင်ဖို့ ချန်ထားတဲ့လူတွေကို မိဘတွေကိုယ်တိုင်လာခေါ်ရင် လွတ်ပေးမယ်ပြောပြီး မိဘတွေဆီကို စာရေးခိုင်းခဲ့သလို မိဘတွေ တကယ်လာခေါ်ကြတော့ ပြန်မထည့်ပေးဘဲ လူကြီးတွေ ဂတိပျက်ခဲ့တာ လည်းရှိတယ်။ တောထဲလိုက်လာတဲ့ မိဘတွေကို ခင်ဗျာ့တို့ သားသမီးတွေက ဒီလိုဒီလိုတွေပါလို့ ရှင်းပြခဲ့ကြသေးတယ်။
အဲဒီအချိန်က ဗဟိုဥက္ကဋ္ဌ ကိုနိုင်အောင်လည်း ရောက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့ အကျယ်ချုပ်နဲ့ပြန်လွတ်ထားတဲ့သူတွေနဲ့ တော ထဲကို လိုက်လာခဲ့တဲ့ မိဘတွေအတွက် ဖျော်ဖြေပွဲလေးတခု လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ အဖမ်းခံရပြီး သူ့မိခင်လာတွေ့ပြီးနောက် အ ကျယ်ချုပ်နဲ့ အဆောင်မှာပြန်လာနေတဲ့ နန်းအောင်ထွေးကြည် (ခ) မငယ်က သူအဖေဟာ တချိန်က အမှတ်(၂)ထောက် လှမ်းမှူး ဦးခင်မောင်ကြည် ဖြစ်ပြီး လောဆစ်ဟန်တို့အမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြုတ်သွားတဲ့သူတဦးဖြစ်ကြောင်း၊ ကေအိုင်အေ က ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မိုင်နဲ့ သူတို့မိသားစုက ဘယ်လိုပတ်သက်ဆက်နွယ်မှု ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မိုင်က သူ့ အိမ်က သူ့ကိုခေါ်တာ “မိငယ်” မဟုတ်ဘူး “မီးငယ်” လို့ ခေါ်တာတောင် သိနေတဲ့အကြောင်းနဲ့ လက်ရှိအဖြစ်အပျက် တွေကိုပါ ကျမကို ပြောပြခဲ့ဖူးတယ်။
နန်းအောင်ထွေးကြည်ရဲ့ အကိုဝမ်းကွဲ ဦးစိုင်းထွန်း သူ့ကိုလာတွေ့ပြီးတဲ့နောက် ကေအိုင်အေဘက်သွားခါနီးမှာ လက် မောင်း သွေးဖောက်ပြီး သစ္စာဆိုချင်တယ်ဆိုလို့ ရင်းမှူးသိုက်ထွန်းဦးဆီက ဓါးမြှောင် ကျမ သွားငှားခဲ့တယ်။ အဆောင် နားက ကျောက်တုံးကြီး ဘေးမှာ ကျမကအရင် ဓါးမြှောင်နဲ့ လက်မောင်းကို စိုက်လိုက်တယ်၊ ရာသီဥတုကပဲ အေးလို့ လား၊ စိုက်တာက သိပ်မနက်လို့ပဲလား မသိဘူး၊ ကျမတို့ထင်ထားသလို သွေးက စီးကျမလာဘူး။ အဲဒါနဲ့ ဆေးဆရာ နိုင်ဝင်း အကူအညီနဲ့ ဆေးထိုးအပ်နဲ့ စုပ်ထုတ်ယူပြီး ရောလိုက်တယ်။ သူမေးတယ် ကဲ ဘာသစ္စာဆိုချင်လဲဆိုတော့ ကျမ က “မှန်တာကို ပြောရမယ်၊ မှန်တာကို လုပ်ရမယ်၊ တော်လှန်ရေးအပေါ် သစ္စာရှိရမယ်” လို့ (၃) ချက်ကို ပြောတယ်။
သူက အောက်က နှစ်ချက်ကိုတော့ ငါလုပ်လို့ရတယ် အပေါ်ဆုံးက “မှန်တာကိုပဲ ပြောရမယ်” ဆိုတာ မင်းငါ့ကိုနားလည် ပေးပါ၊ ငါက အခြေအနေအရ လိမ်ပြောရတာတွေ ရှိတယ်လို့ပြောတော့ ကျမ သဘောတူလိုက်တယ်။ “မင်း ဒီနေရာက ထွက်သွားတာနဲ့ ဒီကိစ္စတွေကို ငါတို့လိုချင်တာ မရသေးတဲ့အချိန်မှာ မဖော်ထုတ်ရဘူး။ အချိန်ကျလို့ ဖော်ထုတ်မယ်ဆိုရင် မဟုတ်ဘဲနဲ့ သေသွားတဲ့သူတွေအတွက် ငါလည်းမှန်တဲ့အတိုင်း ရပ်တည်မယ်။ အချိန်မကျဘဲ ဖော်ထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ရန်သူသဘောကျအောင် လုပ်တာနဲ့ အတူတူပဲမို့ မင်းကိုလည်း ငါ ရန်သူ့လူလို့ပဲ သတ်မှတ်မယ်” လို့ ကျမ သူ့ကို ပြောခဲ့ တယ်။
တချိန်မှာ ဒါတွေအတွက် အမှန်တရားဖော်ထုတ်ပေးဖို့ ရဲဘော်ထွန်းအောင်ကျော်နဲ့အတူ အားလုံးက ဆန္ဒကိုယ်စီ ရှိနေခဲ့ ကြတယ်ဆိုတာ အမှန်ပါ။ ဒါပေမဲ့ တော်လှန်ရေးမှာ နောက်ထပ်နစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်အောင် ဒါတွေကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ပြန်အသုံးချနေတာမျိုးကိုတော့ ရဲဘော်ထွန်းအောင်ကျော် လိုလားနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ ကျမ မယုံပါဘူး။ ဒါကို ရဲဘော် ထွန်းအောင်ကျော်ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ပါလို့ ကြွေးကြော်နေတဲ့ ကိုအောင်မိုးဝင်း မသိကျိုးကျွန်လုပ်ပြီး အသုံးချနေတာ တော့ ကျမအတွက် နည်းနည်း ထူးဆန်းနေပါတယ်။ (ဖြစ်ရပ်မှန်ကို ရိုးသားစွာ ဖော်ထုတ်တင်ပြနေတာကို မဆိုလိုပါ)
အထက်ဗမာပြည် ဗကသ ညီလာခံဆိုတာ ကျမတို့ မန္တလေးကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ နဖူးကချွေး ခြေမ ကျအောင် နေပူပူထဲမှာ တဆိုင်ဝင်တဆိုင်ထွက် တအိမ်ဝင်တအိမ်ထွက် မျက်နှာအောက်ချပြီး အလှူခံ၊ ထမင်းဟင်းတွေ ချက်ပြုတ်၊ ကိုယ်စားလှယ်တော်တွေအတွက် ကျမတို့ကိုယ်တိုင် ထမင်းထုပ်တွေ ပို့ပေးခဲ့တာပါ။
ကိုစိုးလင်း (အာအိုင်တီ၊ မန္တလေး) ကိုယ်တိုင် ထောက်လှမ်းရေးနဲ့ညှိပြီး အခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြားက ကျင်းပခဲ့ရတဲ့ ညီ လာခံပါ။ ကိုထွန်းအောင်ကျော်၊ ကိုအောင်နိုင်တို့နဲ့အတူ စင်မြင့်တနေရာကနေ ပွဲကြည့်ပရိတ်သတ်အဖြစ်နဲ့လည်း ကျမ ပါဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ထောက်လှမ်းရေးက ဗိုလ်ကြီးမြင့်ဦး ကိုယ်တိုင် သူ့ကားကို ညီလာခံအတွက် သုံးစွဲခွင့်ပေးတဲ့အပြင် ထောက်လှမ်းရေးတွေကို ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်း၊ ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေ ရိုက်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက် အဲဒီညီလာခံလဲ ပြီးရော နောက် ထပ် လူဖမ်းပွဲကြီး စခဲ့တာကိုလည်း မမေ့ပါဘူး။
မန္တလေးကျောင်းသားတွေ သပိတ်မှောက်ထားတဲ့ကြားက ကျမနဲ့ ကျမသူငယ်ချင်း ပါစင်နယ်အနေနဲ့ ကိုထွန်းအောင် ကျော် (မန္တလေး၊ ဗကသ) ရဲ့ညီ ကိုလတ် (မန္တလေး၊ မကသ) တို့ ရတနာဘုမ္မိနယ်မြေမှာ ရုံးစိုက်လုပ်ခဲ့တဲ့ မကသညီလာ ခံကိုလည်း တက်ရောက်ခဲ့လို့ သူငယ်ချင်းတွေ ၀ိုင်းဆဲတာ ခံရပါသေးတယ်။ ကျမ သူငယ်ချင်းက ကိုထွန်းအောင်ကျော် ရဲ့ညီ ကိုလတ်နဲ့ ကျောင်းနေဘက် သူငယ်ချင်းပါ။ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ စုံမိလို့ သူတို့ညီလာခံမှာ ထောက်လှမ်းရေးတွေ ကို လုံးဝအ၀င်မခံတဲ့အပြင် အောက်လိုင်းတွေ ကြိုချထားတာမျိုးလည်း မလုပ်ဘူးဆိုလို့ စိတ်ဝင်စားပြီး သွားတက်ကြည့် တာပါ။
ဗကသဆိုတာ ကျောင်းသားအားလုံးပိုင်တဲ့ အားလုံးက တန်ဖိုးထားတဲ့ သမိုင်းဝင်နာမည် တခုပါ။ ဗကသကိုယ်စား ပြော နေသလိုနဲ့ ဘယ်သူကမှ ဒီကိစ္စအတွက် တာဝန်ပေးထားတာမရှိဘဲ ကာဗာလုပ်ပြီး အသုံးမချပါနဲ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံရင် ကိုယ့်အရည်အချင်းကိုပဲ ကိုယ်သုံးစေချင်ပါတယ်။ အချိန်တန်ရင် ဗကသ ကိုယ်စားပြောဖို့ အမှန်တကယ်တာဝန် အပေးခံ ရသူ ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီအတွက်တော့ စိတ်ပူစရာမရှိဘူးလို့ပဲ ကျမပြောချင်ပါတယ်။
မန္တလေး ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုအကြောင်း ကောင်းကောင်းနားမလည်တဲ့ “စစ်ကြောရေးမှာ ပါတဲ့သူတွေကလည်းကွာ ဒီ လောက်တုံးရသလား” ဆိုတဲ့ နန်းအောင်ထွေးကြည်ရဲ့ မှတ်ချက်ကို မန္တလေးကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုထဲမှာ ကိုယ်တိုင်ပါ ၀င်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကျမ အပြည့်အ၀ထောက်ခံပါတယ်။
ကေအိုင်အေက မငယ် (ခ) နန်းအောင်ထွေးကြည်ကို ခေါ်ထားတဲ့အချိန်မှာ သူနေတဲ့အဆောင်ကို ကျမသွားတွေ့ခဲ့တယ်။ အဲဒီလိုသွားတာမျိုးက ကျမအတွက် အန္တရာယ်ရှိမှန်း ကျမသိတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီအချိန်က ကြိုက်တဲ့အချိန် ဖမ်းဆိုတဲ့ စိတ် နဲ့ ကျမ သိပ်ဂရုမစိုက်ခဲ့ဘူး။ အဲဒီကတည်းက သူရေးထားတဲ့မှတ်တမ်းစာအုပ်လေး ကျမကို ပေးဖတ်ခဲ့တယ်။ သူဟာ ထောက်လှမ်းရေး မဟုတ်တဲ့အကြောင်း ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကျမကို သူထုတ်ပြောခဲ့တယ်။ ကျမ နားမလည်တာတွေ သူ့ကို ပြန်မေးခဲ့တာတွေရှိတယ်။
“အဲဒါက တယောက်နဲ့တယောက် မတူဘူး။ ငါတို့ လိုင်းတွေ ခွဲထားကြတယ်။ ရဲဘော်အချင်းချင်းကြား သွေးခွဲပေးတာ။ ရဲဘော်တွေနဲ့ လူကြီးတွေကြား မကျေနပ်မှု ဆူပူမှုတွေ ဖန်တီးပေးတာက တလိုင်း။ ခေါင်းဆောင်နေရာတွေ ရအောင်ယူ ပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့လိုင်းရောက်အောင် ခေါ်သွားမှာက တလိုင်း။ အဲဒီလိုမှ မရရင် လက်နက်နဲ့ အာဏာသိမ်းမယ်။ ဒါမှ မရ ရင် နောက်ဆုံး လူကြီးတွေကို အဆိပ်ခပ်သတ်မယ် အဲဒီလိုမျိုးတွေ”
အဲဒီအချိန်ကတော့ ဘာမှန်းမသိပဲနဲ့ နားထောင်ခဲ့ရတာမို့ ဘာမှဆက် မမေးဖြစ်ခဲ့ဘူး။ အခုတချို့လူတွေ ပြန်ရေးထားတာ ကို ဖတ်ကြည့်မိတော့ မရှိဘဲနဲ့ သူတို့ဖြေထားခဲ့တဲ့ လက်နက်တွေ၊ အဆိပ်တွေ၊ ဆက်သွယ်ရေးစက်တွေ ထုတ်မပေးမချင်း နည်းအမျိုးနဲ့ နှိပ်စက်ညဉ်းပမ်းမေးနေတဲ့သဘောကိုတွေ့ရတော့ ကျမအတွက် မေးခွန်းတခု တိုးလာတယ်။
အဲဒီအချိန်က ကိုယ့်သူမယုံ သူ့ကိုယ်မယုံ ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပါ။ ကိုမျိုးဝင်းရှေ့တန်းထွက်နေတဲ့ အချိန်မှာလည်း သူပြန်လာ ရင် ကိုအောင်နိုင်၊ ကိုသံချောင်း၊ ကိုနေထွန်း၊ မခင်မာအေးနဲ့ ကျမတို့ငါးယောက်ကို ထပ်ဖမ်းအုံးမယ်လို့ နောက်တန်းမှာ သတင်းတွေ ပြန့်နေတယ်။ ကိုမျိုးဝင်း တိုက်ပွဲကျတာ ကြားရတော့ ကျမ မျက်ရည်ကျခဲ့တယ်။ ဒါကို နောက်ပိုင်း နန်းစော က “ဒေါ်လှိုင်ကလည်း ပြန်လာရင် ကိုယ့်ကိုဖမ်းမယ့်သူပါဆို ဘာကိစ္စ ငိုရတာလဲ” တဲ့။
ဒါက ကိုမျိုးဝင်းရဲ့အပိုင်းပါ။ ကျမအနေနဲ့တော့ ကျမတို့အားလုံးဟာ မိဘပြည်သူတွေနဲ့ ကျမတို့တိုင်းပြည်ကို ကောင်းစေ ချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေကိုယ်စီနဲ့ ကျောင်းသားလူငယ်ဘ၀ရဲ့ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင်၊ သီချင်းလေးတွေနားထောင်၊ အချစ်အ ကြောင်းတွေ ဆွေးနွေးရင်း ဟိုငေးဒီငေးနဲ့ အပူပင်မဲ့ ချိုမြိန်တဲ့အရသာတွေကို ဘေးဖယ် တော်လှန်ရေးရဲ့ သေနတ်သံ၊ လက်နက်ကြီးသံ၊ မိုင်းကွဲသံတွေကြားမှာ သူ့အလှည့်လား ငါ့အလှည့်လား ၀မ်းနည်းကြေကွဲဖွယ် သတင်းတွေနားထောင် ခါးသီးတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကို ရင်ဆီးခံရင်း ပေးဆပ်ခဲ့ရတဲ့ ဘ၀တူ ရဲဘော်တွေပဲ ဆိုတဲ့ခံစားမှု။
ဒီလိုသတင်းတွေကို ဘယ်သူတွေဖြန့်နေကြတာလဲ မသိပေမယ့်၊ ဒါက ကိုသံချောင်းနဲ့ ကိုမျိုးဝင်းကို တိုက်ပေးလိုက်တဲ့ သဘော။ ဒါကြောင့် ကိုမျိုးဝင်းတိုက်ပွဲမှာ ကျတာတောင် ရှေ့ကျည်လား နောက်ကျည်လား လုပ်နေကြတာပါ။
ကိုခင်မောင်ဇော် (မြို့မှာတုန်းက ကောင်စီရုံးက လက်နှိပ်စက်စာရေး။ ဒါပေမဲ့ ကြည့်လိုက်တိုင်း ယူနီဖောင်းနဲ့ အသားကျ နေတဲ့ သူ၊ ယူနီဖောင်းရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်က အသားမကျတဲ့သူဆို မီးပူတိုက်ဝတ်တောင်မရဘူး။ အသားကျပြီးသား ဆိုရင် လည်း အသားမကျအောင် ၀တ်လို့ကို မရတော့တာ။ မြောက်ပိုင်းကို စရောက်ကတည်းက သူ့ရုပ်ကိုမြင်တိုင်း ရဲနဲ့တူသလို နန်းရှေ့ရဲစခန်းဘက်မှာ မြင်ဖူးသလို စိတ်မှာခံစားခဲ့ဖူးတယ်။ မေးကြည့်တော့ မန္တလေးကလို့ မပြောဘူး၊ ပုသိမ်ကြီးကတဲ့၊ ပြန်ဝင်ခဲ့တဲ့အချိန် ပြန်တွေ့တော့ သူပြောတဲ့ပုသိမ်ကြီးဆိုတာ အဟုတ်။ မန္တလေးအရှေ့ဘက်ထွက်ပေါက် ကပ်ရက်က ပု သိမ်ကြီး ဖြစ်နေတယ်။ အဖမ်းခံရချိန် သူဖြေထားတာက ဒလမ) အရာရှိရိပ်သာက အကျယ်ချုပ်ကနေလွတ်ပြီးတဲ့ နောက် မှာတောင် စစ်ရုံးမှာ ပြန်လုပ်ခွင့်ရခဲ့သေးတယ်။
တနေ့ ကျမ စစ်ရုံးဘက်ကို တက်အသွားမှာ ကိုခင်မောင်ဇော်က ကိုမျိုးဝင်းပစ္စည်းတွေ ရှင်းနေတာလား မီးရှို့နေတာလား မမှတ်မိ။ မှတ်မိနေတာက ကိုမျိုးဝင်း ကျဆုံးချိန်က ၀တ်ခဲ့တဲ့ စစ်ပျောက်ကျား ၀စ်စကုတ်လေးကိုင်ပြီး ထွက်လာတယ်။ “ကျည်ဆံက ရှေ့ပေါက်လား နောက်ပေါက်လား” လို့ပြောရင်းနဲ့ ကျမရှေ့တင် မြေပေါ်မှာ ဖြန့်ချကြည့်နေတယ်။ သူလည်း ကျမကို မျက်မြင်သက်သေအဖြစ် ချန်ထားတာ သိနေပုံရတယ်။ ကျည်ဆံရှေ့ပေါက်လား နောက်ပေါက်လား အသေအ ချာထပ်သိချင်တဲ့ သူများရှိနေသေးခဲ့ရင် အရာရှိရိပ်သာ အကျယ်ချုပ်ကနေ ထွက်ပြေးသွားခဲ့တဲ့ ရဲဘော်တွေအခေါ် ခို (ခ) ကိုခင်မောင်ဇော် (မန္တလေး၊ စစ်ရုံးအုပ်) ကို မေးကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဒီအဖြစ်အပျက်တွေ ဖြစ်ခါနီးအချိန်မှာ ကျမ ကေအိုင်အေဆေးသင်တန်းမှာ ရှိနေတဲ့အချိန်မို့ မြို့မှာကတည်းက ကျမသိခဲ့ တဲ့ ကိုချိုကြီး (မန္တလေး၊ ယူဂျီ)၊ ကိုအောင်မင်း (မန္တလေး၊ ယူဂျီ)၊ ကိုညီညီ (မန္တလေး၊ ယူဂျီ)တို့ ဘယ်အချိန်က ဗဟိုကို ရောက်နေကြမှန်းတောင် ကျမ မသိခဲ့ဘူး။ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေ ဖြစ်ခါနီးအလိုမှာပဲ မြို့ကနေ အုပ်လိုက်ရောက်လာခဲ့တဲ့ လူသစ်တွေလည်း ရှိတယ်။ အဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့ တောထဲက ရဲဘော် ရဲမေတွေဖြစ်တဲ့ နန်းစော၊ နန်းအောင်ထွေးကြည် တို့ ကိုယ်တိုင်တောင် ကိုချိုကြီး (မန္တလေး၊ ယူဂျီ၊ အသတ်ခံရ)၊ ကိုအောင်မင်း (မန္တလေး၊ယူဂျီ၊ ထောင်ထဲမှာ အရိုက်ခံရသေ ဆုံး)၊ ကိုကျော်ဝေ (မန္တလေး၊ စစ်ကြောရေးမှာသေဆုံး)၊ ကိုကျော်ဌေး (မန္တလေး၊ စစ်ကြောရေးမှာ သေဆုံး)၊ အောင်ဖိုး (ရန်ကုန်၊ စစ်ကြောရေးမှာသေဆုံး)၊ ကိုညီညီ (မန္တလေး၊ ယူဂျီ၊ သူတယောက်သာ ကေအိုင်အေ အကာအကွယ်အောက် ကနေ ပြန်လွတ်) တို့တွေကို အဖမ်းခံရခါနီးနဲ့ ခံရတဲ့အချိန်ကျမှသာ မြင်တွေ့ဖူးခဲ့ကြရတာပါ။
နောက်ထပ် ရိုးရိုးသားသားလူသစ်နှစ်ယောက် (အမျိုးသမီးတယောက်၊ အမျိုးသားတယောက်) ကို ဒါတွေနဲ့ မသက်ဆိုင် ဘူးလို့ ယူဆကြလို့ ဒါတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန် ကေအိုင်ဘက်မှာ ခဏထားပြီး ပြန်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။ ကျမ နားမလည်နိုင် တာက ဒါတွေဖြစ်ပျက်နေတဲ့အချိန် ကွက်တိကြီးမှာမှ ဒီ ယူဂျီလုပ်ခဲ့သူတွေအားလုံး ဘာကြောင့် ဗဟိုမှာ ရောက်နေကြ ရတာလဲ။
တနည်းအားဖြင့် သူတို့ရောက်လာကြတဲ့အချိန် ကွက်တိကြီးမှာမှ ဘာကြောင့် ဒါတွေဖြစ်ပျက်သွားခဲ့ရတာလဲ။ အဖမ်းခံရ ပြီး၊ အကျယ်ချုပ်ကနေ လွတ်လာတဲ့ ကိုညီညီ (မန္တလေး၊ ယူဂျီ၊ ပြန်လွတ်) က လက်ချာဟောဘေးမှာ ကျမကို လာတွေ့ပြီး ကိုမျိုးဝင်းတို့ ကိုသံချောင်းတို့က ရန်သူ့လူတွေ မဖြစ်နိုင်ဘူးလားလို့ လိုင်းတင်မေးလာတာတွေရှိတယ်။ ကျမက “အဲဒါ တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ကိုသံချောင်းဆို ဒီလောက်ရိုးတာ သူကျောင်းသားဆိုတာ ကျမယုံတယ်” လို့ ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။
ဒါကိုမေးခဲ့တဲ့ ကိုညီညီဆိုတာ မြို့မှာတုန်းက ဂေါ်စတာရုံးမှာ မြင်ဖူးနေတာကလွဲလို့ စကားတောင်မပြောခဲ့ဖူးဘူး။ ဒါတွေ ဖြစ်ခါနီးအလိုမှာမှ တောထဲကို ကိုချိုကြီး၊ ကိုအောင်မင်းတို့နဲ့အတူ ယူဂျီအနေနဲ့ လာခဲ့တာ။ အကျယ်ချုပ်နဲ့ အဖမ်းခံရပြီး ပြန်လွတ်လာလို့သာ အခုလို စကားပြောခွင့်ရခဲ့တာ။ ကိုညီညီ (မန္တလေး၊ ယူဂျီ) ဆိုတာ တောထဲမှာ ရဲဘော် ရဲမေ ဘ၀မျိုး နဲ့ မနေခဲ့ဖူးသလို၊ အဖမ်းခံရတဲ့ ရဲဘော် ရဲမေတွေအားလုံး အကြောင်းမပြောနဲ့ သူလာမေးနေတဲ့ မန္တလေးသူ ကျမ အ ကြောင်းတောင် ကောင်းကောင်းသိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
အဲဒီလိုလူရဲ့အကို ကိုမောင်မောင် (ရွှေကရ၀ိတ်) က ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး စာအုပ်ထုပ်ဖို့ အဆင်သင့်ပဲဆိုတော့ အံ့သြ စရာပဲ။ တောထဲမှာ ရဲဘော်ရဲမေတွေနဲ့ အတူတူနေခဲ့ပြီး ကိုယ်တိုင်အဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့ ဒီဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တစိတ် တပိုင်းအားဖြင့် တာဝန်ရှိခဲ့တဲ့ ကိုရဲလင်း၊ ကိုညီညီကျော်တို့လို ဗဟိုကော်မတီဝင်တွေတောင် ထောင့်စုံအောင် မစဉ်းစား နိုင်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စ။ အေဘီရဲ့အပြင်ဘက်ကလူပါဆိုတဲ့သူက ဘာတွေပိုသိနေလို့ ဘာတွေကိုရေးမှာလဲ စိတ်ဝင်စားစရာပဲ။
အဲဒီ ကိုမောင်မောင် (ရွှေကရ၀ိတ်) ဆိုတာ ကျမ တောထဲသွားတဲ့အချိန်က ကိုချိုကြီးနဲ့အတူ စီစဉ်ပေးခဲ့သူ။ ကျမ (၁၉၉၆ ၉၇) အထဲကို ပြန်ဝင်တုန်းက သူနဲ့ပတ်သက်တာတွေ ဘာမှမပြောဖို့ လှမ်းအကြောင်းကြားခဲ့တယ်။ ကျမ ကိုယ်တိုင်က လည်း ကျမအကြောင်းကလွဲရင် ဘယ်သူ့အကြောင်းမှ ထည့်ပြောဖို့ ရည်ရွယ်မထားဘူး။ အဲဒီတုန်းက ကိုမောင်မောင် ဆီ မှာ ကျောင်းသားတပ်ကသီချင်းတွေ ပြန်နားထောင်ချင်လို့ သီချင်းခွေ သွားယူခဲ့သေးတယ်။ နန်းစော ခေါ်သွားလို့ ကိုညီ ညီကျော် တို့ အိုကေတို့နဲ့လည်း လက်ဘက်ရည်ဆိုင် ထိုင်ဖြစ်သေးတယ်။
ဘာကြောင့်လည်းတော့ မသိဘူး၊ ကိုညီညီနဲ့တော့ တခါမှကို မဆုံဖြစ်ခဲ့ဘူး။ (ကိုညီညီကတော့ တရုတ်တန်းဈေးက သူ့ မိန်းမဈေးဆိုင်ရှေ့မှာ ကျမကို ဆဲတောင်လွတ်လိုက်တယ်ဆိုပါလား။ သူများကို သမိုင်းမှာ နာမည်ဆိုးတွင်ရစ်မယ်လေး ဘာလေးနဲ့ ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့သူက ယောက်ျားရင့်မကြီးဖြစ်ပြီး မဟုတ်ဘဲ လုပ်ကြံပြောဆိုရေးနေတဲ့အပေါ် အနည်းဆုံး တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ရှက်ရကောင်းမှန်းတောင် မသိသေးတာ သနားစရာပဲ။ သမိုင်းဆိုတာ အမှန်တကယ်အများအ တွက် ဘယ်သူ ဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို မှတ်တမ်းတင်တာပါ။ အပြောသမားတွေအတွက် နေရာမရှိပါဘူး။
ကျမအနေနဲ့တော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ ရှောင်နေစရာ အကြောင်းမရှိတာတော့ သေချာပါတယ်။ တော်လှန်ရေးထဲက လူချင်း မျက်လုံးချင်းစုံပြီး ကျမ မကြည့်ရဲတဲ့သူ အခုချိန်ထိ တယောက်မှ မရှိသေးဘူး။ ကျမအဖေ ကျမကိုပေးခဲ့တဲ့အမွေက ပစ္စည်းဥစ္စာ မဟုတ်ဘူး။ လိပ်ပြာသန့်အောင် နေထိုင်တတ်နည်းပဲ။
ကိုညီညီရဲ့အကို ကိုမောင်မောင်သာ ဒီလိုင်းပေါ်ကို တက်မလာခဲ့ရင် သူ့နာမည်ကို ကျမ ထည့်ရေးစရာ မရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့ လိုင်းပေါ်ကို တက်လာတဲ့အပြင် အဖွဲ့ကိုပါတိုက်ခိုက်လိုတဲ့ သဘောတွေ့ရလို့ သူဘာလဲဆိုတာ စဉ်းစားစရာဖြစ်လာတယ်။
တောနဲ့ ယူဂျီလိုင်းချိတ်ပြီး ပြန်ဝင်သွားခဲ့တဲ့ တောထဲကလူတချို့ မန္တလေးမှာ အဖမ်းခံခဲ့ရတယ်။ မန္တလေးမှာ လုပ်နေတဲ့ လူတချို့လည်း အဖမ်းခံခဲ့ရပြီး ထောင်ထဲရောက်သွားတယ်။ ရန်ကုန် မန္တလေးနဲ့ ချိတ်ပြီးလုပ်နေတဲ့ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း က ရှမ်းလူငယ်တချို့ နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်တွေ ကျခဲ့တယ်။ စစ်ကြောရေးမှာ ညဉ်းပမ်းနှိပ်စက်မေးမြန်းဒဏ် တော်တော် လေးခံ လိုက်ကြရတယ်။ ထဲထဲဝင်ဝင် လုပ်ခဲ့တဲ့ လူတချို့ ထောင်ထဲမှာ ရှိနေတုန်းပဲ။ ထဲထဲဝင်ဝင် လုပ်ခဲ့တာမျိုးမရှိတဲ့ ကျမတောင် တောထဲရောက်တာ စောသွားလို့နဲ့ ကျမနဲ့ ကျမ သူငယ်ချင်း (မာလာသိန်း၊အထဲပြန်ရာက်စဉ်သူပြောပြခဲ့လို့) ကို လူမှားပြီးလိုက်နေလို့ အဖမ်းမခံခဲ့ရတာ။ ထောက်လှန်းရေးက စလေ၊ ရွေဘိုမှာရှိတဲ့ အကိုအမအိမ်တွေပါမကျန် လိုက် ရှာခဲ့ကြတာ။
ကိုချိုကြီးရဲ့ လူယုံအနေနဲ့ ယူဂျီလုပ်ငန်းအတော်များများမှာတွဲလုပ်ခဲ့တဲ့ (ကေအိုင်အေအတွက်တောင် လုပ်ပေးခဲ့တာတွေ ရှိတဲ့) ကိုမောင်မောင်ကတော့ တခါမှအဖမ်းမခံခဲ့ရဖူးဘူး။ ဒါတွေကြောင့် ကေအိုင်အေက ဗိုလ်မှူးပန်းအောင်က သူ့ရဲ့ညီ ကိုညီညီကို ခေါ်ထားပေးခဲ့ ကာကွယ်ပေးခဲ့တယ်။ ထဲထဲဝင်ဝင် ယူဂျီလုပ်နေတဲ့ထဲမှာ ကိုချိုကြီးရဲ့ လူယုံတယောက်အဖြစ် နေရာတိုင်းမှာပါခဲ့ပေမဲ့ အခုချိန်ထိ အဖမ်းမခံခဲ့ရသေးတာ ကိုချိုကြီးတို့နဲ့အတူ တောထဲထွက်ပြေးဖို့လည်း မလိုသေးတာ ဘာကြောင့်လဲ။
ဒီအဖြစ်အပျက်တွေ ဖြစ်ခါနီး အလိုလောက်မှာမှ မြို့မှာနေလို့မရတော့တဲ့ အဖြစ်မျိုး ဖန်တီးပြီး ကိုချိုကြီး၊ ကိုအောင်မင်း တို့ကို တောထဲကိုမောင်းပို့ခဲ့တာ ထိုးကျွေးဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လား။ မတော်တဆ တိုက်ဆိုင်မှုပါလို့ ဘယ်လိုယူဆနိုင်ပါ သ လဲ။
ကိုအောင်မင်း (မန္တလေး၊ ယူဂျီ) ကို ကျမ သိပေမဲ့ အဲဒီ ယူဂျီလိုင်းကနေ ဒါတွေဖြစ်ခါနီးမှ တောထဲကိုလွတ်ပေးခဲ့တဲ့ ကို ကျော်ဌေး (မန္တလေး)၊ ကိုကျော်ဝေ (မန္တလေး)၊ အောင်ဖိုး (ရန်ကုန်) တို့ရဲ့ သမိုင်းကြောင်းလေးတွေလည်း ချန်မထား သင့်ပါဘူး။ သူတို့တွေ အဖမ်းခံရပြီးနောက်မှ အဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့ ရဲဘော်ထွန်းအောင်ကျော် အတွက် ပါဝင်ခဲ့သူတွေအားလုံး ထည့်သွင်းတွက်ချက်နိုင်အောင် ထည့်ရေးသင့်တယ်ထင်ပါတယ်။
စိုးမင်းအောင်ကရော သူ့ကိုသံသယနဲ့ စောင့်ကြည့်နေတဲ့အကြောင်း သူနဲ့နီးစပ်တဲ့ ဗဟိုကော်မတီဝင်တွေထဲက တဦးဦး မပြောပြဘဲနဲ့ ဘယ်လိုသိနိုင်သလဲ။
ကိုမောင်မောင် (ရွေကရိတ်ဝိတ်) က အဖမ်းလည်းမခံရ အဲဒီအချိန်က ကိုချိုကြီးတို့နဲ့အတူ တောထဲပြေးဖို့လည်းမလိုခဲ့ တာ အရမ်းကို သေသေသပ်သပ်နဲ့ ပိပိရိရိလုပ်ခဲ့ပါတယ် ဆိုတဲ့သဘောလား။
ဒါဆို ယူဂျီနေရာကနေ ထုတ်စရာ စာအုပ်အဆင့်သင့်နဲ့ အခုမှ ဘာကြောင့် အချိန်ကိုက် အပေါ်ကို တက်လာရတာလဲ။ ချိတ်စရာတော မရှိတော့လို့လား။ ဒါမှမဟုတ် ကိုသံချောင်းတို့အဖမ်းခံရချိန် (၂၀၀၆) သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တုန်းက “လူငယ်တွေ ကျနော်တို့လိုအဖြစ်မျိုးနဲ့ ထပ်မကြုံရအောင် သမိုင်းအဖြစ်နဲ့ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကို နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ စာ အုပ်ထုပ်သင့်ပါတယ်။ လိုအပ်တာတွေအတွက် အချိန်မရွေး ကျနော် ကူညီပေးဖို့အသင့်ပါပဲ” ဆိုတဲ့ တိုက်ပိတ် (ခ) သန်း ထွန်းစိုးရဲ့ ဆန္ဒတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့လား။ ဒါမှမဟုတ် မထင်မှတ်ဘဲ ရည်ရွယ်ချက်ချင်း တူနေကြတာလား။ ကိုယ် တိုင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ကိုညီညီကျော် (မန္တလေး၊ ဗဟိုကော်မတီ၊ လက်ပြန်ကြိုးတုပ်ထားတဲ့ကြားက အရာရှိတွေအားလုံးထဲမှ အ စောဆုံးနဲ့ ပထမဆုံးထွက်ပြေးနိုင်သူ) ကရော ဒီအကြောင်းတွေကို ဘာကြောင့် ကိုယ်တိုင်မရေးဘဲ ကိုမောင်မောင်ကို ရေးစေခဲ့တာလဲ။ ကိုမောင်မောင် စာရေးဆရာမဟုတ်တာတော့ သေချာပါတယ်။
ဒီအကြောင်းတွေရေးနေတဲ့ ကိုမောင်မောင်ရဲ့ညီ ကိုညီညီကိုယ်တိုင်ကရော သူရေးတဲ့ထဲမှာပါတဲ့ ရဲဘော်ရဲမေတွေ အား လုံးကို စကားရော ပြောဖူးခဲ့ရဲ့လား၊ အသာထားအုံး၊ သူ အကုန်လုံး မြင်ဖူးခဲ့ရဲ့လား။ နာမည်နဲ့လူနဲ့ရောတွဲမိရဲ့လား။ စဉ်း စားစရာပဲ။ တောထဲမှာ အကျယ်ချုပ်နဲ့လွှတ်ထားစဉ်က လက်ချာဟောနားမှာ တခါလေးပဲ သူလာမေးလို့ ပြောခဲ့တဲ့ ကျမ ကိုတောင် အချက်အလက်တွေကို ရှောင်ရေးတဲ့ သူ့ရဲ့မော်ဒန်ရေးနည်းနဲ့ ကျမ မပြောခဲ့တဲ့စကားတခွန်း မရရအောင် အ ဆစ်ထည့်လိုက် သေးတယ်။ “ကိုသံချောင်း မမှားဘူးတဲ့”
ခဲဖျက်စကိုင်ကတည်းက လူတိုင်းမှားတတ်တာကို သိနေတဲ့လူတိုင်း ဒီလို နလိန်ပတုန်း အပြောမျိုးပြောနေစရာကို အ ကြောင်း မရှိဘူး။ လူတိုင်း ကိုယ့်အမှားကို ကိုယ့်ဘာသာ တာဝန်ယူရမှာပဲ။ ကျမမှားရင်လည်း ကျမတာဝန်ယူမယ်။ ဒီလို မရမက ဆွဲထည့်ရေးနေရတဲ့ဟာကလည်း (ကုသိုလ်ကံများ ဆိုးချင်တော့) ကျမက လက်ရှိမှာ ကိုသံခဲရဲ့ အမျိုးသမီး ဖြစ် နေပြန်တယ်။ မဟုတ်လို့ကတော့ ထည့်ရေးစရာ အကြောင်းကို ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။
ဒါကြောင့် ကျမနာမည်ကို အသုံးချပြီး လက်ရှိရပ်တည်နေတဲ့ အေဘီကိုပါ ထိုးနှက်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ရန်ရှင်းဆိုတာ ဖြူ သလား မဲသလားးမသိ။ ဖားကန့်ဆိုတာလည်း တခါမှမရောက်ဖူး။ ဒါတွေဖြစ်ပြီးချိန်မှ မြဇော် (ခ) ၀သုန် (တောနဲ့မြို့ ဆက် သွယ်တဲ့ယူဂျီ၊ လက်ရှိအမေရိက) ခေါ်လာလို့ အိန္ဒိယဘက်ကနေ တယောက်တည်းတောင် မဟုတ်ဘူး ရဲဘော်တွေ အုပ် စုလိုက်နဲ့လာခဲ့တဲ့ ကိုသံခဲ (လက်ရှိ အေဘီ ဥက္ကဋ္ဌ) ကို ကျောင်းတော်က ရန်ညှိုးရန်စလည်း မရှိ။ စကားတောင် တခါမှ မပြောခဲ့ဖူးဘဲနဲ့ အသားလွတ်ကြီး ရန်ရှင်းကို ဖားကန့်မှာသတ်တာကို “လက်ပိုက်ကြည့်နေလို့ လွတ်မယ်ထင်သလား” တဲ့။ “ကိုသံခဲက အဲဒီအချိန်မှာ မအားဘူး၊ ကျမကို ပိုးနေရလို့” တဲ့။ ကိုသံခဲတို့ မြောက်ပိုင်းကို ရောက်တဲ့အချိန် (၁၉၉၃) မှာ ကျမက ကျောင်းဆရာမသွားလုပ်နေတဲ့ တပ်မဟာ (၁) နယ်မြေမှာ။ ကိုသံခဲနဲ့ ကျမနဲ့ တွေ့တာက ကျောင်းဆရာမသွား လုပ်ပြီး ကေအိုင်အေ အပစ်အခတ်ရပ်ဆဲရေးကြောင့် ပြန်လာခဲ့ရတဲ့ (၁၉၉၄) မှာ၊ ပြန်ပြင်ချင်ရင် ပြင်လိုက်အုံး။
အေဘီကို တိုက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်မရှိတာမှန်ရင် အမှန်တရားကို တကယ်ဖော်ထုတ်ချင်တာမှန်ရင် တိုက်ရိုက်မသက်ဆိုင်တဲ့ သူတွေကို ပတ်ရမ်းပြီး အဝေးကြီးမှာ ရှာနေစရာမလိုပါဘူး။ တိုက်ပွဲမှာကျဆုံးသွားတဲ့ ကိုမျိုးဝင်းပြီးရင် ဒုတိယအဆင့် အ နေအထားကနေ အဖမ်းခံရသူတွေ အားလုံးကို ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားထောက်လှမ်းရေးတာဝန်ခံ ကိုသန်းဇော် (မန္တလေး၊ ဂေါစတာ၊ မြို့မှာကတည်းက ကိုညီညီ၊ ကိုညီညီကျော်တို့နဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်) နဲ့ ဇော်ဇော်မင်း (မိုးညှင်း၊ ကိုမျိုးဝင်းရဲ့လူယုံ၊ တခါတလေ မန္တလေးမှာရှိနေတတ်) တို့နှစ်ယောက်လုံး ကိုညီညီနဲ့ တမြို့တည်း အနီးလေး မှာ ရှိနေတာပဲ။ ဒီလောက် အမှန်တရားလိုလားနေတဲ့လူက ကိုယ်ကလူမှန်ဆို ဘာကြောင့် ကိုသန်းဇော်နဲ့ ဇော်ဇော်မင်း တို့ကို ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ပြီး သွားမေးမကြည့်ခဲ့တာလဲ။
ကျမအမြင်ကတော့ ရှင်းပါတယ်။ အမှန်တရားကို တကယ်ဖော်ထုတ်ချင်တာ မဟုတ်ဘူး။ လက်ရှိနိုင်ငံရေးနဲ့အချိန်ကိုက် ဒါတွေကို လူထုကြား ဖွချပြီး လက်ရှိရပ်တည်နေတဲ့ အေဘီကို တိုက်ချပစ်လို့ ရလိုရဌား အားစမ်းကြည့်တဲ့သဘောပါ။ ဒီ အဖြစ်အပျက်တွေကို (၁၉၉၂) အဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့ (၅၆) ယောက်အုပ်စု ထွက်ပြေးစဉ်က တခါ။ (၂၀၀၆) ကိုသံချောင်းနဲ့ ရဲ ဘော်တစု အဖမ်းခံရစဉ်ကတခါ နအဖကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီး သတင်းစာတွေကနေ တီဗွီတွေကနေ ပြည်သူလူ ထုကို ချပြခဲ့တာ နှစ်ခါတောင်ရှိပါပြီ။ အထဲမှာရှိနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သား နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေ ကျောင်း သားခေါင်းဆောင်တွေလည်း မသိစရာမရှိပါဘူး။ တတိုင်းပြည်လုံးအတွက် ကိုယ်အဓိကသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်း မ ပျောက်အောင် ဒါတွေကို လုပ်ချိန် မတိုင်သေးဘူးလို့ သဘောထားခဲ့ကြလို့ မလုပ်ကြသေးတာပါ။
ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံမှာ ဒါမျိုးတွေကို ဖော်ထုတ်ကြေးဆိုရင် မြောက်ပိုင်းတခုတည်းမှာတင်မကဘူး၊ တနိုင်ငံလုံး နေရာအနှံ့အပြား ဘက်နှစ်လက်ကြားမှာ မြေဇာပင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မိဘပြည်သူရဲ့ နစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရမှုတွေက ပိုကြီးပါတယ်။
“အမှန်တရားအတွက် အမှန်အတိုင်း ရေးသားတင်ပြထားတာတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာပဲ စောင့်ဖတ်ရအုံးမှာပေါ့။ ကျမ ထင်တာ မမှားဘူးဆိုရင် ဒီလိုလူမျိုးတွေပဲ ကိုထွန်းအောင်ကျော်တို့ ကိုချိုကြီးတို့ ဦးစိန်တို့ကို ထိုးကျွေးပြီး မြောက်ပိုင်းမှာ လှုပ်ရှား သွားခဲ့ကြတာ။ တောနက်နက်ထဲမှာနေခဲ့တဲ့ ကိုမျိုးဝင်း၊ကိုသံချောင်းတို့က ဒီအဖြစ်အပျက်တွေမဖြစ်ခင် အစပိုင်းကတည်း က တိုက်ပိတ် (ခ) သန်းထွန်းစိုးနဲ့ အတူလာခဲ့တဲ့ နန်းအောင်ထွေးကြည်တို့ အုပ်စုအပေါ်၊ ကိုအောင်ကျော် တို့လို လူတွေ အပေါ် မသင်္ကာစရာသတင်းတွေ ဘယ်ကရခဲ့ကြသလဲ၊ ယူဂျီလမ်းကြောင်းက။
မမူ ခေါ်လာခဲ့တဲ့ ကိုမြတ်ကို တောထဲကို ခေါ်ရှင်းဖို့ ဘယ်သူတွေ လွတ်ပေးခဲ့တာလဲ ယူဂျီလမ်းကြောင်းက လူတွေ။ တော ထဲကနေ ဘာမသိညာမသိ ရှင်းဆိုလို့ ရှင်းပေးခဲ့ရတာက လူမိုက်တွေအဖြစ် လက်ညိုးထိုးပြခံနေရတဲ့ ကိုမျိုဝင်းနဲ့ ကိုသံ ချောင်း။ အရပ်သားစကားနဲ့ပြောရရင် ရန်သူဆိုတိုက်ဖို့လောက်သာသိတဲ့ တောထဲက ဒေသခံရဲဘော်တွေကြားမှာ မီးပွား လာချ၊ ဓါတ်ဆီလောင်းပေးခဲ့တာ မြို့ကကျောင်းသားနာမည်ခံ လူလည်တစု။
ဒါကို ကိုညီညီရဲ့ မော်ဒန်ရေးနည်းနဲ့ ရေးထားတဲ့ မှတ်တမ်းထဲမှာ “ဟာ ဥက္ကဋ္ဌ မီးစိမ်းပြလိုက်ပြန်ပြီလားဗျာ။ ဒီလိုလုပ်လို့ တော့ မဖြစ်ဘူး၊ တခုခု လုပ်ကြမှဖြစ်မယ်” လို့ ကိုထွန်းအောင်ကျော် ကို တွန်းပို့နေတာ တွေ့ရတယ်။
အပိုင်း (၁) ၊ အပိုင်း (၂) ၊ အပိုင်း (၃) ၊ အပိုင်း (၄)
64 Responses to “မြောက်ပိုင်းကျောင်းသားတပ်မတော်ကို ဖြိုခွဲသွားတဲ့ တရားခံအစစ်က ဘယ်သူတွေလဲ (၅)”
မိုးနတ် April 3, 2012
အမှု စစ်လို့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ထွက်ချက်တူအောင်စစ် ပြီးတော့တူတာကို ဒေါ်လှိုင်မတွေ့ဘူးဘူး ဖြစ်မယ် ။ နဝတ ခေတ် သံလျှင်ရေချက်စက်ရုံ ဗုံးကွဲတဲ့အမှု တယောက်မှမဟုတ်ပဲ အခုထိထောင်ထဲ ရှိနေသေးတာ ဒေါ်လှိုင် ကြားကောကြားဘူးလား ။ဥက္ကဌ ကတော် ဆိုတဲ့အရှိန် နဲ့လူတွေ ငါပြောရင် ယုံမယ် ဆိုပြီးလာမလုပ်နဲ့ လူတိုင်းမှာ အတွေ့အကြုံရှိပါတယ် ။ မျိုးဝင်းတို့သံချောင်းတို့ တို့ထက်တောင်စစ်ကြောရေး အတွေ့အကြုံရှိသူတွေချည်းပဲဆိုတာ သိထားပါဒေါ်လှိုင် ။ ထွက်ချက်တူအောင်စစ်တာတွေ လိုက်ပြောမနေနဲ့ ။ ဒီလိုပြောလိုက်လို့ လူ၁၀၀ ထောက်လှမ်းရေးဖြစ်ရရောလား ။ တညင်အမှုလိုမျိုး မြောက်ပိုင်းကိစ္စ က။ ပိုပြီးစစ်ကြောရေးကြမ်းတာ ကတော့ မြောက်ပိုင်းကပိုတယ် ။မြောက်ပိုင်းထက်လျှော့ပြီးစစ်တာတောင် အင်မတန်ယုတ္တိရှိတဲ့ ဇာတ်လမ်းကြီးကို ဗိုလ်ခင်ညွန့်ကိုယ်တိုင် မရှက်မကြောက်ခပ်တည်တည် ပြောခဲ့ဘူးတာမှတ်မိလား ။ မလှိုင်တောထဲရောက်နေ လို့မကြားဘူးတာလဲဖြစ်မယ်။ ဗိုလ်ခင်ညွန့်ထက်ပိုအရှက်မရှိတဲ့သူ တွေပြောကြပါငါပြောတာလူတွေယုံမယ်ထင်နေရင်တော့ မှားမယ်နော်
lay April 4, 2012
မိုးဝေ April 3, 2012
ခင်ရွှေလှိုင်ရေ နင်ကတော့ လိမ်ပြီးရင်းလိမ်နေတယ်။ မန္တလေးမှာ လုပ်တဲ့ ဗကသ ညီလာခံဆိုတာ ကော်မတီကနေ တာဝန်ခံလုပ်တာဟ။ စိုးလင်း က ထောက်လှမ်းရေးနဲ့ ညှိလုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ နင်ကရော ဘယ်သမဂ္ဂရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ပါဘူးလို့လဲ။ မိတ်ဆက်ပါအုံး။
Htay Tint April 3, 2012
ဗကပ ကို ဖြိုခွဲခဲ့တဲ့ အခါတုံးကလဲ တပ်မတော် စိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေးဌါနက လိုအပ်တဲ့ အချိန်မှာ သတင်းအမှန်တွေကို လိုချင်တဲ့ အမှားတွေ ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဦးချစ်လှိုင် ၂၀၁၁ သတင်းတခုမှာရေးခဲ့တယ် ။ ပြင်းထန်နေတဲ့ စိတ်ဓါတ်ပိုင်ရှင်တွေမှာ ဆန့် ကျင်ဖက် ပျော့ညံ့မှုတွေ ရှိနေပါတယ် ။ ခေါင်းဆောင် ဆိုတဲ့သူတွေ မပြည့်ဝသေးတဲ့ အတွေ့ အကြုံတွေနဲ့မိမိ အရိပ်ကို တစ္ဆေလို့ ထင်ယောင်မိတာတွေကို လက်တွေ့ ထင်နေတာ ရေးနေကြတာ အခုအနှစ် ၂၀ အထိ အဲဒီဘဝက မလွတ်ကြသေးဖူး ။
ကျော်ခိုင် April 3, 2012
ခက်တော့နေပြီ မဒမ်သံခဲရယ်။ ကျော်ခိုင်ဝင်း ရဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ လူတွေဘယ်လို အော်ပြီးသေသွားတယ် ဆိုတာ ပါတယ်လေဟာ။ ကျော်ဝေကွ၊ ဓမ္မစစ်ကျောင်းသား ကျော်ဝေ ကွ၊ ဟေ့ကောင် ငါကျောင်းသားကွ ငါကျောင်းသား—- မဒမ်သံခဲက သတ်တဲ့နေရာမှာ အစအဆုံးရှိပါရဲ့လား။ ကျော်ခိုင်ဝင်းက မျိုးဝင်းနားမှာ ၊ သတ်တဲ့ကျင်းနားမှာ အစောင့်ကျခဲ့တဲ့သူလေ။ ကိုကြီးမျိုးဝင်း၊ ကိုကြီးသံချောင်း တို့ကို ကာကွယ်ချင်တာနဲ့ လျှောက်ရေးလျှောက်ပြောနေတာပါလား
justice April 3, 2012
ဒေါ်လှိုင်ပြောသလိုပဲ ကျောင်းသားအစစ်က မဟုတ်ခဲ့တာတွေ လုပ်ကြံဖန်တီးပြီးမပြောဘူး။ ( ကျော်ဝေကွ၊ ဓမ္မစစ်ကျောင်းသား ကျော်ဝေ ကွ၊ ဟေ့ကောင် ငါကျောင်းသားကွ ငါကျောင်းသား…) ဆိုတဲ့စကားဟာ ကျော်ခိုင်ဝင်း ကကြားခဲ့ပြီး ပြောတဲ့စကားလား? နအဖ ထောက်လှမ်းရေးတွေက လုပ်ကြံဖန်တီးပြီး ပြောတဲ့စကားလား? အဲ့ဒီစကားကို ကျော်ခိုင်ဝင်း က ၁၀၀ % အာမခံသလား? ကျော်ခိုင်ဝင်းကရော သတ်တဲ့အချိန် အစောင့်အဖြစ် ရှိနေသလား? ကျော်ခိုင်ဝင်း စစ်စစ်ရဲ့ ပြောဆိုချက်ကို ကြားချင်ပါသေးတယ်။ သတ်တဲ့အချိန်မှာ အစောင့်အဖြစ်ရှိနေတဲ့ တခြား ရဲဘော်တွေ ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာ နအဖ ထောက်လှမ်းရေးတွေ မေ့နေပုံရတယ်။ မင်းတို့ရဲ့ လန်ကြုတ်ဇာတ်လမ်းတွေ ရပ်လိုက်ပါ။
ကိုထိုက် April 3, 2012
ဆရာ ချစ်ဦးညိုရဲ့ အတွေးအခေါ်ကို ပုံတူ ကူးတယ်လို့ အသိတစ်ယောက်က ထောက်ပြတယ်။ ဒဿဂီရိဟာ အချစ် သူရဲကောင်း ဖြစ်လာပြီး၊ ငတတ်ပြားဟာ ရွှေတိုက်စိုး ဖြစ်လာတဲ့ ရာဇဝင် ပြောင်းပြန်ရေးနည်းကို အတော် ကျေညက်ပုံရတယ်။ ဆရာချစ်ဦးညို သိရင် ဂုဏ်အတော်ယူနေမှာ။
တစ်ယောက်မှ မငြင်းဘူးဆိုတဲ့ အဆိုကတော့ အတော်ရဲရဲ့တဲ့ အဆိုပဲ။ မျက်မြင် သက်သေတွေအရ ဦးစိန်ဟာ ဝန်မခံလို့ ဆိုပြီး အသတ်ခံရသလို၊ နောက်ဆုံး သေတဲ့ အထိ “ငါတို့ဟာ ကျောင်းသားတွေ” လို့ ပြောနေသူရှိတယ်ဆိုတာ သက်သေတွေကို ဖယ်ထားပုံရတယ်။ … တချို့က ပြောကြပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို အပ်တစ်ချောင်းသာပေး … စာရေးသူကို သန်းရွှေ သမီး ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာ သတ်ခံရမယ်လို့ သေချာ ပေါက် သိနေတဲ့ အချိန်အထိ ဝန်ခံအောင် လုပ်ပြမယ်။ စိန်ခေါ်ရဲပါသလား။
Tin Min Htet April 3, 2012
ရိုးသားသယောင် ရှိပါတယ်၊ တသက်လုံး ရိုးရိုးသားသား တော်လှန်ရေးထဲ ပါခဲ့တဲ့ ရဲမေ တဦးဖြစ်ဟန်တူပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အစွဲ သိပ်ကြီးပါတယ်။ တိုက်ခိုက်ရေးက သူတွေက လူရိုးလူဖြောင့်တွေ၊ သတ်ရင်တောင် စေတနာရိုးနဲ့သတ်တာလို့ပြောချင် နေသလို ဖြစ်နေပါတယ်။
၁။ ဒီလူတွေ ဒီလို အဖမ်းခံရအောင် လမ်းကြောင်းပေးဖို့အဖမ်းခံရသူတွေနဲ့ ၊ ဖမ်းသူတွေ ဘယ်သူ လွယ်မလဲ။
၂။ အထက်ထိ ပါလာမှာ ကိုထွန်းအောင်ကျော်တို့မရိပ်မိဘူးလား ဆိုတော့ သူတို့ က အသေခံပြီး လမ်းကြောင်းဖော် သွားတာလား။
၃။ ထွက်ချက်တွေ တညီထဲ ဖြစ်နေတာက အားလုံးက ထောက်လှမ်းရေးလား (ဒီလောက် အများကြီး၊ ကိုထိန်လင်းတို့ ကရော?)၊ ထောင်ထဲမှာ တယောက်ယောက်က ညှိပေးရအောင် လွတ်လာတဲ့ သူတွေပြောပုံ အရ အဲဒီလောက် မလွတ်လပ်ဘူး၊ စစ်တဲ့သူက လမ်းကြောင်းပေးပြီး ဝန်ခံ ခိုင်းတာက အလွယ်ဆုံး ဖြစ်မလား။
၄။ နှိပ်စက် ခံရတာတွေကို မကြား မသိဘူးလား။ မသတ်ခင် အက်ျီလျော့ပေးတော့ ဒဏ်ရာမတွေ့ ဘူးလား။ နှိပ်စက်တာကို မျက်မြင် မဟုတ်လို့ဆိုရင်၊ ဆံပြုတ်နဲ့ထမင်းကိုတော့ ယုံသလား။
ကြားလူ တယောက်ရဲ့မေးခွန်းတွေပါ။
မောင်ဒေါင်း April 3, 2012
စာရေးသူအမျိုးသမီးလောက်တောင် တောမခိုရဲတဲ့ ကောင်တွေက အခြားသူရဲ့တွေးထင်ယူဆချက်တင်ပြတာကို ဝေဖန်နေလိုက်ကြတာ၊ ဟိုက တကယ့်လက်တွေ့ ကို ရေးနေတာ၊ အလင်းဝင်လက်နက်ချ ကျော်ခိုင်ဝင်းရဲ့ပြောတာကို ကိုးကားပြီးပြောနေရသေးတယ်၊ ဒေါ်ခင်ရွှေလှိုင်ရေ- ခင်ဗျားရေးတာ အဖြစ်မှန်နဲ့ နီးစပ်တယ်၊ တကယ့်ထောက်လှမ်းရေးက အခုချိန်ထိ လွတ်မြောက်နေပြီး လိုက်ဖွနေတယ်၊
mg thant April 3, 2012
ငစနေ April 5, 2012
ချီးထုတ်ကောင်..မင်းကဘာမို့လို့လဲ။ ငါ့လခွီး မင်းပြောမှ ဒေါ်စုနဲ့ သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းတို့တောင် ငပေါတွေလိုလိုနဲ့၊ ဥာဏ်မရှိတဲ့ ဖွတ်ကျား။
=== April 3, 2012
မိုးနတ် = မိုးဝေ = Htay Tint = ကျော်ခိုင် = ကိုထိုက် = Anonymous = တန်ဖိုးမဲ့ / လူသိမခံဝံ့သူ / လက်သီးပုန်းထိုးသူ / အရာမဝင်သော မှတ်ချက်ရေးသူ
သူတစ်ပါးကို ဒီလို တည့်တည့်ပြောရတာ ဝါသနာ မပါပါဘူး ။ သို့ပေမင့် စောင့်ထိန်းအပ်တဲ့ တရား ၊ ထားရှိအပ်တဲ့ ကိုယ်ကျင့်တွေကို ပစ်ပယ် လုပ်ကိုင်ကြတဲ့နောက်၊ ကျုပ်ကိုယ်တိုင် လူသိတဲ့ နာမည်ကို ထုတ်မပြောပဲ၊ ခုလို နာမည်ဝှက်တစ်ခုနဲ့ ဝင်ပြောရတာ အတော် မကောင်းတာပဲ။
တံငါနားသွားတော့ ငါးမျှားတံ ကိုင်ရတယ်။ သားသတ်သမားတွေကြား လာတော့လည်း စဉ်းတုံးလေးတော့ ကိုင်ပြရတော့တာပဲ။
နန်းအောင်ထွေးကြည် April 3, 2012
Dear Ma Nge,
Khin Shwe Hlaing is scare to dead since North AB case (acase of mistaken Identity ) reappear. That is why she desperately trying to blame all of the victims like you who were toured by aung naing, myo win and than gyaung and many others. Why did not she get arrested? Because she could be one of the real spy in that time, then she wisely accepted Ko Than Gae to escape and settle. Congratulation Daw Hlaing!!!!!!
ချင်းလေး April 4, 2012
ကိုကို April 3, 2012
ဆက်ရေးပါ..ဒီကိစ္စပေါ်လာကတည်းက ကျနော်လို့ဘာမှဝင်comment မပေးပဲ ထွက်သမျှစာတွေ..commentsတွေ..ထိုင်ဖတ်နေသူတွေအများကြီးရှိပါတယ်.
.ထောက်လှမ်းရေးအကြောင်းပြောနေကြတော့ ကျနော့်ကိုယ်တွေ့ဗျာ..RIT ကပါပဲ..ကျောင်းသားဘဝ တွဲခဲ့ကြဖူးတယ်..အခုပြန်တွေ့တော့မှ ထောက်လှမ်းရေးဗိုလ်မှူးဘဝနဲ့ အနားယူတယ်ဆိုပြီး ဝန်ခံတယ်..ကျောင်းစတက်ကတည်းက လခစားနေပြီး စာတွေကပ်တာ..ဘယ်သူတွေစုရုးံနေတာကအစ သတင်းပို့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်..အခုတော့ ဘုံးထားတဲ့ပိုက်ဆံတွေနဲ့ စီပွားရေးလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေလေရဲ့..နောက်တခုမေးချင်တာ အောင်မိုးဝင်းဘယ်လဲ..ဘာလဲလို့မေးချင်နေပါတယ်..ဒီလူ ကိစ္စတော်တော်များများ..ဖြစ်ခဲ့သမျှဆန္ဒပြပွဲတွေ..အစည်းအဝေးတွေ သိနေတာများတယ်..ဒီလူက စာရေးကောင်းတာကိုအသုံးချပြီး နေရာတကာမှာပါနေပုံရပါတယ်..ဥပမာ..၁၉၉၁ 10D အကြောင်းရေးတာဖတ်ပြီးကတည်းက..အဖြစ်မှန်လူမှန်နာမည်မှန်တွေသုံးပြီး သူပဲပါခဲ့သယောင်ယောင်လုပ်ထားရေးထားကတည်းက ဒီလူ အာဂပဲဆိုတာ သိလိုက်ပြီ..အဲ့ဒါနဲ့လိုက်စုံစမ်းကြည့်လိုက်တော့..အင်း..လို့ပဲ အခုပြောပါဦးမယ်..
နေဒေါ်စုကို အပုတ်ချချင်တော့..CIA ကငွေပေးပြီခိုင်း
သတ်၇ရောတဲ့လား..ခင်ဆွေလှိုင်နင့် မိသားစု တွေထဲ
ကိုကောင်း April 3, 2012
အေး April 3, 2012
ဘယ်နှယ် တော်ရမလဲဗျ ။ အကြမ်းဖက် ရက်စက် ခဲ့သူတွေကို ရေးယူဖို့ လိုသလို ၊ ကလိန်ကကျစ် စစ်ထောက်လှန်းရေး ဆိုသူတွေကိုလဲ ဖေါ်ထုတ် အရေးယူရမှာပေါ့ ။ ဒါမှတာဝန်ကျေမယ်။ ကိုထိန်ဝင်းတို့က အစ ဒါကိုကြိုးစားဖေါ်ထုတ်ကြပါ။
ဆက်ရေးပါ ဒေါ်လှိုင် ၊ ဒေါ်လှိုင် ရိုးသားမှုရှိတယ်ဆိုတာ ရေးတဲ့စာတွေက ဖော်ပြနေတယ်။
မျဉ်းကြောင်း နှစ် ကြောင်းနဲ့ လူတစ်ယောက်ကတော့ နံမည် မဖေါ်ပဲ ရေးတယ်ဆိုတာကို ထောက်ပြလိုပုံရတယ်။ သို့သော် သူဆိုလိုတာကို နားမလည်ပါ။
presonal data ဖြည့်ပြီး အကုန် အပြည့်ရေးသလို၊ … ကျွန်တော့် FB မှာလည်း ရေးထားတာကို ရောင်ပြန်ဟပ်တဲ့ စာပဲ ပြန်တင်ထားပါတယ်။ UK မှာ နေတဲ့ ကိုထိုက်ဆိုရင် စုံးစမ်းဖို့ မခက်လောက်ပါဘူး။ လက်သီးပုံး နာမည်ဝှက်နဲ့ လုပ်တာ ဝါသနာ မပါဘူး။
တောမခိုဘူးတိုင်း၊ သေနတ် မကိုင်ဖူးတိုင်း၊ ထောင်မကျဘူးတိုင်း … တောခိုတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်လောက်တောင် သတ္တိမရှိဘူးဆိုတဲ့ အပြောကလည်း လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး လုပ်မှ သတ္တိရှိမယ်လို့ ထင်နေတဲ့ ခပ်ပေါပေါ အတွေးပဲ ဖြစ်တယ်။ နအဖ သူလျှိုဆိုသူတွေကသာ အဲဒီလို အပြောရှိတဲံ လူတွေထဲက ဖြစ်ဖို့ ပိုများမယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ စစ်သားမှ တိုင်းပြည်အတွက် အသက်စွန့် အနစ်နာခံပြီး တိုင်းပြည်ကို ပိုချစ်တာ ဆိုတဲ့ ပုံစံတူ စကားကို သုံးတာဟာ မြန်မာပြည်မှာ နဝတ၊ နအဖ တဖွဲ့ပဲ ရှိတယ်လေ။ ဒီလူတွေက လေ့ကျင့်ပြီး စပိုင်လုပ်ဖို့ လွှတ်လိုက်တဲ့ လူဆိုရင်တော့ ဒီလေသံတွေ ပေါက်မှာပေါ့။
ကိုထိုက် April 4, 2012
(က) US က Mary Land မှာ နေတဲ့ ကိုထိုက်ဆိုရင် စုံစမ်းဖို့ မခက်လောက်ပါဘူး။
(ခ) ထားဝယ်၊ ရှမ်းမလည်ဆွဲ၊ ထောင်ကြီးဘေးမှာ ကိုထိုက်လို့မေးရင် ကလေးကအစ သိပြီးသားပါ။
(ဂ) ရန်ကုန် ရေကျော်ဈေးဘေးမှာ ကိုထိုက်ကို မသိသူဆိုလို့ အာဂန္တုတွေလောက်ပဲ ရှိပါလိမ့်မယ်။ လက်သီးပုံး နာမည်ဝှက်နဲ့ လုပ်တာ ဝါသနာ မပါဘူး။
ဒီလောက် နမူနာတွေဆို အဆင်ပြေနိုင်မလား။
အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို Anonymous နဲ့ မခြားနားဘူးဆိုတာ လက်ခံနိုင်မလား။ Anonymous ဆိုရင် ကိုယ်ဘာရေးရေး မျှတအောင် မရေးနိုင်လို့ကတော့ credential ဘယ်လိုမှ မရှိဘူးဆိုတာ UK မှာနေတယ်ဆိုရင် ရှင်းပြဖို့ လိုလောက်မယ် မထင်ပါ။ ဒါ့ပြင် ဘာရေးရင်ဖြင့် ဘာ fallacy နဲ့ မလွတ်ကင်းဘူး ဆိုတာတွေလည်း သိထားမယ်လို့ ယုံကြည်ယူဆပါတယ်။
“တောမခိုဘူးတိုင်း၊ သေနတ် မကိုင်ဖူးတိုင်း၊ ထောင်မကျဘူးတိုင်း … တောခိုတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်လောက်တောင် သတ္တိမရှိဘူးဆိုတဲ့ အပြောကလည်း …”
ဆိုတာကို === ကနေ ဘယ်နေရာမှာ ပြောခဲ့သလဲ ညွှန်ပေးပါဦး။ ကိုထိုက်လို့ နာမည်ခံထားသူ တောခိုဖူးတယ် မခိုဖူးဘူးဆိုတာ သိနိုင်လောက်အောင် မတော်သေးပါဘူး။ ကိုထိုက်ဆိုသူ သတ္တိ ရှိမရှိ ဆိုတာလည်း မသိပါဘူး။ သိလည်း မသိချင်ပါဘူး။ သေချာတာက ကိုယ်ကတော့ လူမိုက်တွေနဲ့ ပြိုင်မမိုက်ရဲလို့ နာမည်ဝှက်နဲ့ ရေးနေတာပါ။
=== ဆိုတာဟာ ညီမျှခြင်းသည် ညီမျှခြင်းနဲ့သာ ညီမျှသည်လို့ ဆိုလိုထားတာပါ။ (ဒါဟာလည်း ရူးနှမ်းမှု တစ်ခုပါပဲ။ အရူးတွေကြားမှာ ရူးရတာမို့လို့သာ တော်တော့တာပါ)။
ဒီလိုပဲ ဘယ်သူမှ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး သဏ္ဍာန်မှာ မတူကြသလို စိတ်လည်းပဲ မတူနိုင်တာမို့၊ မခင်ရွှေလှိုင်ရေးတာကို သဘောထား ကွဲကြလို့ရပါတယ်။ ကွဲလည်း ကွဲကြမှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကွဲတာထက် ဖြဲတာတွေကို မြင်ရတာများလို့ ဝင်ဟန့်တာပါ။
မှတ်မိနေသူ April 4, 2012
ဒီကိစ္စနဲ့လုံးဝမဆိုင်တဲ့ကိစ္စလေး သတိရလို့ မေးပါရစေ။
၂၀၀၇ ဘုန်းကြီးတွေ အသတ်ခံရတုန်းက ကိုထိုက်ဘလော့မှာ သန်းရွှေ ကို wanted ထုတ်ပြီး ပိုက်ဆံတွေကောက်ခဲ့ဖူးတယ်။ ပိုက်ဆံတွေလဲ ကိုထိုက် ဆီကို ပို့ ခဲ့ကြတယ်။
ကိုထိုက်က ဘဏ်မှာအပ်ထားတယ်လို့ သိရတယ်။
ခုလောက်ဆို အတိုးတော်တော်ရနေပြီလို့ နားလည်ပါတယ်။
အဲဒီပိုက်ဆံလေးတွေ ခု ထိ ဘဏ်ထဲမှာရှိသေးရဲ့လား။ ဖြစ်နိုင်ရင် စာရင်းရှင်းတမ်းကလေးထုတ်ပြန်ပေးပါ။
တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေက သိပ်မေ့တတ်ကြလွန်းလို့ သတိပေးတာပါ။ သိလဲသိချင်ပါတယ်။
ခင်ရွှေ လှိုင် ရေ ၊ နန်းအောင်ထွေးကြည် က သြဇီမှာပဲ သွားလူချင်းတွေ့ လိုက်ကြဟေ့။
ကိုထိုက် April 5, 2012
နာမည် ပြပြီးတောင် ရေးရဲတဲ့သတ္တိ မရှိတဲ့ လူက ပြန်ပြောတော့လဲ … ခွေးရူးကို သွားမောင်းမိလို့ ပြန်ကိုက်ခံရတဲ့ လူလို့ပဲ ကိုယ့်ဘာသာ သတ်မှတ်ပါတယ်။
http://www.facebook.com/profile.php?id=594643322 အဲဒီမှာ သွားကြည့် profile အပြည့်အစုံ တင်ထားတယ်။
်fallcy နဲ့ ကင်း၊ မကင်း အခုလောက်ဆို သိလောက်ပြီ ထင်ပါ့။ ရူးသလို နှမ်းသလို လုပ်တာထက် .. စကားကို တာဝန်ယူရဲဖို့ပဲ လိုပါတယ်။
=== April 6, 2012
ရော် .. ခက်ပါပေါ့လား၊ အင်္ဂလန်က မစ္စတာကိုထိုက် ဆိုသူရယ်။
အွန်လိုင်းမှာ ဘယ်သူဟာ ဘယ်သူပါလို့ သက်သေပြလို့ မရတာကြောင့် Anonymous နဲ့ မခြားနားဘူးလို့ ဥပမာ ဥပမေယျတွေနဲ့ ရှင်းပြလည်း မရပါလား။ ပေးထားတဲ့ ဖေ့ဘွတ်လိပ်စာသာ မှန်မယ်ဆိုရင်တော့ The University of Glasgow ကို အားများတောင် နာပါရဲ့။
ဖေ့ဘွတ်ဆိုတာ စိတ်ဖြေရာ၊ အပေါင်းသင်းတွေ ချိတ်ဆက်ရာ၊ ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုး လုပ်ချင်တာတွေကို လူမသိ သူမသိ အကောင်ထည်ဖေါ်လို့ ရရာနေရာ တစ်ခုပါ။
ကိုထိုက်ဆိုတာကို ဘယ်သူမဆို ဟန်ဆောင်လို့ ရသလို၊ အခုတင် အချိန်ပေးပြီး ကိုထိုက်နာမည်နဲ့ ဂျီမေးလုပ်မလား၊ ဖေ့ဘွတ်အကောင့် လုပ်မလား၊ လုပ်လို့ရပါတယ်။ နာမည်ဖျက်ဖို့ ကြိုးစားလို့လည်း ရပါတယ်။ ဖေ့ဘွတ်ပေါ်က ကိုထိုက်နာမည်နဲ့ လူတစ်ချို့ကတော့ –
ဒါတွေဟာလည်း မစ္စတာကိုထိုက်ရဲ့စိတ်ကို ပြောင်းလဲစေမယ်လို့ မထင်ပါဘူး။
“===” ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရူးလို့ ဝန်ခံထားပြီးသားမို့ ခွေးရူးဖြစ်လည်း သိပ်တော့ မထူးတော့ပါဘူး။ သို့ပေမင့် အကူးစက် ခံလိုက်ရတဲ့သူ ကိုထိုက်ဆိုသူအတွက်တော့ စိတ်မကောင်း ဖြစ်သူတွေ တစ်ယောက်တစ်လေ ရှိကောင်းရှိပါလ်ိမ့်မယ်။
p.s – ဒါနဲ့ တစ်ဆိတ်၊ စိတ်များ ပါရင်လည်း
မင့်ဘဂျီးစိန် April 3, 2012
ဪ… ဒီလောက် အပိုင်းပေါင်းများစွာရေးပြီး ၊ မသိနားမလည် တဲ့ စာဖတ်သူအချို့ ကို နဝေတိမ်တောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ခင်ဗျား.. နာမည် “ခင်ရွှေလှိုင်” ပါ ဆိုတော့ ကျုပ်လဲ မှန်းကြည့်လိုက်မယ် ။မှန်းနေရင် လွဲအုံးမယ်ဗျာ ။သေချာတာကို လုပ်မယ် ။ သူတို့နှိပ်စက်တာထက်လျှော့ပေါ့ပြီး စအိုထဲ အီလက်ထရစ် ရှော့ တည ပဲ ရိုက်မယ်။( ဒါ ကို ခံလို့ ကောင်းလွန်းလို့ ငြိမ် ခံနေတယ် ဆိုရင်တော့ ၊ခင်ဗျား ဟာ ခံချင်နေတဲ့သူပဲဖြစ်ရမယ် ) ။ အဲဒီ အချိန်ကျရင် ခင်ဗျားဟာ “ခင်”ညွန့် ရယ် သန်း “ရွှေ”ရယ် ၊မင်းအောင်“လှိုင်” ရယ် ၃ ယောက်ပေါင်းပြီး စပ် ကျ လာတဲ့ မိုးကျရွှေကိုယ်လို့ဝန်ခံလာစေရမယ် ။ ဟုတ်ပလား ။
စစ်တပ်အကြောင်း ဘယ်လောက်သိသလည်း ။ စစ်တပ်မှာ ရာထူးပြုတ်သွားပါတယ် ဆိုတဲ့သူကို ပင်စင်လစာခံစားခွင့် ပေးလေ့ ရှိသလား ။ လေ့လာလိုက်အုံး ။ ကြားဖူးနားဝ နဲ့ လျှောက်ပြော မနေနဲ့ ။ ခုခင်ဗျားကိုကြည့်ရတာ နေမြင့်လေ အရူးရင့်လေ ဆိုသလို မဲမဲမြင်ရာ လိုက်ကိုက်နေတဲ့ ခွေးရူး နဲ့ တူနေပြီ ။
လူမှန်ရင် ကိုယ်စိုက်ခဲ့တာ ကိုယ်ပြန်ရိတ်သိမ်းရမယ် ။ကိုယ်ရေးတဲ့စာ ကိုယ်တာဝန်ယူတတ်ရမယ် ။သူများကို လက်ညိုးတချောင်းထိုးရင် ကိုယ့်ဖက်ကိုယ် လက် ၃ချောင်းပြန်ထိုးသလိုပဲ ဆိုတာကိုလဲ သတိရနေပါ။
ခင်ဗျား စာတမ်းရှည်ကြီးကိုလည်း ဘယ်သူကမှ ဂန္တဝင် စာအုပ်ထုတ်ပေးမယ် မဟုတ်ဘူး ။ အချိန်တွေ သိပ်ပိုနေရင် ဘဝကူးကောင်းအောင် ဘာဝနာလေး အားထုတ်ဖို့ သင့်နေပြီ ခင်ရွှေလှိုင် ရေ။။
အော်ဇီမှာ နှပ်နေတဲ့ မင်းပြန်အလာကို စောင့်ကြိုနေတဲ့
ှရှမ်းလေး April 3, 2012
ABSDF မြောက်ပိုင်းအကြောင်းကို လူသတ်တဲ့ စာတွေက စပြီး ခုချိန်ထိ စောင့်စောင့်ပြီး ဖတ်နေခဲ့တာ တကယ့်ကို စိတ်ဝင်စားလို့ပါ .. ဒါပေမဲ့ ဒီဆောင်းပါးတွေကို (ခင်ရွှေလှိုင် ရဲ့ ဆောင်းပါး) ဖတ်ပြီး သိလိုက်တာကတော့ သေသွားရှာတဲ့ ကျောင်းသာတွေဟာ ဘာမှ သုံးစားမရဘူး ဆိုတဲ့ အဆင့်ကို ရောက်သွားမဲ့ သဘောရှိတယ် ဆိုတာဘဲ ..
အမှန်တရားကို ရှာဖွေတာတော့ ရှာဖွေနေကြတာပါဘဲ .. ဒါပေမဲ့ ဘယ်လောက်တွေ့တွေ့ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ခဲ့တဲ့ လူတိရိစ္ဆာန်တွေကတော့ ခုချိန်မှာ ဘယ်လောက်ဘဲ စည်းစိမ်တွေ ရစ်နေရစ်နေ ဘယ်လောက်ဘဲ ကုန်းကောက်စရာ မရှိအောင် ဆင်းရဲခြင်း ဆင်းရဲနေ ပြစ်ဒဏ်ကတော့ ခံရမှာပါဘဲ …
စစ်မင်းအောင် April 3, 2012
အော်ဖတ်ရတာအရသာရှိလိုက်တာ။ ထောက်လှမ်းရေးတွေကတော့ ပြန်ဟောင်နေပြန်ပြီ။ မြန်မာပြည် ဦးခင်ညွှန်က သူထောက်လှမ်းရေး ပါလို့ ၀န်ခံတဲ့တစ်နေ့ပေါ့ကွာ မင်းတို့ မသေဘဲကျန်တဲ့ထောက်လှမ်းရေးတွေကို ထောက်လှမ်းရေး မဟုတ်ဘဲ ငါတို့ ကျောင်းသားတွေ သေဆုံးမှုမှာ မင်းတို့တာဝန်ဆိုတာ သိနေဖို့ရယ်။တာဝန်ခံဖို့ ရယ်သာစဉ်းစားထားပေးတော့။
ကိုကိုကျော် April 4, 2012
ခင်ရွှေလှိုင်- နင် အလင်းဝင်တုံးက သန်းဇော် တို့အ်ိမ်ကို သွားပြီး ပြောခဲ့တာ မှတ်မိလား။ “ နောက် တကြိမ်ပြန်ထွက်ရအုံးမယ်” ဆိုတာ။ နင်ရယ်၊ သန်းဇော်ရယ်၊ ဇော်ဇော်မင်းရယ်က အလင်းဝင်ပြီး ကျန်တဲ့သူတွေကို အချောင်သမားတွေဆိုတော့ အိုးမိုင်ဂေါ့ လို့သာ ပြောပါရစေတော့ဟယ်
Thiri nandar April 4, 2012
Look! Who was spy or who wasn’t is not main issue here. Those who killed people in North violated human rights and therefore they are murderers – and it is the main issue.
In this kind of complicated situation, no one knows who were the real spies – including you!
ကျောင်းသားသစ် April 4, 2012
လျော်ကန်သည့် မှတ်ချက် ဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျား။
Nandar Smelly April 4, 2012
Look…! if those who were killed were real spies, there is no army in the wartime to release them with all their secret information.
The point is , yes they killed inhumanely, but it does not mean you can shout this issue loudly and can hide S.P.D.C ‘s human rights violations those are equally and million times worst than this incident.
I challenge you that we are ready to send them to international tribunal and we also want S.P.D.C’s war criminal and this group from N.B should be sent at the same time.
If you agree with this , then we are on right direction. If not, just shut up.
ခင်မောင်သန့် April 4, 2012
ကျွန်တော် ဒီကိစ္စကို စိတ်ဝင်စားလို့ စာတွေကို အစကတည်းက ဖတ်လာခဲ့တာပါ။ မခင်ရွှေလှိုင် ရေးတာ စိတ်ပျက်စရာ အရမ်းကောင်းတယ်။ ဘာကိုဆိုလိုမှန်းကို မသိဘူး။ ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်နိုင်လွန်းတယ်။ ဘယ်သူ့ကို ထောက်လှန်းရေးလို့ ဆိုလိုတာလဲ။ ဘယ်သူတွေက သတ်တာလဲ။ ဘယ်သူတွေက ဘာကြောင့် အသတ်ခံရတာလည်း။ အသတ်ခံရတဲ့လူတွေက ထောက်လှန်းရေးတွေလို့ အတိအလင်း ဆိုလိုတာလား။ လူသတ်မှုတွေက မဖြစ်ခဲ့ဘူးလား။
ဖြစ်နိုင်ရင် တည့်တည့်ရှင်းရှင်းရေးပါ။ ဟိုဟာလိုလို ဒီဟာလိုလို ဝေ့၀ိုက်မရေးပါနဲ့။ ခင်ဗျားစာကို ဖတ်ရတာ တစ်ခုခုကို ညာပြီးလုပ်ကြံဝါဒဖြန့်သလို ယောင်တောင်တောင်တွေများတယ်။ အတည့်ပြော အတည့်ရေးပါ။ ခင်ဗျားအမြင် ဘယ်သူတွေက ထောက်လှန်းရေးလည်း။ ဘယ်သူတွေက လူသတ်ကောင်တွေလည်း။ ခင်ဗျားယောက်ကျားက ထောက်လှန်းရေးလား။ နာမည်နဲ့ တိတိကျကျ အတိအလင်းရေးပါ။
သဘောထားကို တိတိကျကျ ဖော်ထုတ်ပါ။ သတ်ခံရတဲ့လူတွေက အတိအကျ သတ်ခံရတဲ့အချိန်မှာ ခင်ဗျားက ယောင်တောင်တောင် မရှင်းမလင်းတွေ မရေးပါနဲ့။ အခုဟာက ဘာတွေမှန်းကို မသိဘူး။
ဖတ်လာသမျှ ကျန်တဲ့လူတွေရေးတာ ရှင်းတယ်။ အချက်အလက်က တိကျတယ်။ ဖော်ပြမှုအားကောင်းတယ်။ ဝှေ့ပြီးရေးနေတာတွေ သိပ်မတွေ့ရဘူး။
ကျွန်တော်က စာဖတ်ပရိသတ် တစ်ယောက်ပါ။
reader April 4, 2012
i agree with this comment. I read this article4times already from part 1 to 5. I do not get it what her story is,but I figure out some of her intention.
1.she is trying to convince the audience that myo win, than Gyaung,aung naing and hla sai are honest students.
2.She point out that myo win seealot of his fellow students died, so he has every right to treat detainees unfairly.
3.she is fabricating the story and she claim herself as true heroine.
In short, this kind of writing style is so despicable. I want to make suggestion to khin shwe hlaing be honest.
အညာသားလေး April 4, 2012
ကိုခင်မောင်သန့်ပြောတာကို ထောက်ခံတယ်။ ဖတ်ရတာ၊ တချို့နေရာတွေ အရမ်းထောက်တယ်။ ဝေ့လည်ကြောင်ပတ် အရေးအသားလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်။ စိတ်ကူးယဉ် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ် ဂမ္ဘီရဝတ္ထုတပုဒ်ဖတ်ရတာထက် ပိုနက်နဲရှုပ်ထွေးတယ်။
myanmarpyithar April 5, 2012
စောင့်ဖတ်နေတယ် April 4, 2012
အောင်မိုးဝင်းက လူလည် တစ်ယောက်ဆိုတာကတော့ သိပ် သိသာပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူ လဲ တကယ်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုရင် ရေးပါစေ ဖတ်ရတာပေါ့။
နောက်တခု က ခင်ရွှေလှိုင်ဆက်ရေးပါ ။ ဖတ်ရတာပေါ့ ဒါပေမယ့် ဒီလိုရေးလို့ လဲ ပြီးခဲ့တာတွေကို justify လုပ်လို့ မရဘူး။
ခင်ရွှေလှိုင်အပြောအရ မောင်မောင်(ရွှေကရ၀ိက်)ဆိုတဲ့ကောင်က ဘာကောင်လဲ။
ခက်တော့ခက်သားကလား မန္တလေးဘက်ကသူတွေက သူတို့ မှ သူတို့။
မျိုးဝင်း တို့ သံချောင်းတို့ကျောင်းသားအစစ်ဆိုတာကိုလဲ မငြင်းဘူး ။ ဒီကောင်တွေ အင်မတန် လွတ်ခဲ့တာတွေကိုလဲ ကြားဖူးတယ်။
ငါတို့ တွေ ဆန်နီကြမ်းကြီးတွေကို ငရုတ်သီးခြောက်နဲ့ဆားလေး လက်တဆစ်လောက်နဲ့ မနက်မိုးမလင်းသေးဘူး ကိုက်ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာ ဖြတ်သန်းဖူးတယ်။ ငါတို့ တွေ တပ်ရင်းမှူးတွေ ၊ တပ်ခွဲမှူးတွေကို ငါတို့ဗိုလ်မှူးလဲမခေါ်ဘူး ဗိုလ်ကြီးလဲမခေါ်ဘူး ။ နာမည်ပဲတပ်ခေါ်တယ် ။ သူတို့ ရှိတဲ့ ရာရှင်ထဲက ဆေးပေါ့လိပ်တောင် အနိုင်ကျင့်ပြီးယူသောက်ဖူးတယ်။ ငါတို့ ကအဲဒီတုန်းက ရိုးရိုးရဲဘော်လေးတွေ ပါ။
ငါတို့ တပ်တွေမှာ တပ်ရင်းမှူး ထမင်းစားဖို့ဘယ်ရဲမေကမှလဲခူးမပေးဘူး လက်ဆေးရေလဲ အသင့်ကမ်းမပေးဘူး။ နောက်တန်းမှာပြန်တုန်းလေး စားဖိုကသံချောင်းခေါက်ရင် ကိုယ့်တပ်ခွဲ နဲ့ကိုယ် တပ်စိတ်အလိုက် အေးအေးဆေးဆေးဆင်းစားတာပဲ။ဒါပေမယ့် သံချောင်းတို့ တွေကအဲလို ထမင်းပွဲရှေ့ ရောက် လက်ဆေးရေအသင့်နဲ့ မောက်မာတယ်ဆိုတာတော့ ကြားဖူးတယ်။ ဘယ်ရန်သူကမှလဲ ငါတို့ တပ်မှူးကို တိုက်ပွဲကျအောင်မတိုက်နိုင်ခဲ့ဘူး ငါတို့ ကသာ ရန်သူကိုဆော်ခဲ့ကြတာ။
ခုဝင်ပြောနေတာတွေကြည့်ပြီး သတိထားမိတာကတော့ ဌေးတင့်ဆိုတဲ့သူပဲ ။ သရီးအိုသရီး က ဘဲဆိုရင်တော့ ကိုခင်ဝမ်းသီချင်း ဧရာဝတီဆိုတဲ့သီချင်းကို ခပ်တည်တည်နဲ့ သူရေးတဲ့ကဗျာဆိုပြီး ဒေါင်းအိုးဝေကိုပို့ ပြီး အင်မတန် စာဖတ်အားကောင်းတဲ့ ဒေါင်းအိုးဝေအယ်ဒီတာဆိုတဲ့ နလပိန်းတုန်းတွေက အမေ ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ထည့်ပေးလိုက်တာလဲ မှတ်မိသေးတယ်။
နန်းအောင်ထွေးကြည်ကိုလဲ အစကလဲ စာနာတယ်။ ခုလဲ စာနာတယ်။ ဒါပေမယ့် ခုကြည့်နေရတာ သိပ်ပြီး ဆပ်ကော့လပ်ကော့လုပ်လာလွန်းတယ် လို့ မြင်တယ်။
ဦးစိန် ထောက်လှမ်းရေးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကတော့ကျိန်းသေတယ်။ ထွန်းအောင်ကျော် ဆိုတာ မန္တလေးကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဆိုတာကြားဖူးတယ်။ ကျန်တာတွေတော့သိပ်မသိဘူး ။ ရန်သူ့ လူတွေပါချင်လဲပါမယ် ။မပါချင်လဲမပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ရန်သူက ငါတို့ရဲဘော်တွေကို မိရင် တောထဲမှာသတ်သလိုသတ်တဲ့နည်းတွေနဲ့ ခုလို သတ်တာကတော့ မသင့်တော်ဘူး။
အဲသလိုပဲ ခင်ရွှေလှိုင်ရေးသလို ခုလို အချိန်ကိုက် ဒီကိစ္စတွေကို သည်းကြီးမည်းကြီး မီးမောင်းထိုးလာတာကတော့ တိုက်ဆိုင်လွန်းပြန်တယ်။ နောက်တခု နန်းအောင်ထွေးကြည် ရေးထားတာမနေ့ ကဟစ်တိုင်မှာဖတ်ဖြစ်ပါတယ် ။ မင်းကိုနိုင်တို့ ကိုကိုကြီးတို့ ကတောင် ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ် ကိုနိုင်အောင်က ဘာမို့ ဆိုတာ။
နိုင်အောင်လဲဘာကောင်မှမဟုတ်ဘူး။ မင်းကိုနိုင်တို့ ကိုကိုကြီးတို့ ဆိုတာလဲ ဘာကောင်မှမဟုတ်ဘူး။ တောထဲမှာတုန်းက ရိုးရိုးလေးပြောခဲ့ကြဖူးတဲ့စကားပဲပြောလိုက်မယ် ။ နိုင်အောင်တို့တောင်ပိုင်း ကရင့် ဗဟိုနားကပ်နေတဲ့ကောင်တွေ လူရည်လည်ရင် အပြောညက်ရင် ၊ တပ်မှာ ချီးထုတ်ကျရင် ဗဟိုကော်မတီဖြစ်တယ်။
အဲလိုပဲ ပြည်တွင်းမှာလဲ ရန်ကုန်မှာ နေရင် အာကျယ်ရင် အခြေအနေကြည့်ပြီး လုပ်တတ်ရင်
ဗကသ ဗဟိုကော်မတီဖြစ်တယ် နာမည်ကြီးတယ်။ နာမည်ကြီးတဲ့အလျှောက် အဲဒီနာမည်ကိုထိမ်းတဲ့သူရှိတယ် မထိမ်းတဲ့သူရှိတယ် ဒါပဲကွာတယ် ။ ဒီတော့ မင်းကိုနိုင်လဲ ဘာကောင်မှမဟုတ်ဘူး။ ကိုကိုကြီးလဲဘာကောင်မှမဟုတ်ဘူး ။ ကျိန်းသေတာဒီကောင်တွေဘုရားမဟုတ်ဘူး။
သို့ သော် မင်းကိုနိုင်တို့ က ကိုယ့်နာမည်ကိုယ် ထိမ်းတယ် အနီးကပ်မသိပေမယ့်အဝေးကသိသလောက်တော့ ကျောင်းသားစိတ်ရှိတယ် တိုင်းပြည်ကိုခုထိသစ္စာရှိတယ်။ နိုင်အောင်ကတော့ ကြောင်သေကြွက်မခုတ်မျက်နှာနဲ့ ငါးကြော်ပဲ နှိုက်တဲ့ စောက်ကျင့်ရှိတယ်။ ဒါပါပဲ။
ဒီတော့ ဘယ်ကောင်တွေကဘယ်လိုဆိုတာကိုးကားမနေပါနဲ့ ။
အပိုတွေမပါပဲ အမှန်တွေကို အမှန်အတိုင်းရေးကြပါ။ စောင့်ဖတ်နေတယ်။
နောက်ပြီး တချိန် တုန်းက သံရုံးသတင်းပေးလုပ်ပြီးခုမှ အေဘီ အက်စ်ဒီအက်ဖ် ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ် ဆိုတာ ကျယ်ကျယ်အော်ရင်း လူရာပြန်ဝင်ချင်တဲ့ကောင်တွေလဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရှက်ကြပေါ့ကွာ
yes April 4, 2012
၈၈ လေးလုံး ၂၅ နှစ် ပြည့်ခါနီးမှာ မျှမျှတတနဲ့ အကောင်းဘက်ကို ဝေဖန်ဘူးတဲ့ ကွန်မန့်တခုမို့ သိမ်းထားခွင့်ပြုပါ။
fu ck you all
စိုးစိုး April 4, 2012
အောင်မိုးဝင်းဘယ်လိုလူလဲဆိုတာတော့ မသိဘူး သူလုပ်လို့ လူ့ဘောင်သစ်နှစ်ခြမ်းကွဲသွားတာ
ကုိုသံခဲ April 4, 2012
ခင်ရွှေလှိုင် ရေးတာမှဟုတ်၇ဲ့လားလို့ မြက်ခင်းသစ်ဖတ်နေ၇သလိုပဲ။ သူကိုယ်တိုင်ကဖြင့် AU မှာနေပြီး လူသတ်ကောင်တွေကိုသူတော်စင် အဖြစ်
သွတ်သွင်းနေလေ၇ဲ့ ။ AB (မပ) ၇ဲ့ သမိုင်းကိုေ၇းတာထက်
ကိုယ်ေ၇သွေးပြီး နိုင်အောင်၊ အောင်နိူင်၊ လှဆိုင်း တို့ကို favour လုပ် ၊ လက်၇ှိ AB ဥက္ကဌ သူ့လင်ကို နိုင်အောင် အဖွဲ့က ပေးကမ်းထား တာတွေ ၇ှိနေတော့ AB ကို သိတ်ချစ်တဲ့ပုံစံတွေနဲ့ AB က Statement အမှန် မထုတ်၇ဲတာ ကိုတော့ မသိသလိုလုပ်နေပြီး ….favoritism လိုင်းပေါ်ကနေပြီး ၇ိုးသားတဲ့ပုံနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မှန်ပြန်ကြည့်ပြီး ၇ှက်လိုက်ဦး
hhak April 4, 2012
မခင်လှိုင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိပ်ကိုယ်ရည်သွေးတတ်တာဘဲနော်………ခင်ဗျားတစ်ယောက်ထဲ ဦးနောက်ရှိတယ်ထင်နေလား …ဘီးလူးတွေက မင်းသားဖြစ်ပြီး မင်းသားက ဘီးလူးဘဝရောက်တော့မယ်……တတ်လဲ တတ်နိုင်တယ် …
ssthwehtun April 4, 2012
မြတ်စွာဘုရား တရားချရင်တောင် အမြင်မှန်ရမဲ.ပုံ မပေါ်ဘူး…တယူသန်တဇွတ်ထိုးကြီး….ခုချိန်ထိ လူသတ်သမားတွေကို ကာကွယ်ပေးနေတုံးပဲ..မျိုးဝင်းသေတော.ငိုသေးတယ်တဲ….မျိုးဝင်းကိုကြိတ်ကြိုက်နေလားမသိဘူး..
ဘက်မလိုက်သူ April 4, 2012
ဒေါ်ခင်ရွေလှိုင်ရေးတဲ့စာတွေထဲမှာ အမှန် တရား မြတ်နိူးတဲ့ စေသနာနဲ့ ရိုးသားမှုကို အရှင်းတိုင်းမြင်ရပါတယ် ။ ဒီကိစ္စ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အချိန်ဟာ ၁၉၉၂ က ဆိုတော့ ကျောင်းသားတွေ အသက်ဟာ၂၀ ကျော် ၃၀ ၀န်းကျင်လောက်သာရှိအုံးမယ် ။ အဲဒီအချိန်က ၁၉၈၈ခုနှစ် အုံကြွမှုအရှိန်ကလည်း ကျန်အုံးမယ် ဆိုတော့ ရန်သူအပေါ်မှာ မုန်းတီးတဲ့ စိတ်က ပြင်းထန်နေမှာပဲလေ ။ ဒီနေ့အချိန်အခါနဲ့ ဘယ်လိုမှ နိူင်းယှဉ်လို့မရနိူင်ပါဘူး ။
ဒီအချက်ကိုသိတဲ့ စစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေက ၀င်ပြီးမွေလိုက်တယ်ဆိုတာ လုံးဝနီးပါး မှန်ကန်နေတဲ့ ပြယုတ်ပဲ ။ ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောလည်းဆိုတော့ အဖွဲ့အစည်းတိုင်းနီးနီး ဒီဖြစ်ရပ်မျိုးနဲ့မခြား ကြုံတွေ့ဖူးလို့ပါပဲ ။ KNU , DKBA ကွဲတယ် မုံဆာလတို့ လီနင်မင်တို့ ချကြတယ် ၊ ဗကပပြိုကွဲတယ် ။ ဒါတွေဟာသာမန်ကြည့်ရင် သူ့သဘောနဲ့သူဖြစ်သွားတယ်လို့ ထင်ရပေမဲ့ တကယ်တန်းကျတော့ ဒီလိုဖြစ်လာအောင် တစ်ဘက်ရန်သူက အရင်းအနှီးတွေ အများကြီးပေးပြီး စနစ်တကျလုပ်ဆောင်ကြတာဖြစ်တယ် ။အတွေ့အကြုံနုနယ်တဲ့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဟာ ဒါတွေ ကိုမသိလိုက်ပဲအငိုက်မိသွားတာဖြစ်ပုံရပါတယ် ။ အခုပဲကြည့်လေ အွန်လှိုင်းပေါ်မှာ တိုက်ခိုက်နေအောင် ထောက်လှမ်းရေးနည်းဗျူဟာနဲ့ အသုံးချမှန်းမသိအောင် အသုံးချနေတာဖြစ်တယ် ။ အဲဒီ ၁၉၉၂ ခုနှစ်က ဒီဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်အောင် ဘယ်လိုအသုံးချခဲ့သလဲဆိုတာ ကောက်ချက်ဆွဲလို့ရနေလို့ပါပဲ ။ အမှန်တော့ ဒီကိစ္စပေါ်လာတာဟာ မကြာသေးပါဘူး ။ မြောက်ပိုင်း အေဘီပြန်ထောင်တဲ့သတင်း ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်တဲ့သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်လာတာနဲ့ ချိန်ကိုက် ပေါ်လာတာပါပဲ ။ ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေလို့ ဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ် ။ အဲဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့အတူ နောက်ကွယ်ကနေ ကြိုးကိုင်တဲ့သူ အဖွဲ့အစည်းရှိနေတယ်ဆိုတာလည်း ထင်ရှားပါတယ် ။ အမှန်တရားကို လိုချင်လို့ရေးတယ်ဆိုရင် လက်ခံပါတယ် ။ အခုဟာက နိူင်ငံရေးအရ အသေသတ်ဖို့ရည်ရွယ်နေတာဆိုရင် တစ်ဘက်ကခိုင်းတာကို လုပ်နေတယ်ဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ် ။ စာဖတ်သူတွေထဲမှာလည်း ရေချိန်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ် တချို့က တော်လှန်ရေးဆိုတာ ဖြူသလားမဲသလားတောင် မသိပါဘူး ။ ထောက်လှမ်းရေးတို့ သူလျိုတို့ဆို ဝေလားဝေးရောပေါ့ ။ စာဖတ်သူတွေအနေနဲ့ အစိုးရက ထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့မျိုးစုံဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ထားတာဟာ အားတိုင်းယားတိုင်း ဖွဲ့ထားတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ အမြင်လေးလောက်တော့ ရှိမှ ဒီကိစ္စတွေကို နားလည်နိူင်မယ်ထင်ပါတယ် ။
kobo April 4, 2012
နိုင်ငံတကာ တရားရုံးမှာ ရှင်းကြဗျာ
Set Htun April 4, 2012
ဆရာချစ်ဦးညို သိရင် ဂုဏ်အတော်ယူနေမှာ။
Saya Chit Oo Nyo won’t appreciate on it if he truly convince the full story of inhuman torture and investigation methods who committed the crimes under the name of Justice for democracy.
“As you sow so shall you reap” in term of Kama.
စမစ် April 4, 2012
ကျော်ခိုင် April 4, 2012
“ မိုး ညှင်း၊ မြစ်ကြီးနား၊ ဗန်းမော်မြို့ထဲအထိ ၀င်ချနိုင်၊ လက်နက်တွေ သိမ်းပိုက်နိုင်နေတဲ့အချိန်၊ ၀ါဒဖြန့်ချီရေးအနေနဲ့လည်း အအောင်မြင်ဆုံး အချိန်၊ စစ်ချီတဲ့ အခမ်းအနားတွေမှာတောင် ဘင်ခရာအဖွဲ့တွေ ဖွဲ့ထားနိုင် ရဲဘော်ရဲမေတွေကို တက်ကြွ မှုတွေ မြှင့်ပေးနိုင်တဲ့ အချိန်” ( ခင်ရွှေလှိုင်ရဲ့ဆောင်းပါး- အပိုင်း -၂-မှ )
“အစီစဉ်ရှိရှိလုပ်ခဲ့ကြတဲ့အပေါ် အစီစဉ်ရှိရှိ ပြန်အသုံးချနိုင်ဖို့ ကျောင်းသားတပ်ရဲ့ စစ်ရုံး၊ ကော်မတီရုံးတွေထဲမှာ ရှိနေရမဲ့ ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေ။ ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေ စစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေလက်ထဲ၊ ကိုယ်လွတ်ရုန်းပြေးခဲ့ရပါတယ်ဆိုတဲ့ လူ တချို့ရဲ့ လက်ထဲကနေ အလျှိုလျှို ပလူပျံပြီး ထုတ်ဝေဖို့စာအုပ်အသင့်နဲ့အတူ လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ အချိန်ကိုက် ပေါ်ထွက်လာနေပုံကလည်း “ဒါကို စနစ်တကျ လုပ်သွားခဲ့တဲ့ “သူလျှိုတစု ရှိနေတယ်” ဆိုတဲ့ သင်္ကေတကို ညွှန်ပြနေပါ တယ်။”
( ခင်ရွှေလှိုင် ရဲ့ဆောင်းပါး- အပိုင်း-၁- မှ)
ဘုရားရေ- ဗကပ ရဲ့ မိုင်းယမ်းတိုက်ပွဲထက်တောင် ကြီးကျယ်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတွေ ငါတို့ဘာလို့မသိခဲ့ပါလိမ့်။ ဒီလောက် ထူးချွန်ထက်မြက် တိုက်ရည်ခိုက်ရည်ကောင်းတဲ့ ၊ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် ( KIA) ထက် တိုက်စစ်ဆင်နိုင်တဲ့ ၊ ကျောင်းသားတပ်မတော်မြောက်ပိုင်းကြီးရဲ့ စစ်ရုံးကြီးထဲကနေ ဘယ်သူတွေက စာရွက်စာတမ်းတွေ၊ မှတ်တမ်းတွေ၊ ဗွီဒီယိုခွေတွေ ကို ခိုးထုတ်သွားတာလဲ။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလိုက်တာ။
အင်း ဘောလုံးစကားနဲ့ပြောရရင်၊ တိုက်စစ်ကောင်းပြီး ခံစစ်မကောင်းတာ နေမှာပေါ့လေ။ တကယ်ဆို ဘယ်တိုက်ပွဲမှာ ရန်သူ့လက်နက် ဘယ်နှစ်လက်သိမ်းပိုက်မိ၊ ဘယ်ကာလမှာ အဖွဲ့အစည်းရဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေ ခိုးထုတ်ခြင်းခံရမိ စတဲ့အရာတွေကို သုတေသနလုပ်ပြသင့်တာပေါ့။ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ အုပ်စုတွေထဲမှာ စစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေ ပါနိုင်တယ် လို့ တဘက်က စွပ်စွဲသလို၊ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေ ထဲမှာလည်း ရှိနိုင်တာပါပဲ လို့ စဉ်းစားနေတဲ့သူတွေရှိတယ်။ လှဆိုင်း လား။ ရော်နယ်အောင်နိုင်လား။ သံချောင်းလား။ သန်းဇော် နဲ့ ဇော်ဇော်မင်းလား။ အလင်းဝင်ခဲ့ဘူးတဲ့ “မဒမ်သံခဲ” လား။ ဒါမှမဟုတ် မဒမ်သံခဲရဲ့ စွပ်စွဲချက်အရ၊ စာအုပ်ထုတ်မဲ့ ကိုမောင်မောင် ( ကော့ကရိတ်) လား။ လဘက်ရည်ဆိုင်ထဲမှာ အီကြာကွေးကြော်နေတဲ့ ယူဆွတ် လား ။ နယ်စပ်မှာ ကာရာအိုကေဆိုင်ဖွင့် အရက်ရောင်းနေတဲ့ သူတယောက် လား။ ဒါဆိုလည်း ပြည်တွင်းကို ထွက်ပြေးသွားသူတွေက ဖေဖေါ်ဝါရီ (၁၂) ရက်ထုတ် စာမှာ တရားဝင် ရှင်းကြဖို့အတွက် စိန်ခေါ်ထားတာပဲ။ သက်သေခံ ပစ္စည်းတွေ ရှိပါတယ် ဆိုသူတွေကလည်း စိန်ခေါ်ရင် တိမ်ပေါ်လိုက်ဖို့ ကောင်းတာပေါ့။ ဘာလို့ အချိန်ကုန်ခံနေတာလဲ။
ကဲ လောလောဆည် ရှိထားတဲ့ Statistics အရ၊ အချက်အလက်တွေပေါ်မှာ စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။
“အရှင်ဖမ်းမိတဲ့ ရန်သူ့တပ်သားတယောက်ကိုတော့ ဗန်းမော်ရင်းမှာပဲခေါ်ယူ စစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးနောက် လမ်းစရိတ်ပေးပြီး ပြန်လွတ်ပေးခဲ့တယ်။ “သောင်းကျန်းသူတွေ လက်ထဲရောက်လို့ကတော့ ခေါင်းဖြတ်ခံရမယ်၊ သူပုန်တွေဆိုတာ လူသား တောင် စားတယ်” လို့ ၀ါဒဖြန့်ခံထားရတဲ့ အဲဒီတပ်သားဟာ တောထဲမှာ သူနဲ့ရွယ်တူ ကျောင်းသား ရဲဘော်ရဲမေတွေကို တွေ့လိုက်တော့ အတော်လေးအံ့သြသွားခဲ့တယ်။” ( ခင်ရွှေလှိုင် ရဲ့ ဆောင်းပါး -၂ – မှ)
ဒါဖြင့် မြောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ခေါင်းဖြတ်သတ်ခံမှုတွေဆိုတာ ဝါဒဖြန့်ခံရမှုတွေလို့ဆိုလိုချင်တာလား။ ကာကကံရှင်တွေ ပြောဆိုနေကြတာတွေဟာ မမှန်ဘူး လို့ ဆိုလိုချင်တာလား။ စစ်သားလေးတယောက်ကို ပိုက်ဆံပေး အိမ်ပြန်လွှတ်ခဲ့တယ် ဆိုရင်၊ ဘာလို့ ဒီမိုကရေစီရေးလုပ်တဲ့ ကျောင်းသားတွေကိုကျတော့ ခေါင်းဖြတ်သတ်ခဲ့တာလဲ။
ဆောင်းပါး (၄) မှာကျ ကျောင်းသား (၁၅) ယောက်ကို ခေါင်းဖြတ်သတ်တဲ့ညကို သွားကြည့်ခဲ့တယ် လို့ ဝန်ခံထားပြန်ရော။ မခက်ပေဘူးလား။ ဆောင်းပါးရေးမယ်ဆိုရင်၊ အရင်ဆောင်းပါးတုံးက ဘာရေးခဲ့တယ် ဆိုတာတွေကိုလည်း မှတ်မိစေချင်ပါတယ်။
“ဘယ်တုန်းကမှ ကျမကို အဖမ်းခံထားရတဲ့ဘက်မှာ တာဝန်မချပေးခဲ့ဘူး။ အမျိုးသမီးတွေအတွက် ဘယ်ရဲမေတွေကို အ စောင့်ချထားတယ်ဆိုတာလည်း ကျမ မသိဘူး။ ဆေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တာဝန်ကိုတော့ ဆေးတာဝန်ခံ ရဲမေ အန်ရမ်တီး (မိုးကောင်း) နဲ့ ဆေးဆရာမ တင်စန်းဦး (မိုးညှင်း) ပဲ တာဝန်ယူခဲ့တယ်။ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ မအင်္ဂါကို စစ်ဆေးခဲ့သူက ဆေးတာဝန်ခံ ဆရာမ အန်ရမ်တီး ပါ။ စစ်ခဲ့တာကိုပဲပြောပြီး ဘယ်သူစစ်တာလဲ ထည့်မပြောတော့ လုပ်ခဲ့သူတွေကပဲ တဏှာရူးလို့ လုပ်ခဲ့သလို ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်စေပါတယ်။ ”
ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ ခင်ရွှေလှိုင်ရယ်။ အမျိုးသမီးတွေအတွက် ဘယ်ရဲမေတွေကို အစောင့်ချထားမှန်းလဲမသိ၊ အဖမ်းခံထားရတဲ့ဘက်မှာ တာဝန်ချပေးခြင်းမခံရပဲနဲ့ ယုတ်မာရက်စက်တဲ့ စစ်ကြောရေးကာလတွေကို ဘယ်လိုလုပ် သိနိုင်မှာလဲ။ ကျူးလွန်ခဲ့သူတွေက သူတို့ရက်ရက်စက်စက်လုပ်ခဲ့တဲ့ အရာတွေကို အရက်မူးလာတဲ့အခါတိုင်း ထုတ်ဖေါ်ဝန်ခံခဲ့ကြသလို၊ ပြည်တွင်းက အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာလည်း ဖြောင့်ချက်ပေးပြီးသားတွေ ရှိနေပါတယ် ။ နှိပ်စက်ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေကလည်း သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို ပြောနေကြပါတယ်။ စစ်ကြောရေးခေါင်းဆောင် လှဆိုင်းနဲ့ ရက်စက်ကြမ်းတမ်းသူတွေ ကို ကာကွယ်နေတော့၊ မိုးကြိုးပစ်တာကို ထန်းလျှက်နဲ့ကာနေတဲ့ အရူးမ လို ဖြစ်မနေဘူးလား။ မိန်းကလေး အင်္ဂါတွေကို ရှာဖွေစစ်ဆေးစဉ်မှာ တလျှောက်လုံးရပ်ကြည့်နေသူက စစ်ကြောရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် “ သန်းဇော်” တယောက်လည်း ရှိနေပါတယ် ။ မျက်မြင်သက်သေတွေ၊ ကာယကံရှင်တွေဆီက ဖြောင့်ချက်တွေရထားပြီးသားပါ။ ( ကာယကံရှင်တွေက မကြာခင်မှာ ပြန်ပြီးတုန့်ပြန်ကြပါလိမ့်မယ်)
“မျက်လွှာလေးတွေချပြီး ငုတ်တုတ်လေးတွေ ထိုင်နေ သူ သုံးယောက်က ရဲဘော်ရန်အောင်၊ မခင်ချိုဦး၊ သင်းသင်း၊ မျက်လုံးချင်းစုံကြည့်မိရင် ကျမအတွက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်တာ ကို သူတို့သိနေလို့ ထင်ပါတယ်။ တချက်မှ ကျမကို မကြည့်ကြဘူး။”
“နောက်တခေါက် ဆေးသင်တန်းကို ရောက်လာတဲ့ အချိန်မှာ “ဥက္ကဋ္ဌ (ကိုထွန်းအောင်ကျော်)နဲ့ (ကိုအောင်နိုင်) အဖမ်းခံရတယ်လို့ကြားရင် ကျမကို မဖမ်း လည်း ကျမ လာအဖမ်းခံမယ်” လို့ ပြောခဲ့တယ်။”
အထက်ပါ စာကြောင်းနှစ်ကြောင်းကို ဖတ်ကြည့်ပြီး လုပ်ရပ်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်ရင် ခင်ရွှေလှိုင် မှာ ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ရှိသလား။ တကိုယ်ကောင်းဆန်ပြီး ၊ သူများတွေရဲ့ နှလုံးလှမှုကို တန်ဘိုးမထားခဲ့တာ ထင်ရှားပေါ်လွင်နေပါတယ်။
ဥက္ကဋ္ဌ ကိုထွန်းအောင်ကျော် အဖမ်းခံရရင် ကျမကို မဖမ်းလည်း ကျမ လာအဖမ်းခံမယ် လို့ ပြောခဲ့တဲ့သူ၊ ခင်ရွှေလှိုင် ဒုက္ခရောက်မှာ စိုးလို့ ခင်ချိုဦး၊ရဲဘော်ရန်အောင် တို့က မျက်လုံးချင်းဆိုင်ပြီး မကြည့်မိအောင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့ ရဲဘော်တွေ၊
ဒါပေမဲ့ ရဲရဲနီ ခင်ရွှေလှိုင်က “ သိချင်စိတ်” တခုတည်း နဲ့ ခေါင်းဖြတ်သတ်မဲ့နေရာကို အရောက်သွားပြီး ကြည့်ခဲ့သတဲ့။ ( သူမ ကြွေးကြော်ခဲ့သလို သွားအဖမ်းမခံခဲ့ပါ။ သူမ ဒုက္ခရောက်မှာကို စိုးရိမ်နေတဲ့သူတွေအပေါ် ကျေးဇူးတင် စကားတခွန်းမဆိုခဲ့ပါ။ )
ကိုယ့်အပေါ်ကောင်းခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်တွေကို ဘယ်လိုနှလုံးသား နဲ့ ကြည့်ခဲ့ပါသလဲ။ စိတ်မကောင်းလိုက်တာ ဆိုတဲ့စကားတောင် တခွန်းမှ မဆိုပဲ၊ မြို့ကြီးသား လူလည်များ ကြောင့် တောသားတွေ လူသတ်သမားဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် ဆိုတဲ့ ကောက်ချက်ကို ကြားမိတော့ ၊ “ အကိုရယ် ကျမက မယ်သီလရှင် လူထွက်လေးပါ။ ငတ်လွန်းလို့ ကျမ ဒီဘဝ ရောက်ရတာပါ၊ ခေတ်ကြီးက မကောင်းလို့ပါ။ ကျမ ဝါသနာပါလို့ မဟုတ်ပါဘူးရှင် ” ဆိုတဲ့ ညငှက်တယောက်ရဲ့ ဆင်ခြေကို သွားသတိယမိပါရဲ့။ ဒီလိုနဲ့ ရှေ့တန်းတွေ နောက်တန်းတွေမှာ မနားတမ်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပါတယ် ဆိုတဲ့ ရဲနီ ခင်ရွှေလှိုင် တယောက် ကြွေးကြော်သံတွေ မှောက်ပြီး အလင်းဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။
“တန်းစီနေရာကနေ တယောက်စီ နေရာတွေချပေးဖို့ ခေါ်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာ ကိုထွန်းအောင်ကျော်က “VCS,CS တို့ မှား မယ်နော်” လို့ စကားတခွန်း ပြောသွားခဲ့တယ်”
“သတ်တော့မယ်ဆိုတာကို သေချာပေါက်သိနေတဲ့ အချိန်မှာတောင် “ဟုတ်ပါတယ်” ပဲ ၀န်ခံနေကြတယ်။ ဘာကြောင့် “ငါတို့ သူလျှိုမဟုတ်ဘူးကွ” လို့ ကျန်နေတဲ့ ရဲဘော် တွေကြားမှာ သံသယလေးတစွန်းတစ ချန်ထားနိုင်အောင် မအော်သွားခဲ့ကြတာလဲ။” ( ဆောင်းပါး -၅- မှ)
ကဲ အထက်ပါ စာကြောင်းနှစ်ကြောင်းကိုသာ နှိုင်းယှဉ်ဖတ်ကြည့်ပါလေ။ အရူးလင်လုပ်ရသလို ဆိုတာ ဒါမျိုးနေမှာပါ။ ကိုထွန်းအောင်ကျော်ရဲ့ “မှားမယ်နော်” ဆိုတဲ့စကားတခွန်းရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို ခင်ရွှေလှိုင်တယောက် ကောင်းကောင်းနားလည် နိုင်စွမ်းရှိပါရဲ့လား။
ဒါပေမဲ့ ဟော့ဒီစာကြောင်းမှာတော့ ဖြတ်ကနဲ ဝန်ခံသွားပြန်တယ်။
“ကိုအောင်နိုင် က “လောလောဆယ်တော့ မင်းတက်နေတဲ့ ဆေးသင်တန်းကိုပဲ ပြီးအောင်လုပ်ပါ။ ငါ့ကိုဖမ်းခဲ့ရင်လည်း ငါတော့ အသားအနာမခံဘူး။ ဟုတ်တယ်လို့ ဖြေမှာပဲ။ မင်းလည်း မင်းအလှည့်ရောက်လာခဲ့ရင်သာ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲ အသင့်ပြင်ထားပါတဲ့” ကျမ ဘာဆက်ပြောစရာ ကျန်ပါသေးလဲ။ ( ဆောင်းပါး- ၄-)
လူယုံကယ်မှ ထောင်လုံးလုံးကျ ဆိုတာ ဒါမျိုးပေါ့။ ရော်နယ်အောင်နိုင်ရေ- လွတ်အောင်သာပြေးပေတော့။ ကျမဘာဆက်ပြောစရာကျန်သေးလဲ ဆိုသည့် ခင်ရွှေလှိုင်က ဆက်ပြီး ဝန်ခံပြန်တယ်။
“တကယ်လုပ် တော့မယ့် အချိန်မှာတော့ ကိုမျိုးဝင်းနဲ့ ကိုသံချောင်းက ကျမကိုပြန်ခိုင်းခဲ့သလို ကျမကိုယ်တိုင်လည်း လက် တွေ့ကျ ကြည့်နိုင်တဲ့အားမရှိတာမို့ ပြန်ဆင်းလာခဲ့…”
ခေါင်းဖြတ်သတ်ခံရသူတွေရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေကို မမြင်တွေ့ခဲ့ရပါပဲနဲ့ ကိုယ်တုံးလုံးချွတ်မသတ်ပါဘူး လို့ တွင်တွင် ငြင်းနေရှာသူ၊ ကိုချိုကြီး၊ ကိုကျော်ဝေ နဲ့ ခင်ချိုဦး တို့ရဲ့ စကားသံတွေ၊ မျိုးဝင်းရဲ့ “ ထွန်းအောင်ကျော် အခုမင်း ဘာတတ်နိုင်သေးလဲ ဆိုတဲ့ တီတိုးစကားတွေ ကို မျက်မြင်သက်သေတွေက ပြောဆိုနေချိန်မှာ၊ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကို မမြင်ခဲ့တဲ့ ခင်ရွှေလှိုင်တယောက်ကတော့၊ ကမ္ဘာဦးမှာ ပလာတူးငါးတွေ နွံနစ်နေသလိုမျိုး၊ုလူးလွန့် ငြင်းဆန်နေရှာတယ်။ အကြောင်းတော့ ရှိလိမ့်မယ်။
“ပြောရင်းနဲ့ သူ့မျက်လုံးတွေကို စိုက်ကြည့်နေတဲ့ ကျမ မျက်လုံးကို သူသတိထား မိပြီး “မင်းက ငါပြောရင် ယုံမှာမဟုတ်ဘူး၊ GS ခင်ဗျာ့ပဲ ရှင်းပြလိုက်ပါ” လို့ ပြောပြီး ဆေးခန်းထဲက ထွက်သွားတယ်။”
“ကိုသံချောင်းဆီ သွားခွင့်တောင်းတုန်းက သူက ကျမသွားမှာကို စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး “ငါ မင်းကိုယုံတာပဲ မင်းက ဆေးဖြုတ်လိုက်တာကိုး” တဲ့။ ကိုသံချောင်းဆိုတဲ့လူက အဲဒီလိုလူမျိုး။”
အော်- ကိုသံချောင်း ကိုသံချောင်း —လူတွေကို ခေါင်းဖြတ်သတ်ပေမဲ့ ဒီလို ယုံကြည်ရမဲ့ ကောင်မလေးကို သံယောဇဉ်အငွေ့အသက်လေးတွေနဲ့ ပြောတတ်ရှာသားပဲ။
အဆိုတော် “မိုင်” ဆိုနေကျ သီချင်းတပုဒ်ကိုသာ သတိယနေမိရဲ့။
မလွမ်းပိုလေ x x x x ဆောင်းနှင်းပွင့်လေးတွေကို မြင်တိုင်း x x x x အကို့ကို သတိယလို့ ငိုနေရတယ်ပေါ့။
ဗ.က.သ April 4, 2012
အောင်မိုးဝင်းဆိုတဲ့ ကောင် မိန်းမသိပ်ဆန်တာပါလားကွာ။ မင်းအရေးအသားကြည့်ရတာ တော်တော်စိတ်ပျက်ဖို့ ကောင်းတာပဲ။ မင်းကိုယ်မင်း ဗန်းမော်တင်အောင်တို့ ဒဂုန်တာရာတို့မြသန်းတင့်တို့ လောက်ထင်ပြီး၊ ရိသဲ့သဲ့ လုပ်ပုံကတော့ ငါးမင်းဆွေနဲ့ အချိုးတူ ဇတူ ပါလား ငါ့လူ။ မင်းလဲ ငပွကြီးပဲ ၊ နေရာတကာပါတယ်။ မန္တလေး သားတွေ လေကြီးလေကျယ်ဆိုတာ မန္တလေးပြေးကြည့်ဖို့ မလိုဘူး မင်း ရေးတာလေးတွေကို နည်းနည်းသည်းညည်းခံဖတ်လိုက်တာနဲ့ သိပြီ။ အရှင်နှစ်ပါး နန်းစိုက်တဲ့အရပ် က ဖင်ယား သန်းကိုက်တဲ့ ပါးစပ်နဲ့ကောင်တွေပဲ။
လူ့ဘောင်သစ် April 5, 2012
ခေါင်းဖြတ်ရမဲ့စာရင်းထဲမှာ အောင်မိုးဝင်းလည်းပါတယ် ။ ဒီကောင်အဖျက်အမှောင့်သမား ။ လူ့ဘောင်သစ်ကို နှစ်ခြမ်းခွဲခဲ့တဲ့ကောင် ။
MDY April 4, 2012
ဒေါ်လှိုင် ရေ အားပေးပါတယ်၊ ဆက်ရေးပါ၊
သာယာဝတီ က ကြောင် (ခ) ကျော်နိုင်ဦး ရေ – မင်းနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွန့် ရဲ့ဇနီး ဒေါက်တာ ဒေါ်ခင်ဝင်းရွေ နဲ့ဘယ်လို မိသားစုချင်း ရင်းနှီးတယ်။ သူတို့အဆက်အသွယ်နဲ့ဒု ထောက်လှမ်းရေးမှူးချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ် သန်းထွန်း က ဘယ်လို ညွန်ကြားချက်နဲ့မကဒတ – မပ ကို ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာ။ မင်းကိုယ်တိုင် ပြောခဲ့တာတွေ။ ကျောင်းသားရဲမေ တစ်ဦး နဲ့လက်ထပ်ပြီး အတူပြန်ပြေးပြီးနောက် မြို့ ပေါ် ရောက်မှ ပစ်ထားခဲ့တာတွေတွေ။ သာယာဝတီထောင်တ၀ိုက်မှာ လှုပ်ရှားနေတာတွေ ကိုလည်း သိစေချင်တယ်။ ထလတ (၁၆) မန်းက အဆက်တွေ မကဒတ – မပ ထဲမှာ ဘယ်လောက်ရှိလဲ ထလတ (၁၆) က အခြားအဆင့် ဗန်းမော်ညိုနွဲ့ရဲ့ သမက် အခု ဗန်းမော်ရှိနေသေးတယ်။ ဟုတ် မဟုတ် ဖော်ထုတ် သင့်တယ်၊
အေး April 5, 2012
ဗန်းမော်ညိုနွဲ့ က လူပျိုးကြီးပါဟ
ဘုန်းကြီးတစ္ဆေ April 4, 2012
“ မိုး ညှင်း၊ မြစ်ကြီးနား၊ ဗန်းမော်မြို့ထဲအထိ ၀င်ချနိုင်၊
၀ါဒဖြန့်ချီရေးအနေနဲ့လည်း အအောင်မြင်ဆုံး အချိန်၊
စစ်ချီတဲ့ အခမ်းအနားတွေမှာတောင် ဘင်ခရာအဖွဲ့တွေ ဖွဲ့ထားနိုင်
ရဲဘော်ရဲမေတွေကို တက်ကြွ မှုတွေ မြှင့်ပေးနိုင်တဲ့ အချိန်”
( ခင်ရွှေလှိုင်ရဲ့ဆောင်းပါး- အပိုင်း -၂-မှ )
“အစီစဉ်ရှိရှိလုပ်ခဲ့ကြတဲ့အပေါ် အစီစဉ်ရှိရှိ ပြန်အသုံးချနိုင်ဖို့
ကျောင်းသားတပ်ရဲ့ စစ်ရုံး၊ ကော်မတီရုံးတွေထဲမှာ ရှိနေရမဲ့ ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေ။
ကိုယ်လွတ်ရုန်းပြေးခဲ့ရပါတယ်ဆိုတဲ့ လူ တချို့ရဲ့ လက်ထဲကနေ
အလျှိုလျှို ပလူပျံပြီး ထုတ်ဝေဖို့စာအုပ်အသင့်နဲ့အတူ
လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ အချိန်ကိုက် ပေါ်ထွက်လာနေပုံကလည်း
“ဒါကို စနစ်တကျ လုပ်သွားခဲ့တဲ့ “သူလျှိုတစု ရှိနေတယ်”
ဆိုတဲ့ သင်္ကေတကို ညွှန်ပြနေပါ တယ်။”
ဘုရားရေ- ဗကပ ရဲ့ မိုင်းယမ်းတိုက်ပွဲထက်တောင်
ဒီလောက် ထူးချွန်ထက်မြက် တိုက်ရည်ခိုက်ရည်ကောင်းတဲ့ ၊
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် ( KIA) ထက် တိုက်စစ်ဆင်နိုင်တဲ့ ၊
မှတ်တမ်းတွေ၊ ဗွီဒီယိုခွေတွေ ကို ခိုးထုတ်သွားတာလဲ။
တိုက်စစ်ကောင်းပြီး ခံစစ်မကောင်းတာ နေမှာပေါ့လေ။
ရန်သူ့လက်နက် ဘယ်နှစ်လက်သိမ်းပိုက်မိ၊ ဘယ်ကာလမှာ
အဖွဲ့အစည်းရဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေ ခိုးထုတ်ခြင်းခံရမိ စတဲ့အရာတွေကို သုတေသနလုပ်ပြသင့်တာပေါ့။
စစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေ ပါနိုင်တယ် လို့ တဘက်က စွပ်စွဲသလို၊
ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေ ထဲမှာလည်း ရှိနိုင်တာပါပဲ လို့ စဉ်းစားနေတဲ့သူတွေရှိတယ်။
သန်းဇော် နဲ့ ဇော်ဇော်မင်းလား။
အလင်းဝင်ခဲ့ဘူးတဲ့ “မဒမ်သံခဲ” လား။
ဒါမှမဟုတ် မဒမ်သံခဲရဲ့ စွပ်စွဲချက်အရ၊ စာအုပ်ထုတ်မဲ့ ကိုမောင်မောင် ( ကော့ကရိတ်) လား။
လဘက်ရည်ဆိုင်ထဲမှာ အီကြာကွေးကြော်နေတဲ့ ယူဆွတ် လား ။
နယ်စပ်မှာ ကာရာအိုကေဆိုင်ဖွင့် အရက်ရောင်းနေတဲ့ သူတယောက် လား။
ဒါဆိုလည်း ပြည်တွင်းကို ထွက်ပြေးသွားသူတွေက
ဖေဖေါ်ဝါရီ (၁၂) ရက်ထုတ် စာမှာ တရားဝင် ရှင်းကြဖို့အတွက် စိန်ခေါ်ထားတာပဲ။
သက်သေခံ ပစ္စည်းတွေ ရှိပါတယ် ဆိုသူတွေကလည်း
စိန်ခေါ်ရင် တိမ်ပေါ်လိုက်ဖို့ ကောင်းတာပေါ့။
ကဲ လောလောဆည် ရှိထားတဲ့ Statistics အရ၊
ဗန်းမော်ရင်းမှာပဲခေါ်ယူ စစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးနောက် လမ်းစရိတ်ပေးပြီး ပြန်လွတ်ပေးခဲ့တယ်။
“သောင်းကျန်းသူတွေ လက်ထဲရောက်လို့ကတော့ ခေါင်းဖြတ်ခံရမယ်၊
သူပုန်တွေဆိုတာ လူသား တောင် စားတယ်” လို့ ၀ါဒဖြန့်ခံထားရတဲ့
အဲဒီတပ်သားဟာ တောထဲမှာ သူနဲ့ရွယ်တူ ကျောင်းသား ရဲဘော်ရဲမေတွေကို
တွေ့လိုက်တော့ အတော်လေးအံ့သြသွားခဲ့တယ်။” ( ခင်ရွှေလှိုင် ရဲ့ ဆောင်းပါး -၂ – မှ)
ဒါဖြင့် မြောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အစုလိုက်အပြုံလိုက်
ကာကကံရှင်တွေ ပြောဆိုနေကြတာတွေဟာ မမှန်ဘူး လို့ ဆိုလိုချင်တာလား။
စစ်သားလေးတယောက်ကို ပိုက်ဆံပေး အိမ်ပြန်လွှတ်ခဲ့တယ် ဆိုရင်၊
ဘာလို့ ဒီမိုကရေစီရေးလုပ်တဲ့ ကျောင်းသားတွေကိုကျတော့ ခေါင်းဖြတ်သတ်ခဲ့တာလဲ။
ဆောင်းပါး (၄) မှာကျ ကျောင်းသား (၁၅) ယောက်ကို
ခေါင်းဖြတ်သတ်တဲ့ညကို သွားကြည့်ခဲ့တယ် လို့ ဝန်ခံထားပြန်ရော။
အရင်ဆောင်းပါးတုံးက ဘာရေးခဲ့တယ် ဆိုတာတွေကိုလည်း မှတ်မိစေချင်ပါတယ်။
“ဘယ်တုန်းကမှ ကျမကို အဖမ်းခံထားရတဲ့ဘက်မှာ တာဝန်မချပေးခဲ့ဘူး။
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ မအင်္ဂါကို စစ်ဆေးခဲ့သူကေ
ဆးတာဝန်ခံ ဆရာမ အန်ရမ်တီး ပါ။
စစ်ခဲ့တာကိုပဲပြောပြီး ဘယ်သူစစ်တာလဲ ထည့်မပြောတော့
လုပ်ခဲ့သူတွေကပဲ တဏှာရူးလို့ လုပ်ခဲ့သလို ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်စေပါတယ်။ ”
အမျိုးသမီးတွေအတွက် ဘယ်ရဲမေတွေကို အစောင့်ချထားမှန်းလဲမသိ၊
ယုတ်မာရက်စက်တဲ့ စစ်ကြောရေးကာလတွေကို ဘယ်လိုလုပ် သိနိုင်မှာလဲ။
ကျူးလွန်ခဲ့သူတွေက သူတို့ရက်ရက်စက်စက်လုပ်ခဲ့တဲ့ အရာတွေကို
ဖြောင့်ချက်ပေးပြီးသားတွေ ရှိနေပါတယ် ။
နှိပ်စက်ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေကလည်း သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို ပြောနေကြပါတယ်။
စစ်ကြောရေးခေါင်းဆောင် လှဆိုင်းနဲ့ ရက်စက်ကြမ်းတမ်းသူတွေ ကို
ကာကွယ်နေတော့၊ မိုးကြိုးပစ်တာကို ထန်းလျှက်နဲ့ကာနေတဲ့ အရူးမ လို ဖြစ်မနေဘူးလား။
မိန်းကလေး အင်္ဂါတွေကို ရှာဖွေစစ်ဆေးစဉ်မှာ
တလျှောက်လုံးရပ်ကြည့်နေသူက စစ်ကြောရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် “ သန်းဇော်” တယောက်လည်း ရှိနေပါတယ် ။
မျက်မြင်သက်သေတွေ၊ ကာယကံရှင်တွေဆီက ဖြောင့်ချက်တွေရထားပြီးသားပါ။
( ကာယကံရှင်တွေက မကြာခင်မှာ ပြန်ပြီးတုန့်ပြန်ကြပါလိမ့်မယ်)
“မျက်လွှာလေးတွေချပြီး ငုတ်တုတ်လေးတွေ ထိုင်နေ သူ သုံးယောက်က
တချက်မှ ကျမကို မကြည့်ကြဘူး။”
“နောက်တခေါက် ဆေးသင်တန်းကို ရောက်လာတဲ့ အချိန်မှာ
ကျမကို မဖမ်း လည်း ကျမ လာအဖမ်းခံမယ်” လို့ ပြောခဲ့တယ်။”
အထက်ပါ စာကြောင်းနှစ်ကြောင်းကို ဖတ်ကြည့်ပြီး
လုပ်ရပ်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်ရင် ခင်ရွှေလှိုင် မှာ ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ရှိသလား။
တကိုယ်ကောင်းဆန်ပြီး ၊ သူများတွေရဲ့ နှလုံးလှမှုကို
ဥက္ကဋ္ဌ ကိုထွန်းအောင်ကျော် အဖမ်းခံရရင်
ကျမကို မဖမ်းလည်း ကျမ လာအဖမ်းခံမယ် လို့ ပြောခဲ့တဲ့သူ၊
ခင်ရွှေလှိုင် ဒုက္ခရောက်မှာ စိုးလို့ ခင်ချိုဦး၊ရဲဘော်ရန်အောင် တို့က
မျက်လုံးချင်းဆိုင်ပြီး မကြည့်မိအောင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့ ရဲဘော်တွေ၊
ဒါပေမဲ့ ရဲရဲနီ ခင်ရွှေလှိုင်က
“ သိချင်စိတ်” တခုတည်း နဲ့ ခေါင်းဖြတ်သတ်မဲ့နေရာကို အရောက်သွားပြီး ကြည့်ခဲ့သတဲ့။
( သူမ ကြွေးကြော်ခဲ့သလို သွားအဖမ်းမခံခဲ့ပါ။
သူမ ဒုက္ခရောက်မှာကို စိုးရိမ်နေတဲ့သူတွေအပေါ် ကျေးဇူးတင် စကားတခွန်းမဆိုခဲ့ပါ။ )
ဘယ်လိုနှလုံးသား နဲ့ ကြည့်ခဲ့ပါသလဲ။
စိတ်မကောင်းလိုက်တာ ဆိုတဲ့စကားတောင် တခွန်းမှ မဆိုပဲ၊
မြို့ကြီးသား လူလည်များ ကြောင့် တောသားတွေ လူသတ်သမားဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် ဆိုတဲ့
ကောက်ချက်ကို ကြားမိတော့ ၊
“ အကိုရယ် ကျမက မယ်သီလရှင် လူထွက်လေးပါ။
ငတ်လွန်းလို့ ကျမ ဒီဘဝ ရောက်ရတာပါ၊
ကျမ ဝါသနာပါလို့ မဟုတ်ပါဘူးရှင် ” ဆိုတဲ့
ညငှက်တယောက်ရဲ့ ဆင်ခြေကို သွားသတိယမိပါရဲ့။
ဒီလိုနဲ့ ရှေ့တန်းတွေ နောက်တန်းတွေမှာ မနားတမ်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပါတယ် ဆိုတဲ့
ရဲနီ ခင်ရွှေလှိုင် တယောက် ကြွေးကြော်သံတွေ မှောက်ပြီး အလင်းဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။
“တန်းစီနေရာကနေ တယောက်စီ နေရာတွေချပေးဖို့ ခေါ်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာ
“သတ်တော့မယ်ဆိုတာကို သေချာပေါက်သိနေတဲ့ အချိန်မှာတောင်
“ဟုတ်ပါတယ်” ပဲ ၀န်ခံနေကြတယ်။
ဘာကြောင့် “ငါတို့ သူလျှိုမဟုတ်ဘူးကွ” လို့ ကျန်နေတဲ့ ရဲဘော် တွေကြားမှာ
သံသယလေးတစွန်းတစ ချန်ထားနိုင်အောင် မအော်သွားခဲ့ကြတာလဲ။” ( ဆောင်းပါး -၅- မှ)
ကဲ အထက်ပါ စာကြောင်းနှစ်ကြောင်းကိုသာ နှိုင်းယှဉ်ဖတ်ကြည့်ပါလေ။
အရူးလင်လုပ်ရသလို ဆိုတာ ဒါမျိုးနေမှာပါ။
ကိုထွန်းအောင်ကျော်ရဲ့ “မှားမယ်နော်” ဆိုတဲ့စကားတခွန်းရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို
ခင်ရွှေလှိုင်တယောက် ကောင်းကောင်းနားလည် နိုင်စွမ်းရှိပါရဲ့လား။
“ကိုအောင်နိုင် က “လောလောဆယ်တော့
မင်းလည်း မင်းအလှည့်ရောက်လာခဲ့ရင်သာ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲ အသင့်ပြင်ထားပါတဲ့”
ကျမ ဘာဆက်ပြောစရာ ကျန်ပါသေးလဲ။ ( ဆောင်းပါး- ၄-)
လူယုံကယ်မှ ထောင်လုံးလုံးကျ ဆိုတာ ဒါမျိုးပေါ့။
ကျမဘာဆက်ပြောစရာကျန်သေးလဲ ဆိုသည့် ခင်ရွှေလှိုင်က ဆက်ပြီး ဝန်ခံပြန်တယ်။
“တကယ်လုပ် တော့မယ့် အချိန်မှာတော့
ကျမကိုယ်တိုင်လည်း လက် တွေ့ကျ ကြည့်နိုင်တဲ့အားမရှိတာမို့ ပြန်ဆင်းလာခဲ့…”
ကိုယ်တုံးလုံးချွတ်မသတ်ပါဘူး လို့ တွင်တွင် ငြင်းနေရှာသူ၊
ကိုချိုကြီး၊ ကိုကျော်ဝေ နဲ့ ခင်ချိုဦး တို့ရဲ့ စကားသံတွေ၊
မျိုးဝင်းရဲ့ “ ထွန်းအောင်ကျော် အခုမင်း ဘာတတ်နိုင်သေးလဲ ဆိုတဲ့
တီတိုးစကားတွေ ကို မျက်မြင်သက်သေတွေက ပြောဆိုနေချိန်မှာ၊
ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကို မမြင်ခဲ့တဲ့ ခင်ရွှေလှိုင်တယောက်ကတော့၊
ကမ္ဘာဦးမှာ ပလာတူးငါးတွေ နွံနစ်နေသလိုမျိုး၊ုလူးလွန့် ငြင်းဆန်နေရှာတယ်။
“ပြောရင်းနဲ့ သူ့မျက်လုံးတွေကို စိုက်ကြည့်နေတဲ့ ကျမ မျက်လုံးကိုသူသတိထား မိပြီး
“မင်းက ငါပြောရင် ယုံမှာမဟုတ်ဘူး၊ GS ခင်ဗျာ့ပဲ ရှင်းပြလိုက်ပါ” လို့ ပြောပြီး ဆေးခန်းထဲက ထွက်သွားတယ်။”
“ကိုသံချောင်းဆီ သွားခွင့်တောင်းတုန်းက သူက ကျမသွားမှာကို စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး
အော်- ကိုသံချောင်း ကိုသံချောင်း —
ဒီလို ယုံကြည်ရမဲ့ ကောင်မလေးကို
မလွမ်းပိုလေ x x x x
x x x x အကို့ကို သတိယလို့ ငိုနေရတယ်ပေါ့။
Maung Min April 4, 2012
Daw Khin Shwe Hlaing
Is there any ghost writer (shadow) behind you? Again, you never mentioned anything about what Aung Naing, Myo Win and Than Gyaung did to your own friends. We all love ABSDF as much as you do and some decided to keep quiet forawhile because things are too complicated to understand.
Who do you think you are to judge who is who? You are the one who surrendered to our enemy, who know how much you talked during the interrogation. Here isaworst case scenario, they (MI) must also know that you are affiliating with Chairman Than Khe (Potential one at the time) so they let you go and rejoin with your husband. Is there any particular reason that they let you go so that you will be close enough to the head of ABSDF? Or maybe you are the one who is churning things around on time. How come did you survive during killing and arrest? Now how do you feel about those assumptions?
If you want to write your experiences (memoir) truthfully, feel free do so until the rest of the world hate you. Pls. do not accuse, assume or judge people or fabricate things because that would create unnecessary confusion and collateral damage within us since things are already complicated.
The reliable record? Are you talking about the video tape interviewed by Than Zaw and Zaw Zaw Min? Remember KIA (Lt. Gwun Baw, he is still alive) supervised the whole thing. Everyone knows that the whole documentary was faked ( Ask Nan Aung Htawy Kyi). Again ask Aung Naing how did he (they) come up with that crappy idea? If you believe that video tape, you seriously needapsychiatric evaluation. Ask Aung Naing what did they (he and his fellows) do on February 13, 1992, the day after killing? Pls. make sure to include his answers in your next writing. Ask Aung Naing if he killed someone after he becameachairman of ABSDF (NB). And also, remember to include forced recruitment of ABSDF’s leaders. Remember to include the execution of some trainees. Remember to include why ABSDF leaders exactly follow the path of KIA. Remember to include why KIA did not stop killing? (KIA was following all the way along., ABSDF (NB) was their territory). People know things but they don’t talk like the way you do.
It is kind of interesting that you and Nan Aung Htway Kyi tookablood oath as you said. Now is the time to disclose everything? Congratulation! At least, you already made your blood sister get very upset. in
One last question, who do you think leave you as an eye witness?
Min Sin April 4, 2012
Nyi Nyi’s brother Khin Maung Htwe isafriend of previous health minister who is close to and physician of Than Shwe.
စိုးမင်း April 4, 2012
ခင်ရွှေလှိုင်ရေမင်းရေးတာတွေများလာလေ ABSDF ကမြောင်းထဲပိုရောက်သွားလေဘဲ။
Maung Lwin April 5, 2012
ဌေးတင့်က ၃၀၃ မှာ တနှစ်ပြည့်အောင် မနေသွားရှာပါဘူး။ ၃၀၃ နာမည်ပျက်ပါတယ်ဗျာ။ ကရင် နီ (၃၀၃)မှာ နေတုံးက ဟိုရှုပ်၊ ဒီရှုပ်၊ ပြီး သူ့ကိုယ်သူ ဗိုလ်မှုး စောလင်းဆင် ၃၀၃ စစ်ရေး တာဝန်ခံဆိုပြီး လုပ်၊ ကရင်နီ လူကြီး၊ တပ်ဗိုလ်တပ်မှုး တွေကို ဆရာလုပ်၊ အဲ့လို ရှောက် ရှုပ်နေလို့ ဒီအေဘီက သင်တန်းခေါ်လို့ ပို့လိုက်တာ။ သူတော်လို့ သင်းတန်းကို ရွေးလွတ်တာ မဟုတ်ဘူး။ သင်တန်းပြီးတော့ တပ်ရင်း ပြန်လာ ရှုပ်မှ စိုးလို့ အဲ့ဒိ အချိန်က ကိုဆန်နီ (စစ်ရေးတာဝန်ခံ)က စစ်ရေး ဌာန မှာ ခေါ်ထားလိုက်တာပါ။ ဒီလောက် အပြောကြီးတဲ့သူ တောထဲမှာ လည်း ကြာကြာ မနေသွားပါဘူး။ အခုလည်း ဘုမသိ၊ ဘမသိ လိုက်ရှုပ်နေပြန်ပြီ။
မိုးဇော်အောင် April 5, 2012
ကျနော်တခုစိတ်မကောင်းတာက,ဒီမြောက်ပိုင်းမတရားလူသတ်မှုကို တရားမျှတစွာဖြေရှင်းအဖြေမရှာဘဲ ရန်သူထံအလင်းဝင်ဒူးထောက်ခဲ့တဲ့ လူထုမဒမ်က လုပ်ကြံအမှန်တရားနဲ့ ဖုံးကွယ်ဘို့ ကြိုးစားနေလို့ပဲ။
အမေရိကန်စစ်တပ်က ရဲဘော်တချို့ ကြောင့် Mỹ Lai Massacre ဗီယက်နမ်မှာ ဖြစ်တယ်,Haditha massacre Iraq မှာဖြစ်တယ်၊Abu Ghraib torture and prisoner abuse ဖြစ်တယ်၊နောက် Afghan massacre ဖြစ်တယ်။ သူတို့ဖြေရှင်းကြတယ်၊ဒီလိုမတရားလူသတ်မှုတွေကိုမကာကွယ်ပေးဘဲ “they are not one of us”ဆိုပြီး ဖြေရှင်းကြတာတွေ့ရတယ်။မကဒတလဲ တရားမျှတစွာဖြေရှင်းအဖြေရှာနိုင်ပါစေ။
ko April 5, 2012
are you moe zaw aung from minthamee
myo set April 5, 2012
ကျုပ်တို့ အပြင်လူတွေက ဘယ်သူတွေ ထောက်လှမ်းရေးစစ်စစ် ဖြစ်တယ် မဖြစ်ဘူး ဆိုတာထက် “ဘာကြောင့် ဒီလို နှိပ်စက် ညှင်းပန်း” ခဲ့တာလဲ ဆိုတာ ပိုစိတ်ဝင်စားတယ်။
(၁) ဒီလို ရက်ရက်စက်စက် မတွေးရဲလောက်အောင် နှိပ်စက်ခဲ့တာ အမှန်လား။
(၂) ဒီလို နှိပ်စက်ခြင်းသည် ရန်သူထောက်လှမ်းရေး စစ်စစ်တွေကိုတောင် လုပ်ခွင့်ရှိသလား။
(၃) ထောက်လှမ်းရေးမဟုတ်ဘဲ ကြားချောင် ဓါးစာခံဖြစ်သွားရတဲ့ လူတွေအတွက် ABSDF အဖွဲ့အနေနဲ့ ဘယ်လို အစီအမံတွေရှိထားသလဲ။
ကျုပ် ပြတ်ပြတ်သားသား မြင်တာကတော့ ထောက်လှမ်းရေး ဟုတ်သည်ဖြစ်စေ မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ မခင်ချိုဥိးကို စိတ်နှလုံးကြေကွဲဖွယ်ရာ အစွမ်းကုန်ရက်စက်နည်းမျိုးနဲ့ ရက်စက်ခဲ့ခြင်း၊ မနန်းအောင်ထွေးကြည်တို့ကို နှမခြင်းမစာနာ ကျုးလွန်ခဲ့ခြင်း၊ ကိုထွန်းအောင်ကျော်တို့ကိုသတ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်း၊ လူမဆန်စွာ နှိပ်စက်ခဲ့ ခြင်းတွေကို “တစ်ကယ်” ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိက ပိုအရေးပါတယ်။
တစ်ကယ် ကျုးလွန်ခဲ့ရင် ဘာဒီမိုကရေစီအရေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် လက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီလိုလူတွေ အာဏာရရင် ပိုပေါ့လို လူမျိုးပဲ ထပ်ဖြစ်မှာမို့ပဲ။
လူကို လူလိုတောင် တန်ဖိုးမထားနိုင်တဲ့သူတွေကို အမြန်ဆုံးထုတ်ဖော်ဖို့က ABSDFတင်သာမက လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်လုံးမှာ တာဝန်ရှိတယ်။
ABSDF ရဲ့ သမိုင်းစင်ကြယ်မှုကသာလျှင် အေဘီအဖွဲ့ဝင်တွေမှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့မြင်တယ်။
ကျုပ်တို့လို မပတ်သက်ခဲ့ဘူးတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကတော့ လူ့မိစ္ဆာတွေရဲ့ လုပ်၇ပ်တွေနဲ့ ထောက်လှမ်းရေး ဟုတ်မဟုတ် အငြင်းပွားခြင်းကို ခွဲခြားစေချင်တယ်။
အဓိက အချက်သည် သူတို့ရဲ့ နှိပ်စက်ခဲ့ခြင်းဆိုတဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည် သိပ်ကို ရက်စက်လွန်းတဲ့အတွက် လူ့လောကကနေ အပြစ်ပေးကိုပေးရမယ်ဆိုတာကို ဆိုလိုရင်းဖြစ်တယ်။
ကိုကောင်း April 5, 2012
မှတ်ယူအားပေးခဲ့တဲ့ AB မှာ (AB မြောက်မှာ) လူလို မကျင့်ခဲ့ခြင်းကိုပြောနေတာပါ
“တို့ AB ကိုမထိနဲ့ AB ကိုမကောင်းပြောတဲ့သူမှန်သမျှ
ZIZI April 5, 2012
အတွေ့အကြုံ April 5, 2012
88လူထုအရေးတော်ပုံကာလဖြစ်စဉ်က စစ်တပ်အာဏာသိမ်းဖို့အတွက် NIB အဖွဲ့က မင်းမဲ့စရိုက်တွေ ဖြစ်ပေါ်အောင်ဖန်တီးခဲ့ပါတယ် ။ ဂိုဒေါင်ဖေါက် ၊ ခေါင်းဖြတ် ၊ လူသတ် ၊ အဆိပ်ခပ် စတဲ့ လုပ်ရပ်တွေပါ ။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ NIB ကနေ NLD အပါအ၀င် ကျောင်းသားအဖွဲ့တွေထံသူ့လူတွေစေလွတ်ခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒီအထဲမှာ သန်းထွန်းစိုး (ခ) တိုက်ပိတ် ၊ စပိတ် ၊ ပျံလွားတို့ဟာ NIB ကစေလွတ်တဲ့ လူတွေဖြစ်ပါတယ် ။ သန်းထွန်းစိုးကတော့ NLD ထံထိုးဖေါက်ဝင်ရောက်နေရာယူနိူင်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့်ရဲ့ ကိုယ်ရံအဖြစ် နေရာရခဲ့ ၊ ယုံကြည်မှုရအောင် လုပ်နိူင်ခဲ့ပါတယ် ။ သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က NLD ကို ဥပဒေဘောင်ထဲကနေ ဥပဒေပြင်ပရောက်အောင် လုပ်ဆောင်ဖို့ပါပဲ ။ ဒီလိုနဲ့ မြောက်ပိုင်းကျောင်းသားတပ် ပေါ်လာတော့ ကျောင်းသားတပ်ထဲကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ် ။ သူနဲ့အတူပါလာသူတွေက နန်းအောင်ထွေးကြည် ၊ ခင်ချိုဦးတို့ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ် ။ သန်းထွန်းစိုး တောတွင်းရောက်ပြီး အဲဒီတုန်းက စစ်အစိုးရလက်ဝေခံတွေထုတ်တဲ့ မျက်ခင်းသစ်စာစောင်မှာ သူ့ရဲ့ဓါတ်ပုံတွေနဲ့သတင်းတွေ ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ် ။ ဒီနောက် မြောက်ပိုင်းကနေပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆီတစ်ခေါက် ပြန်သွားခဲ့ပါသေးတယ် ။ အဲဒါကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရော NLD ကိုပါ စစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေက တောတွင်းနဲ့ဆက်သွယ်တယ်ဆိုပြီး စွပ်စွဲမေးမြန်းတာတွေလုပ်ပါတယ် ။ အလားတူပဲ မြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုလည်း ဒီလိုစွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ ထောင်ချနိူင်အောင် ထောက်လှမ်းရေးတွေက လုပ်ခဲ့တာတွေကို တွေ့ရပါတယ် ။
trueview April 5, 2012
ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းလေးရေးပါ ဆောင်းပါးရှင်ခင်ဗျား၊ အကယ်၍များ ကိုထွန်းအောင်ကျော် အပါအဝင် သေဆုံးသူတို့မှာ ရင်သွေး လေးတွေ ရှိခဲ့မယ်ဆိုလျှင် အဲဒီကလေးတွေရဲ့ မျက်လုံးလေးတွေကို မြင်ယောင်ကြည့်စမ်းပါဗျာ၊
Posted by admin on April 5, 2012 32 Comments
ခိုင်လုံတဲ့သက်သေနဲ့တကွ “ဂလုန်ဦးစောကို ကြိုးစင်တက်စေသတည်း” ဆိုတာနဲ့ပဲ အဆုံးသတ်ခဲ့ရင်တော့ နောက်နောင် လည်း တော်လှန်ရေးမျိုးဆက်အင်အားစုတွေကြား ဒေါင်းယောင်ဆောင်တဲ့ကျီးတွေရဲ့ လှည့်ကွက် အာကွက်ထဲမှာ ဒီလို ဆင်တူရိုးမှား အဖြစ်ဆိုးတွေနဲ့ ကြုံကြ ဆုံကြ ဖြိုခွဲခံကြရအုံးမှာ ဖြစ်သလို မိဘပြည်သူတွေလည်း သူတို့ရဲ့ သားသမီးတွေ ကို ထပ်ခါတလဲလဲ ဆုံးရှုံးနေကြရအုံးမှာ မလွဲပါဘူး။
အပိုင်း (၁) ၊ အပိုင်း (၂) ၊ အပိုင်း (၃) ၊ အပိုင်း (၄) ၊ အပိုင်း (၅)
32 Responses to “မြောက်ပိုင်းကျောင်းသားတပ်မတော်ကို ဖြိုခွဲသွားတဲ့ တရားခံအစစ်က ဘယ်သူတွေလဲ (၆)”
စမစ် April 5, 2012
မနေနိုင်လို့ ၀င်ပြောမိသူ April 5, 2012
မခင်ရွှေလှိုင်က သမာသမတ်ကျကျ သတ်တဲ့သူလည်းမဟုတ် ဖမ်းခံရတဲ့သူလည်းမဟုတ် ရိုးသား အစွဲကင်းစွာ ရေးနေတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခေါင်းဖြတ်သတ်ခံရမဲ့သူတွေ အကျီတွေကို ကိုယ်တ၀က်ချွတ်ထားတယ်ဆိုတုန်းကတော့ အကျီ